Hagayaasha Socdaalka Xalaal ee Paris - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Paris, caasimada cosmopolitan ee faransiiska, waa mid ka mid ah agglomerations ugu weyn Yurub, iyada oo 2.2 milyan oo qof ay ku nool yihiin cufan (105 km²) magaalada bartamaha, 7 milyan oo qof oo ku nool Metropole du Grand Paris (814 km²) iyo ku dhowaad 12 milyan oo qof ee magaalada weyn. Waqooyiga dalka ee webiga Seine, Paris waxay leedahay sumcadda inay tahay tan ugu quruxda badan uguna jacaylka badan magaalooyinka oo dhan, iyadoo ay ka dhex muuqdaan ururo taariikhi ah oo ay weli si baaxad leh ugu hartay dhinacyada dhaqanka, farshaxanka, moodada, cuntada iyo naqshadeynta.
Dubbed Magaalada Iftiinka (la Ville Lumière) iyo Caasimada moodada, waxay hoy u tahay qaar ka mid ah kuwa adduunka ugu qurxoon uguna raaxada badan naqshadeeyayaasha moodada iyo qurxinta, sida Chanel, Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Guerlain, Lancôme, L'Oreal, Iyo Clarins. Qeyb weyn oo magaalada ka mid ah, oo ay ku jiraan bangiyada Seine, waa goob UNESCO ah oo Hiddaha Dunida. Magaaladu waxay leedahay tirada labaad ee ugu badan ee maqaayadaha caanka ah ee Michelin adduunka (Tokyo ka dib, taas oo aad u ballaaran) waxayna ka kooban tahay astaamo caan ah oo fara badan sida Eiffel Tower, ka Arc de Triomphe, Notre Dame-de Paris, ka Louvre, ka Moulin Rouge iyo Basilique du Sacré Cœur, taasoo ka dhigeysa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago adduunka, iyadoo ku dhowaad 14 milyan oo dalxiisayaal ah sanadkiiba.
Magaalada Paris lafteeda waxaa si rasmi ah loogu qaybiyaa 20 degmo oo loo yaqaan degmooyinka, tirooyinka laga bilaabo 1 illaa 20 oo ah saacad dhinac kasta u socota oo ka socota Xarunta magaalada (oo loo yaqaan Kilomètre Zéro waxayna ku taalaa dhinaca hore ee Notre Dame). Degmooyinka waxaa loogu magac daray tiradooda. Waxaa laga yaabaa inaad, tusaale ahaan, joogtid "5aad", oo loo qori lahaa sida 5e oo af Faransiis ah. Meelaha 12-aad iyo 16-aad waxaa ka mid ah jardiinooyin waaweyn oo hareeraha magaalada ah, the Bois de Vincennes, Iyo Bois de Boulogne siday u kala horreeyaan.
Khariidada ugu wanaagsan ee aad ka heli karto Paris waxaa lagu magacaabaa “Paris Pratique par Arrondissement”Oo aad ku iibsan karto qiyaastii € 5 goob kasta oo warbaahineed. Waxay sahlaysaa in magaalada lagu dhex socdo. Macluumaadka dalxiiska ee kala duwan Xarumaha iyo hudheelada ku yaal Paris waxay sidoo kale siiyaan khariidado magaalo iyo metrooyin kala duwan oo bilaash ah oo ay ku jiraan dhammaan faahfaahinta lagama maarmaanka u ah dalxiiska.
Mid kasta oo degmada waxay leedahay dabeecad u gaar ah iyo xulashada soojiidashada safarka:
Bartamaha Paris (1aad arr., 2aad arr., 3aad.., 4aad.)
1e: Xarunta juquraafiga ee Paris iyo bar bilow u ah socotada. The Matxafka Louvre, ka Jardiinooyinka Tuulladaha, Vendôme, Les Halles Xarunta dukaamaysiga, Royal Palace, Comédie-Faransiis, théatre du Châtelet, Arc de Triomphe du Carrousel, iyo qeybta galbeed ee Dele de la Cité (Jasiiradda ugu weyn Paris). 2e: Xarunta ganacsiga degmada ee magaalada - the deeq waxbarasho (Suuqa Suuqa Paris), Opéra-Comique, Théâtre des Variétés, Marinka des Panoramas, Théâtre des Bouffes Parisiens iyo kii hore Bibliothèque Qaranka waa kuwan. 3e: Arkiifiyada Qaranka, Musée Carnavalet, Conservatoire des Arts et Métiers, Hôtel de Soubise, kii hore Temple qalcaddii, iyo woqooyiga, ka aamusan qayb ka mid ah Marais. 4e: Notre Dame-de Paris, ka Hôtel de Ville (Hoolka magaalada Paris), Hôtel de Sully, Beaubourg, Rue des Rosiers iyo Xaafadda Yuhuudda, Le Marais, Bazar de l'Hôtel de Ville, Mémorial de la Shoah, Xarunta Georges Pompidou, l'atelier Brancusi, Dhig des Vosges, Bibliothèque de l'Arsenal, Dhismaha Saint-Jacques iyo jasiiradda Paris Saintle Saint-Louis iyo sidoo kale nuska bari ee Dele de la Cité.
Banka bidix (5th arr., Arrth 6aad., 7th arr.)
5e: Tani waa qaybta bari ee Laatiin Quartier (Quarter Latin). Dhirta Dhirta, Muséum National d'Histoire Naturelle, Musée de Cluny, ka Panthéon, La Sorbonne, Montagne Sainte-Geneviève, Saintglise Saint-Séverin, La Grande Mosquée, Le Musée de l'AP-HP. 6e: Tani waxay ka kooban tahay qaybta galbeed ee Laatiin Quartier. Jardin du Luxembourg iyo sidoo kale golaha guurtida, Dhig Saint-Michel, Kaniisadda Saint-Sulpice iyo Saint-Germain-des-Shuban. 7e: Tour Eiffel iyo iyada Parc du Champ de Mars, Les Invalides, Musée d'Orsay, Golaha Qaranka iyo maamul hoosaadyadeeda, Cole Militaire, Musée du quai Branly, iyo dukaanka weyn ee Paris Le Bon Marché.
Gudaha Paris (8aad arr., Arr 9aad.)
8e: Champs Elysees, Arc de Triomphe, Goobta de la Concorde, le Palais de l'Élysée, Glise de la Madeleine,Matxafka Jacquemart-André, Gare Saint-Lazare, Grand Palais, Qolka yar, iyo qeybta galbeed ee Boulevard Haussman. 9e: Opera Garnier, Galeries Lafayette, Musée Grévin, Folies Bergère, iyo nuska bari ee Boulevard Haussman.
Bariga Paris (10th arr., Arrth 11aad., 12th arr.)
10e: Canal Saint Martin, Gare du Nord, Gare de l'Est, Porte Saint-Denis, Porte Saint-Martin, Wadada Brady, Marin du Prado, Iyo Glise Saint-Vincent-de-Paul. 11e: Baararka iyo makhaayadaha Rue Oberkampf, Bastille, Nation, Xaafadda Cusub ee Yuhuudda, Cirque d'Hiver, Iyo Saintglise Saint-Ambroise. 12e: Opéra Bastille, Bercy Beerta iyo Tuulada, Arena AccorHotels, Plantée Balanqaad, Quartier d'Aligre, Gare de Lyon, Cimetière de Picpus, Farshaxanka Viaduc des, ka Bois de Vincennes, Iyo Zoo de Vincennes.
Koonfurta Paris (13th arr., Arrth 14aad., 15th arr.)
13e: Quartier Asiatique (Qeybta Aasiya), Meesha d'Italie, La Butte-aux-Cailles, Bibliothèque Nationale de France (BNF), Gare d'Austerlitz, Soo saar des Gobelins, ka Olombikada, ka Tolbiac degmo, Pitié-Salpêtrière isbitaalka 14e: Cimetière du Montparnasse, Gare Montparnasse, Xabsiga La Santé, Denfert-Rochereau, Parc Montsouris, Stlé Charléty, Cité Internationale Universitaire de Paris, iyo albaabka laga galo catacombs-ka. 15e: Dalxiis Montparnasse, Porte de Versailles, Front de Seine, La Ruche, Parc André Citroën, Aquaboulevard iyo dhagaxtuur Saint-Lambert, Necker, Grenelle iyo bleach.
Galbeedka Paris (16aad arr., Arr 17aad.)
16e: Qaraqmeen de Chaillot, Musée de l'Homme, ka Bois de Boulogne, Cimetière de Passy, Parc des Princes, Musée Marmottan-Monet, Trocadero, Raadiyaha Maison de la, Iyo Wadada Foch. 17e: Congress Palace, Dhig de Clichy, Parc Monceau, Marché Poncelet, Iyo Square des Batignolles.
Hills Paris (18th arr., Arrth 19aad., 20th arr.)
18e: Montmartre, Pigalle, Barbès, Basilica ee Sacré Cœur, Saintglise Saint-Jean-de-Montmartre, Iyo Goutte d'Or waxaa laga heli karaa halkan. 19e: Cité des Sciences et de l'Industrie, Parc de la Villette, Bassin de la Villette, Parc des Buttes-Chaumont, City of Music, Kanaalka de l'Ourcq, Iyo Kanaalka Saint-Denis waxaa laga heli karaa halkan. 20e: Cimetière du Père-Lachaise, Parc de Belleville, iyo qardoofayaasha Belleville iyo Ménilmontant.
In kasta oo aysan si rasmi ah uga mid ahayn magaalada, degmadan dhismayaasha dhaadheer leh ee ku taal cidhifka galbeed ee magaalada waxay ku jirtaa liisasyo badan oo ay tahay inay soo booqdayaashu u arkaan dhismaheeda casriga ah iyo farshaxanka dadweynaha.
Ka baxsan Paris, xaafadaha hareeraha ka xiga waxaa loogu yeeraa La Banlieue. Jadwal ahaan, kuwa ku teedsan galbeedka Paris (Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Saint Cloud, Levallois-Perret, Versailles, Poissy) waa bulshooyin hodan ah oo degan, xitaa haddii xaafado dabaqadda dhexe ka mid ah laga heli karo. Kuwa waqooyiga ku nool ayaa ah bulshooyinka saboolka ah, oo badanaa ay ku badan yihiin soogalootiga. Kuwa koofurta ka jira waa kuwo aad u kala duwan, oo ay ku dhex milmeen xaafado qallafsan iyo kuwa liita iyo bulshooyin aad u taajirsan. Ugu dambeyntiina, kuwa bari inta badan waa dabaqadda hoose-dhexe oo ku milmay dhowr beelood oo ka tirsan dabaqadda sare.
Sababtoo ah filashooyin sare, jadwal ciriiri ah, iyo dadweyne fara badan iyo safaf dhaadheer inta lagu jiro xilli sare, magaalada waxaa laga yaabaa inay niyad jabiso dadka soo booqda qaarkood. Soo-booqdayaasha shisheeye ee leh aragti ku habboon Paris ayaa laga yaabi karaa caqabadaha caadiga ah ee booqashada magaalo weyn; dembiga, buuqa taraafikada, wasakheynta, qashinka, iyo kharashyada aadka u sarreeya. Xaaladda ugu xun, booqdayaashu waxay la kulmi karaan Cudurka Paris; xaalad nafsiyeed oo dhalanteed ah.
Si aad ugu raaxaysato waxyaabaha yaabka leh ee Paris, samee qorshooyin macquul ah. Xaddiga soojiidashada iyo astaamaha waa weyn; booqashada kaliya kuwa ugu caansan waxay qaadataa in ka badan toddobaad. Magaalada sidoo kale waxay leedahay waxbadan oo ay bixiso dadka waqtiga uqaata socdaalka xasilloonida dhabarka dambe. Haddii waqtigaaga magaalada uu gaaban yahay, dooro, oo keydi meelaha soojiidashada ah booqashadaada xigta.
Taariikhda Magaalada Paris
Paris waxay ku bilaabatay nolol sidii degitaankii Celto-Roman ee Lutetia on the Île de la Cité, jasiiradda Seine ee hadda ay qabsadeen Cathédrale de Nôtre Dame. Waxay ka qaadataa magaceeda hadda laga joogo magaca qabiilka ugu badan ee Gallo-Celtic ee gobolka, ka Parisii. Uguyaraan taasi waa tii Roomaanku ugu yeeray, markay is muujiyeen 52 BCE oo ay dhiseen magaaladoodii Lutetia dhinaca bidix ee Seine, halka loo yaqaan "Quarter Latin" xaafadda 5aad.
Roomaaniyiintu halkaan ayey ku sugnaayeen ilaa iyo intii kale meel kasta oo ka mid ah Boqortooyada Galbeedka, laakiin markay ahayd 508 CE way baxeen, waxaana lagu beddelay Clovis ee Franks ah, kaasoo Faransiisku u arko inuu ahaa boqorkoodii ugu horreeyey. Dhalashada Clovis, aka Carolingians, waxay ku hayeen gobolka Lutetian ee la ballaariyay ku dhawaad ​​500 sano iyada oo loo marayo weerarada Viking iyo masiibooyin kale, taas oo aakhirkii dhalisay in si qasab ah dadka badankoodu ugu laabtaan jasiiradaha oo ahaa Xarunta Celtic -kii asalka ahaa tuulo. The Capetian Duke of Paris ayaa loogu codeeyay inuu ku guuleysto kii ugu dambeeyay ee Carolingians -ka inuu noqdo Boqorka Faransiiska, taasoo hubineysa in magaalada ay noqoto meel sare oo dunida dhexe ah. Dhowrkii qarni ee xigay Paris waxay ku fidday bangiga midig wixii ay ahayd oo weli loogu yeero le Marais (Marsh). Waxoogaa dhismayaal ah laga bilaabo waqtigan waxaa lagu arki karaa xaafadda 4aad.
Xilliyadii dhexe ayaa sidoo kale goob joog u ahaa aasaaska Sorbonne. Iyada oo ah "Jaamacadda Paris", waxay noqotay mid ka mid ah Xarumaha ugu muhiimsan ee wax lagu barto Yurub - haddii aysan ahayn adduunka oo dhan, dhowr boqol oo sano. Inta badan machadyada weli ka kooban Jaamacadda waxaa laga helaa 5th, iyo 13th arrondissements.
Dabayaaqadii qarnigii 18aad, waxaa jiray muddo kacdoon siyaasadeed iyo mid bulsho oo ka dhacay Faransiiska iyo Yurub, xilligaas oo qaab dhismeedka dowladda Faransiiska, oo hore boqortooyo u lahaa mudnaanta feudal ee aristocracy iyo wadaadada Katooliga, ay ku dhacday isbeddel xagjir ah oo qaabab ku saleysan mabaadi'da Iftiiminta ah qaranimo, muwaadinnimo, iyo xuquuq lama-dhaafaan ah. Dhacdooyinka xusida mudan intii lagu gudajiray iyo kacaanki kadib waxay ahaayeen duufaantii degmooyinkii 4aad ee Bastille, iyo kor u kacii iyo dhicitaankii Napoleonic France. Qalalaasihii rabshadaha watay ee ka dhashay Kacaankii Faransiiska, ee ka dhashay welina lama yaqaan Passion des Français, ayaa soo ifbaxay casriga casriga ah ee Faransiiska.
The Paris ee maanta la dhisay dheer ka dib markii Capetian iyo ka dib Bourbon Kings ee France sameeyey calaamaddooda on Paris leh Louvre iyo Royal Palace, labadaba 1aad. Qarnigii 19aad, Minibar (Khamriga waa laga saaray), Cuntada Xalaasha ah waxaa laga dalban karaa Makhaayadaha Xalaal ee u dhow. eHalal waxay bixin doontaa liis faahfaahsan oo ku saabsan makhaayadaha Xalaal ee ku dhow dhowttyon von Hausmann ee ku saabsan dib -u -dhiska magaalada, iyada oo lagu darayo dariiqyada toosan ee tooska ah iyo in la beddelo qaar badan oo ka mid ah guryihii dhexe ee markaas jiray, oo leh dhismayaal dhaadheer iyo kuwo ka sii badan.
Mucjisooyin cusub ayaa yimid intii lagu jiray Belle Époque, sida loo yaqaan xilligii dahabiga ahaa ee reer Paris dhammaadkii qarnigii 19aad. Munaaraddii caanka ahayd ee Gustave Eiffel, khadadkii metro ee ugu horreeyay, inta badan jardiinooyinka, iyo laydhadhka waddooyinka (oo qayb ahaan la rumaysan yahay inay magaalada siiyeen astaanteeda "magaalada iftiinka") dhammaantood waxay ka yimaadeen xilligan. Ilaha kale ee taranka ayaa ka yimaada Ville Lumière, tixraac ma aha oo kaliya nidaamka iftiiminta korantada kacaanka ee laga hirgeliyay waddooyinka Paris, laakiin sidoo kale caannimada iyo auraha Nuurin magaaladu waxay kasbatay waagaas.
Qarnigii labaatanaad way ku adkayd Paris, laakiin mahadi haka gaadhin sidii ay u adkayd. Labada dagaal ee adduunka saameyn weyn ayey ku yeesheen dadka magaalada degan, laakiin ugu yaraan amarkii Hitler ee ahaa in magaalada la gubo waxaa iska indha tiray Jeneralka Jarmalka von von Choltitz, oo ay macquul tahay inuu ku qanciyay diblomaasi Swedish ah inay ka fiicnaan laheyd is dhiibida oo lagu xasuusto sidii badbaadiyihii Paris, halkii uu ka ahaan lahaa baabbi'iyihii. Dagaalkii ka dib, magaaladu si dhakhso leh ayey u soo kabsatay markii hore, laakiin waxay gaabis noqotay sannadihii 1970-naadkii iyo 1980-meeyadii markii Paris ay bilawday inay la kulanto qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo waajaha magaalooyinka waawayn meel kasta: wasakhda, guryo yaraanta, iyo mararka qaarkood tijaabooyinka fashilmay ee cusboonaysiinta magaalooyinka.
Si kastaba ha noqotee, Dagaalkii Dagaalkii Paris kadib wuxuu ku riyaaqay koritaan aad u ballaaran sida magaalo dhaqammo badan leh, oo leh soogalooti cusub oo ka kala yimid daafaha adduunka, gaar ahaan La Francophonie, oo ay ku jiraan inta badan waqooyiga iyo galbeedka Afrika iyo sidoo kale Indochina. Muhaajiriintaani waxay keeneen cuntooyinkooda iyo muusiggooda, oo labaduba ah kuwa xiisaha ugu badan u leh safarleyda badan.
Socdaalka iyo dhaqamada kaladuwan ayaa sii socda qarniga 21aad iyadoo si muuqata kor ugu kacday imaatinka dadka ka yimid Latin America, gaar ahaan Mexico, Colombia, iyo Brazil. Dabayaaqadii 1990-meeyadii, way adkayd in laga helo cunno wanaagsan oo reer Mexico ah magaalada Paris, halka maanta ay jiraan daraasiin fursado oo laga helo dadka hoose. taquerias bannaanka degmooyinka makhaayado fadhiisasho fiican oo ku yaal boulevards. Dhanka kale muusiga Latin-ka ee salsa ilaa samba ayaa ah carada oo dhan (si fiican, oo ay weheliso Paris lounge electronica).
Qarnigii 21-aad ayaa sidoo kale lagu arkay horumar ballaaran oo ku saabsan nolosha guud ee magaalada Paris, iyadoo xafiiska duqa magaalada uu xooga saarayo yareynta wasakheynta iyo hagaajinta xarumaha qaababka qafiifka ah ee gaadiidka oo ay ku jiraan shabakad aad u ballaaran oo waddooyinka baaskiilka ah, degmooyin waaweyn oo lugeynaya iyo khadad metro oo deg deg ah. Soo-booqdayaasha sida caadiga ah u yimaada baabuur-ka-yar waa ka-faa'iideystayaasha siyaasadaha sida ugu badan ee Parisians-ka laftoodu.
Paris waxay leedahay cimilo badeed leh qabow qabow iyo xagaa diiran. Saamaynta dhexdhexaadka ah ee Badweynta Atlantik waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo xakameyn lahaa heerkulka daran ee inta badan galbeedka Yurub, oo ay ku jiraan Faransiiska. Xitaa bisha Janaayo, bisha ugu qabow, heerkulku marwalba wuu dhaafeyaa barta barafka oo celcelis ahaan sareysa 7 ° C (45 ° F). Barafku kuma badna magaalada Paris, inkasta oo uu dhawr jeer hoos u dhici doono sanadkiiba, iyada oo duufaanno waaweyn oo baraf ahi ay dhacaan dhawrkii sannaba mar. Inta badan roobabkii Paris waxay ku yimaadaan qaab roobab fudud sanadka oo dhan.
Xilliga kulaylaha Paris waa diiran oo wacan, celcelis ahaanna waa 25 ° C (77 ° F). Guga iyo deyrta ayaa caadi ahaan qabow oo qoyan.
Paris waxaa ka shaqeeya laba garoon diyaaradeed oo caalami ah - wixii macluumaad dheeraad ah, oo ay ku jiraan waqtiyada imaanshaha / bixitaanka, hubi goobaha rasmiga ah.
Madaarka Caalamiga ah ee Charles de Gaulle (Roissy)
Madaarka Paris Charles de Gaulle waa garoonka diyaaradaha ee ugu weyn magaalada. Waxay ku taal waqooyiga Paris waxayna kuxirantahay tareen, bas iyo taksi. Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan imaatinka iyo ka bixitaanka Paris ee garoonkan fadlan la tasho qodobka ugu muhiimsan ee kor ku xusan.
Soo Koobid Transit: Khadadka tareenka RER "B" wuxuu isku xiraa garoonka diyaaradaha CDG ilaa bartamaha Paris waana doorashada ugu dhaqsaha badan uguna dhaqaalo badan inta badan socdaalayaasha. Calaamadaha garoonka diyaaradaha ayaa kuu tilmaami doona barxadda. Kiisaska elektaroonigga ah ee iskaa u adeegidda ayaa tikidhada iibiya. Kiosques waxay ku bixiyaan adeegyo luqado kala duwan, oo ay ku jiraan Ingiriisiga. Tareennada qaar waxay istaagi doonaan saldhig kasta oo ku teedsan Paris. Tareenka dheereeya oo joogsiyo yar ayaa la heli karaa inta lagu jiro saacadaha ka baxsan shaqada. Saldhigyada Gare du Nord, Châtelet-Les Halles, Saint-Michel Notre-Dame, Luxembourg, Port-Royal, Denfert-Rochereau iyo Cité Universitaire ayaa had iyo jeer loo adeegaa. Tigidhadaadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku wareejiso mid ka mid ah saldhigyada kor ku xusan ee loo maro Metro iyo khadadka kale ee RER ee ku yaal Paris si aad u dhammaystirto safarkaaga. Safarka hal-dhinac wuxuu ku kacayaa .10.30 7.20 oo dadka waaweyn ah, € 4 oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 9 - 4, iyo bilaash carruurta ka yar XNUMX sano.
Ikhtiyaar kale waa RoissyBus oo ka baxa Opéra. Basaskaasi waa kuwo isdabajoog ah.
Haddii aad timaadid Madaarka CDG habeenkii waxaad u baahan doontaa bas Noctilien ah si aad u tagto Xarunta Magaalada. Basku wuxuu joogsadaa dhammaan saddexda xarumood (ee 2F terminal wuxuu noqon doonaa heerka labaad ee qaybta bixitaanka, way adag tahay in la helo, laakiin dhab ahaantii wuu jiraa). Basku wuxuu baxaa 30kii daqiiqo kasta wixii ka dambeeya 00:30 (fiiri jadwalka). Basaska aad ubaahantahay waa N140 iyo N143; qiimaha waa 4 T + tikidhada (€ 8 haddii lagu iibsado markabka).
Madaarka Caalamiga ah ee Orly
Garoonka Diyaaradaha Paris Orly, garoonkan caalamiga ah ee duugga ah wuxuu ku yaal koonfur-galbeed magaalada waxaana inta badan loo adeegsadaa Air France bixitaannada gudaha, iyo sidoo kale dhowr dhoofyo caalami ah, inta badan aagagga loo maro meelaha ku teedsan badda Mediterranean-ka. Waxay ka kooban tahay laba terminaal: Terminal Sud (koonfur) iyo Terminal Ouest (galbeed) oo ku xidha tareenka fudud. Gegada diyaaradaha waxay kuxirantahay Paris bas iyo tareen fudud. Faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan imaatinka iyo ka bixitaanka Paris ee garoonkan fadlan la tasho qodobka ugu muhiimsan ee kor ku xusan.
Orly waa qiyaastii 25-35 min laga bilaabo Paris iyada oo loo marayo OrlyBus, kaas oo ka taga Métro Denfert-Rochereau (khadka 6); qiimaha waa € 8 (laga bilaabo sanadka 2017). Basaska ayaa jira 8-15 daqiiqo kasta oo ka yimaada Orly Sud (Platform 4) waxayna ku istaagaan Orly Ouest iyagoo ku sii jeeda magaalada. Tigidhada waxaa laga iibsan karaa miiska laga soo iibsado ee u dhow aagga sheegashada shandadaha ama si toos ah miiska loogu talagalay Platform 4. Tikidhada waxay u baahan yihiin in lagu ansixiyo hal mar baska. Ikhtiyaar kale ayaa ah wadada weyn ee loo yaqaan 'T7' oo kuu qaadaysa Métro Villejuif - Louis Aragon (Metro 7) 30 daqiiqo, laakiin waxay ku joogsataa jidka, waxaana loogu talagalay rakaabka oo aan loogu talagalin dadka safarka ah. Tramway T7 waxay ku kacaysaa tigidh T + (metro / bus / tram) ah (€ 2 haddii baska lagu iibsado) waxayna socotaa 10 daqiiqo kasta, iyadoo la joojinayo heerka garoonka -1 Kaararka ka hadlaya aagagga 1-4 waa la oggol yahay, intaas mooyee Tigidhada Jeunes ansax kuma aha Orlybus.
Wadada tareenka ee garoonka diyaaradaha waxaa gaari kara laanta koonfureed ee khadka RER-B ee ka amba baxa magaalada Paris dhanka Massy-Palaiseau ama Saint-Rémy-les-Chevreuse (ma Robinson) At Antony xarunta RER-B khadka wuxuu ku xiraa Orlyval tareenka fudud ee qaada rakaabka labada garoon ee garoonka diyaaradaha. Orlyval waxay socotaa 4-7 daqiiqo kasta waxayna ku kacaysaa € 12.05 (laga bilaabo 2017) wareejinta Paris, oo ay ku jiraan iskuxirka saldhigyada metro ee aagga dhexe. RER B ka Antony wuxuu dhex maraa Paris ilaa Aéroport Charles de Gaulle. Ogsoonow in kaararka gaadiidka dadweynaha ay yihiin ma aqbalay on Orlyval (laakiin Booqashada Paris waxay ku shaqeyneysaa Orlyval, soonaha 1-3-baasna waxay ansax ku yihiin inta u dhaxeysa Antoon iyo Paris).
Gegada diyaaradaha waxaa sidoo kale gaari kara tareenada RER-C oo ka tagaya Paris kuna socda Massy ama Pont de Rungis. Ka soo Pont de Rungis-Aéroport d'Orly Rakaabka tareenka waxay garoonka diyaaradaha ku yimaadaan 10 daqiiqo gudahood baska xamuulka qaada. Safarka ka imanaya magaalada Paris ilaa garoonka diyaaradaha ee RER-C iyo baska ayaa ku kacaya .6.85 2017 (laga bilaabo 1). Kaararka daboolaya aagagga 4-XNUMX waa la aqbalay.
Adeegga internetka Wi-Fi waa lacag la’aan.
Beauvais (), masaafo woqooyi ka xigta magaalada, waa garoon diyaaradeed oo yar oo ay adeegsadaan qaar ka mid ah shirkadaha qiimaha jaban sida Ryanair iyo WizzAir. Sida garoomo diyaaradeed oo yaryar oo badan waxaa ku jira kaarato ku shaqeeysa qaab duulimaad garoonka ka shaqeeya oo ku xiraya dhulka hoostiisa at Porte Maillot saldhigga Basasku way socdaan xitaa saacadaha yar yar ee subaxnimada (06:00). Basasku waxay tagayaan 20 daqiiqo duullimaad kasta markay timaaddo, iyo dhowr saacadood ka hor duulimaad kasta oo ay tegeyso. Waqtiyada saxda ah waxaa laga heli karaa websaydhka garoonka diyaaradaha ee Beauvais. Safarku wuxuu qaadan doonaa ilaa saacad xaalada taraafikada oo wanaagsan, wuxuuna ku kacayaa € 16 waddo kasta, ma jiro qiimo jaban oo loogu talagalay carruurta ka weyn 2 sano. Ilaa iyo intaad kireysato gaari kani waa habka ugu macquulsan ee loogu dhaqaaqo dhanka Paris, sidaa darteed sababta garoonka diyaaradaha ay uga qaadaan qiimaha ay sameeyaan. Beddelka ayaa ah adeegga tareenka ee u dhexeeya Gare du Nord iyo Beauvais, iyo tareen isku xidha ama tagaasida garoonka diyaaradaha. Safarkan ayaa qaali ah isla markaana qaata waqti dheer. Ka maqnaanshaha baska xamuulka waxay la micno noqon kartaa qiimaha tagaasiga oo si fiican uga badan € 100.
Gaadiidka dadweynaha ka sokow, Air France waxay ku shaqeysaa gawaarida u dhexeeya Charles de Gaulle iyo Paris (€ 17), Orly iyo Paris (€ 12) iyo inta u dhaxeysa labada garoon diyaaradeed (€ 20). Qiimo-dhimis ayaa lagu dabaqayaa dhalinyarada safarka ah / kooxda safarka ah iyo kuwa internetka ka ganacsada. Haddii aad leedahay duulimaadyo isku xiraya Air France oo soo degaya kana tagaya garoomo diyaaradeed oo kala duwan, weli waxaad guud ahaan u baahan tahay inaad soo qaadatid shandadahaaga ka dib markaad soo degto, ku qaado midkood Air France ama taksi (oo si fudud looga heli karo dhammaan garoomada diyaaradaha) garoonka kale iyo jeegga- markale. Isku soo wada duuboo waxay qaadan kartaa ilaa 2 saacadood, gaar ahaan haddii taraafikada ay tahay tan ugu xun. Sidoo kale waa wax iska luma in waqtiga lumiyo inta ay diyaarada ka soo dageyso, maadaama rakaabku ay inta badan u baahan yihiin inay ka degaan wadada laamiga ah isla markaana ay raacaan basas geyn doona garoonka. Hubso inaad haysato waqti kugu filan inta udhaxeysa duulimaadyada si aad uhesho xiriiriyahaaga. Xisaabaadka soo-galitaanka ayaa sida caadiga ah xirma 30 daqiiqo ka hor inta aysan duullimaadku ambabixin, waana ka sii dheer tahay haddii duulimaadyada ay yihiin kuwa caalami ah.
Khariidad muujineysa waqtiyada safarka tareenka ee looga baxayo ama looga imaanayo Paris ilaa 2005
Saldhigyada tareenka markay ka baxaan Khariidadda Paris oo muujinaya aagagga Faransiiska looga adeegto saldhigyada Paris
Paris si fiican ugu xiran Yurub inteeda kale tareen. Waxaa jira toddobo saldhig oo terminus oo kala duwan bartamaha Paris iyo inkasta oo aysan kulligood isku degmo ahayn, haddana dhammaantood waxay ku xiran yihiin shabakadaha Metro iyo RER. Waxaad u badan tahay inaad horay u sii ogaato saldhigga tareenkaagu imanayo, si aad si wanaagsan ugu doorato hudheel una qorsheyso gaadiid magaalada dhexdeeda ah.
Gare du Nord, (10aad), Métro: Gare du Nord - TGV waxay tareenka u kala gooshaa Beljim, Holland, galbeedka Jarmalka (Aachen, Cologne, Düsseldorf, Duisburg, Essen) (Thalys), iyo Boqortooyada Ingiriiska (Eurostar oo ka timaadda London iyo Kent) iyo qaar ka mid ah tareenada ka yimaada Waqooyiga Yurub.
Gare d'Austerlitz, (13aad), Métro: Gare d'Austerlitz - tareenada joogtada ah ee ka taga ama ka yimaada bartamaha iyo koonfur-galbeed ee Faransiiska (Orléans, Limoges, Toulouse the long way) iyo tareenada badankood habeenkii.
Gare de l'Est, (10aad), Métro: Gare de l'Est - TGV ilaa iyo ka tagida Luxembourg, ICE / TGV ilaa iyo ka imanaya koonfurta Jarmalka (Saarbrücken, Kaiserslautern, Mannheim, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Augsburg, iyo Munich), tareenka habeenka RZD ee tagaya kana imanaya Russia (Moscow), Belarus (Minsk), Poland (Warsaw, Poznan) iyo Jarmalka (Berlin, Erfurt).
Gare de Lyon, (12aad), Métro: Gare de Lyon - tareenada caadiga ah iyo TGV ee taga kana yimaada koonfurta iyo bariga France: French Alps, Marseille, Lyon, Dijon, Switzerland (Basel, Geneva, Lausanne, Bern, Zurich), Monaco, iyo southwest Germany (Müllheim, Freiburg). Waxa kale oo aad maalinta (Turin, Milan) iyo tareenada habeenka (Milan, Verona, Padua, Venice) ka qaadi kartaa kana bixi kartaa Talyaaniga.
Gare de Bercy, (12aad), Métro: Bercy. Tareennada joogtada ah ee Auvergne iyo Bourgogne-Franche-Comté.
Gare St Lazare, (8aad) Meesha: St-Lazare - tareenka aadaya kana imanaya Normandy Hoose, Normandy Sare.
Gare Montparnasse, (15aad), Métro: Montparnasse-Bienvenüe - TGV iyo tareenada joogtada ah ee ka imanaya galbeedka iyo koonfur-galbeed ee Faransiiska (Tours, Brest, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse sida ugu dhakhsaha badan iyo Irún Spain). Gare Vaugirard waa kordhinta Gare Montparnasse.
The SNCF (Hay'adda tareenka qaranka ee Faransiiska) waxay ku shaqeysaa ficil ahaan dhammaan tareennada gudaha Faransiiska marka laga reebo Eurostar ilaa London, Thalys ilaa Brussels iyo Holland iyo Jarmalka, iyo adeegyo qiimo jaban sida iDTGV iyo Ouigo (in kasta oo ay leeyihiin SNCF, waxaa loo arkaa inay yihiin shirkado tareen oo kala duwan). Waxa kale oo jira dhowr khadad maxalli ah oo daneynaya dalxiis sare oo si gaar ah loo leeyahay. Dhamaan tikidhada SNCF, Eurostar iyo Thalys waxaa laga iibsan karaa saldhigyada tareenka, xafiisyada magaalada iyo wakaaladaha socdaalka (lacag dheeri ah). SNCF waxay ku tiirsan tahay wakaaladaha safarka iibinta tikidhada khadka tooska ah, midka ugu weyni waa Safarrada SNCF (waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho kaar jilicsan oo karti leh, waana inaad haysataa midka loo isticmaalo inuu ku bixiyo tikidhada si aad ugala soo baxdid tikidhada dhabta ah ee saldhig kasta oo SNCF ah , Kaararka ajnabiga ah qaarkood lama aqbali doono) iyo Tareenka (oo si fudud loo isticmaali karo, waxaadna tikitkaaga kala soo bixi kartaa miiska ama mashiin kasta adoo magacaaga kaliya wata iyo tixraaca jaale). Waxa kale oo aad tikidhada ka heli kartaa wakaaladaha safarka ee khadka tooska ah iyo tooska ah Waad ballansan kartaa oo aad iibsan kartaa tikidhada illaa saddex bilood ka hor. Waxaa jira qiimo dhimis muhiim ah haddii aad ballansatid toddobaadyo kahor. Qiimaha tikidhada la dhimay way kala duwan yihiin maalin kasta iyo tareen kasta waxaana loo isticmaali karaa oo keliya tareenka boos celinta loogu talagalay.
Tareennada u dhexeeya Paris iyo koonfurta Jarmalka (Frankfurt, Stuttgart, Munich) iyo sidoo kale Marseille-Frankfurt TGV waxaa si wada jir ah u wada shaqeeya SNCF iyo Deutsche Bahn, laakiin mid kasta oo ka mid ah labada hawl wade ayaa tikidhada ku iibin doona qiime u gaar ah! Hubso inaad hubiso qiimaha uu ku soo bandhigay hawlwadeen kasta intaadan iibsan, ama isticmaal Tareenka maaddaama ay si otomaatig ah isu barbar dhigayaan qiimaha SNCF iyo DB.
Waxaa jira dhowr nooc oo noocyo kala duwan ah oo xawaare sare leh iyo tareeno caadi ah:
ter: Tareenada gobolada (Tareenka Express Régional); tikidhada ugu jaban, in kasta oo qiimayaashu isbeddelayaan waqtiga bixitaanka (iyo maalinta bixitaanka sidoo kale). TER mararka qaarkood way gaabis tahay, oo waxay istaagtaa ku dhowaad dhammaan saldhigyada. Tigidhada TER ee laga soo iibsado xarunta tareenka waxay shaqeynayaan labo bilood laga bilaabo taariikhda lagu sheegay tikidhada, ilaa iyo intaad ku safreyso waqtiga saxda ah (“période bleue”, kan ugu raqiisan, “période blanche”, saacadaha baahida badan leh) Boos celis malahan, markaa goor hore imaada ama waxaa laga yaabaa inaad safarto kursi la'aan.
Isku-duwaha: Xidhmo kuwii hore ah Isku-duwaha, Téoz, Iyo Lunéa qaybaha tababarka. Waxaa jira laba nooc: tareenada caadiga ah, oo qiimahoodu la mid yahay TER iyo tareenada aad isku arki doontid haddii aad haysato tareennada tareennada Yurub ama baasaska tareenka Yurub oo aadan rabin inaad bixiso lacag dheeri ah boos celin, iyo ah tareenka à réservation obligatoire, kuwaas oo u baahan boos celin isla markaana qiimo ahaan ka duwan kan caadiga ah Isku-duwaha tareenada.
TGV: Tareenada xawaaraha dheereeya ee Faransiiska lagu yaqaan ee adduunka oo dhan (Tareenadu à Grande Vitesse) aad ugu soo noqnoqdaa dhanka koonfur bari Nice (5-6 saac), Marseille (3 saac) iyo Avignon (2.5 saac), bariga Geneva (3 saac) ama Lausanne, Switzerland, Dijon (1 saac 15 daqiiqo) iyo Strasbourg (1 saac 45 daqiiqo), koonfur-galbeed Bordeaux (3 saac), galbeedka Rennes (2 saac) iyo waqooyiga Lille (1 saac). Thalys ilaa Brussels (1 saac 20 min) waxay isticmaalaan tareenno ku dhowaad isku mid ah. Boos celintu waa waajib.
ICE: Tareenada xawaaraha dheereeya ee Jarmalka, oo ka shaqeeya inta badan adeegyada u dhexeeya Paris iyo Frankfurt.
Thalys: Adeeg tareen xawaare sare ku socda oo maalin kasta u socda / ka tagaya Netherlands, Belgium iyo Jarmalka. Waxay noqon kartaa waxoogaa qaali ah marka la barbar dhigo tareenada caadiga ah, laakiin qiimo jaban haddii aad horay u iibsato.
IZY: Waa shirkad hoosaad ka ah Thalys, oo bixisa gaabis (~ 2 hr 15 min) laakiin tareeno ka raqiisan inta u dhaxeysa Paris iyo Brussels.
Eurostar: Adeegga Eurostar wuxuu isku xiraa Paris iyo London St. Pancras si toos ah iyo Brussels si aan toos ahayn, iyo sidoo kale meelo badan oo kale oo si dadban si dadban ugu sii maraya adeegyada tareennada kala duwan ee galbeedka Yurub. Waqtiga safarka ee u dhexeeya Paris Gare du Nord iyo London St Pancras celceliska celceliska 2hr 15 min. Kaararka Eurail iyo InterRail waa ma ansax ah tareenkan, inkasta oo dadka haysta kaarka ay ka faa'iideysan karaan qiimo dhimis. Waa inaad timaado saldhigga 30 daqiiqo kahor bixitaanka tareenka si aad u dhameystirto amniga iyo xakameynta baasaboorka.
Ouigo - shirkad hoosaad ka ah SNCF oo maamusha TGVs oo leh khariidad fasal labaad ah oo loogu talagalay loona suuq geeyo adeeg qiimo jaban, badanaa u adeegta saldhigyada tareenka sare oo leh lacag yar oo laga helo saldhigga sida Marne-la-Vallée (Disneyland)
Thello: tareennada habeenkii ee u dhexeeya Paris iyo Venice (oo leh joogsiyo dhexdhexaad ah).
RŽD: Tareennada Ruushka waxay ka shaqeeyaan tareen hurdo oo u dhexeeya Paris iyo Moscow oo joogsada Jarmalka (Karlsruhe, Frankfurt / Main, Erfurt, Berlin, Frankfurt / Oder), Poland iyo Belarus.
Kala wareejinta saldhigyada tareenka
Laga soo bilaabo Gare d'Austerlitz
Gare d'Austerlitz - Gare de Bercy (15 daqiiqo): Bas 24 ilaa École Vétérinaire de Maisons-Alfort.
Gare d'Austerlitz - Gare de l'Est (20 daqiiqo):, jihada Bobigny.
Gare d'Austerlitz - Gare Montparnasse (25 min): jihada Boulogne, isbadal dhanka Odéon dhanka jihada Mairie de Montrouge. Haddii kale, Baska 91 ilaa Montparnasse, ka deg Gare Montparnasse xafiiska tikidhada, tareennada maxalliga ah iyo tareennada masaafada u dheer; Kaga deg istaaga ugu dambeeya Montparnasse 2 – gare TGV hadii tareenkaagu ka baxo gare de Vaugirard ama aad gaarto gawaarida hore ee tareenada TGV.
Gare d'Austerlitz - Gare de Lyon: waa socod 5- ilaa 10-daqiiqo ah (raac calaamadaha). Haddii kale, raac baska 91 ee xarunta hore (isla waddada dhinaceeda ah) dhanka Bastille oo ka deg Gare de Lyon – Diderot.
Gare d'Austerlitz - Gare du Nord (20 daqiiqo): jihada Bobigny.
Gare d'Austerlitz - Gare Saint-Lazare (25 daqiiqo): jihada Boulogne, isbadal Sèvres-Babylone si loogu jiheysto Aubervilliers – Front Populaire; haddii kale 10 daqiiqo u soco Gare de Lyon ka dib u qaado jihada Gare Saint-Lazare.
Laga soo bilaabo Gare de l'Est
Gare de l'Est - Gare d'Austerlitz (20 daqiiqo): jihada Place d'Italie.
Gare de l'Est - Gare de Bercy (25 daqiiqo): jihada Mairie de Montrouge, ku istaag Châtelet, ka dib jihada Olympiades, ku joogso Bercy.
Gare de l'Est - Gare de Lyon (20 daqiiqo): jihada Place d'Italie, ku istaag Quai de la Rapee oo raac calaamadaha dadka lugeynaya ilaa Gare de Lyon. Haddii kale, isla jihada loo aado Bastille ka dibna u jiheeya Château de Vincennes ilaa Gare de Lyon.
Gare de l'Est - Gare du Nord (8 daqiiqo): jihada Bobigny ama Metro 4 jihada Porte de Clignancourt. Lug ahaan, sidoo kale waxay ku saabsan tahay 8 daqiiqo, laakiin waa inaad fuushaa jaranjaro jaranjaro ah.
Gare de l'Est - Gare Montparnasse (30 daq): jihada Mairie de Montrouge.
Gare de l'Est - Gare Saint-Lazare (15 daqiiqo): RER E jihada Haussman – Saint-Lazare; beddelkeed (socod yar, laakiin jaranjarooyin badan) jihada Mairie de Montrouge, ka beddel Strasbourg-Saint-Denis jihada Pont de Levallois – Bécon.
Laga soo bilaabo Gare de Lyon
Gare de Lyon - Gare d'Austerlitz: waa socod 5- ilaa 10-daqiiqo ah (raac calaamadaha). Haddii kale, raac baska 91 ee ku aaddan Montparnasse.
Gare de Lyon - Gare de Bercy (Daqiiqadaha 15): Gawaarida bilaashka ah waxay maraan inta udhaxeysa labada nus saac kasta haddii aad haysato tikidh tareen oo SNCF ah oo ay kujirto kala wareejinta labada saldhig. Beddel ahaan, u jihada Olympiades ilaa Bercy.
Gare de Lyon - Gare de l'Est (25 daqiiqo): ilaa Chatelet, jihada St. Lazare oo ay ku xigto jihada Porte de Clignancourt.
Gare de Lyon - Gare Montparnasse (30 daq): Baska 91 ilaa Gare Montparnasse. Ikhtiyaar kale ayaa ah Chatelet, jihada St. Lazare oo ay ku xigto jihada Mairie de Montrouge.
Gare de Lyon - Gare du Nord (20 daqiiqo): RER Jihada Saint-Germain-en-Laye / Cergy Le Haut / Poissy Châtelet Les Halles ka dibna jihada RER B Aéroport Charles de Gaulle / Mitry Claye ilaa Gare du Nord (dhinaca kale ee madal); haddii RER A uusan shaqeyneynin qaado RER D oo aad Orry la Ville or Creil; labaduba waxay aadi doonaan Gare du Nord.
Gare de Lyon - Gare Saint-Lazare (15 daqiiqo): jihada Saint-Lazare.
Ka yimid Gare Montparnasse
Gare Montparnasse - Gare d'Austerlitz (25 min): jihada Porte de Clignancourt, isbadal dhanka Odéon dhanka Austerlitz. Haddii kale, raac Bas 91 (waxyar ka dhakhso badan haddii aysan taraafikada ku dhicin mooyee).
Gare Montparnasse - Gare de Lyon (30 daqiiqo): ilaa Chatelet, jihada Porte de Clignancourt oo ay ku xigto jihada Olympiades
Gare Montparnasse - Gare du Nord AMA Gare de I'Est (30 daq): jihada Porte de Clignancourt
Gare Montparnasse - Gare Saint-Lazare (15 daqiiqo): jihada Asnières / Genevilliers ama Saint-Denis. (sidoo kale waa suurtagal laakiin waxay u baahan tahay socod dheer laga bilaabo xarunta tareenka Montparnasse ilaa nuska woqooyi ee xarunta mitrooga. Waa ikhtiyaar wanaagsan markaad ka imaaneyso aagga dukaameysiga ee u dhow boulevard Montparnasse.
Ka yimid Gare du Nord
Gare du Nord - Gare d'Austerlitz (20 daqiiqo): jihada Place d'Italie.
Gare du Nord - Gare de Bercy (25 daq): Raac tilmaamaha Gare de Lyon, ka dibna u leexo jihada Olympiades Bercy.
Gare du Nord - Gare de l'Est (8 daqiiqo): jihada Mairie de Montrouge. Lug ahaan, sidoo kale waxay ku saabsan tahay 8 daqiiqo, laakiin waa inaad ka degtaa jaranjaro jaranjaro ah.
Gare du Nord - Gare de Lyon (20 daqiiqo): RER D jihada Melun / Malesherbes; haddii kale, haddii RER D uusan shaqeynin, jihada RER B Robinson / Saint-Rémy-les-Chevreuse ilaa Châtelet Les Halles ka dibna RER A jihada Marne-la-Vallée / Boissy-Saint-Léger ilaa Gare de Lyon (isbedelkan oo keliya waxay ku lug leedahay ka degida tareenka RER B iyo raacida tareenka 'RER A dhinaca kale ee isla barxadda')
Gare du Nord - Gare Montparnasse (30 daq): jihada Mairie de Montrouge
Gare du Nord - Gare Saint-Lazare (15 daqiiqo): RER E jihada Haussman – Saint-Lazare; haddii kale (tartiib tartiib, socod yar, laakiin jaranjarooyin badan) jihada Mairie de Montrouge, ka beddel Strasbourg-Saint-Denis jihada Pont de Levallois – Bécon.
Ka yimid Gare Saint-Lazare
Gare Saint-Lazare - Gare d'Austerlitz (25 min): jihada Mairie d'Issy, isbadal ka dhaca Sèvres-Babylone si loo helo jihada Austerlitz; haddii kale loo weecdo Olympiades ilaa Gare de Lyon, ka dibna u gudub wabiga Seine illaa Gare d'Austerlitz (10 daqiiqo socod ah).
Gare Saint-Lazare - Gare de Bercy (20 daqiiqo): jihada Olympiades.
Gare Saint-Lazare - Gare de l'Est (15 daqiiqo): RER E jihada Chelles – Gournay, Villiers-sur-Marne ama Tournan; beddelkeed (socod yar, laakiin jaranjarooyin badan) jihada Gallieni iyo is beddelka Strasbourg-Saint-Denis ee jihada Porte de Clignancourt.
Gare Saint-Lazare - Gare de Lyon (15 daqiiqo): jihada Olympiades.
Gare Saint-Lazare - Gare Montparnasse (15 daqiiqo): jihada Châtillon – Montrouge. (sidoo kale waa suurtagal laakiin waxay u baahan tahay socod dheer laga bilaabo xarunta tareenka Montparnasse ilaa nuska woqooyi ee xarunta mitrooga. Waa ikhtiyaar wanaagsan markaad ka imaaneyso aagga dukaameysiga ee u dhow boulevard Montparnasse.
Gare Saint-Lazare - Gare du Nord (15 daqiiqo): RER E jihada Chelles – Gournay, Villiers-sur-Marne ama Tournan; haddii kale (tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah) jihada Gallieni oo ka beddel Strasbourg-Saint-Denis dhanka Porte de Clignancourt
Laga soo bilaabo Gare de Bercy
Inta badan saldhigyada tareenka, u aad Gare de Lyon oo raac tilmaamaha laga bixiyo Gare de Lyon.
Gare de Bercy - Gare d'Austerlitz (15 daq): bas 24 kusii jeeda gare Saint-Lazare.
In kasta oo khadadka basaska gudaha si adag loo xakameeyay illaa 2015, khibrad la mid ah tii Jarmalka, halkaasoo basaska Intercity laga xaddiday 2013, waxay horseed u noqdeen suuq aad u tartan badan oo dhaqso u koraya. Shirkadaha u adeega Paris waa:
Eurolines, (bus depot) 28 Avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet (Waxa xigta Xarunta Ganacsiga Auchan Bel Est, Gallieni Metro stop, dhanka bari ee tareenka). Shirkad basaska trans-yurub ah oo bixisa safarro looga baxo ama looga yimaado Paris. Guud ahaan waxay bixisaa qiimayaal si aad uga raqiisan tareenka oo ay ku baxdo kharash aad u badan oo safarro dhaadheer ah. Xafiiska Parisia wuxuu ku yaal Bagnolet, oo ku dhagan xarunta tareenka ee Gallieni.
Isilina, (Eurolines Bus Depot) 28 Avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet. Lammaane Eurolines ah oo isla xafiis ah, oo u adeegaya magaalooyin kale oo Faransiis ah iyo magaalooyin qiimo jaban lagu heli karo.
OUIBUS (iDBUS), 48 bis Boulevard de Bercy, 75012 Paris (Ku xigta Gare de Bercy dhanka koonfureed). Waa farac ka tirsan SNCF, oo bixiya jidad u dhexeeya Paris iyo London, Brussels, Amsterdam, Milan, Turin, oo ay weheliyaan magaalooyin kale iyo magaalooyin ku yaal Faransiiska.
Flixbus (Ku xigta Quai de Bercy, marinka Parc de Bercy.),. Asal ahaan shirkad Jarmal ah, waxay u adeegaan wadooyin fara badan oo ka baxa ama ka baxa Paris, labadaba gudaha iyo dibaddaba oo tagaya Jarmalka, Belgium ama xitaa London. Ogsoonow in kasta oo xaruntooda ugu weyn ay tahay Bercy Seine, basaska qaar ayaa sidoo kale taga meelo kale oo ku yaal Paris. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Regiojet, joogsiga baska ee Rue du Faubourg oo u dhow Château-Landon Metro stop (Next Gare de l'Est),. Shirkad Czech ah, waxay bixisaa isku xirnaanta Paris laga bilaabo Prague iyo iyada oo loo maro Prague laga bilaabo Berlin iyo magaalooyin kale. Adeeg wanaagsan iyo mid dhaqaale. (la cusbooneysiiyay Jul 2018)
Dhowr jidadka waaweyn (expressway, motorway) isku xidhka Paris iyo France inteeda kale: iyo waqooyiga, iyo koonfurta, bariga iyo galbeedka. Layaab malahan, saxmada taraafikada ayaa si aad ah uga xun inta lagu jiro fasaxyada iskuulka Faransiiska.
Wadada weyn ee haadka badan ee ku xeeran Paris, ayaa loogu yeeraa Périphérique (BP), waxay u badan tahay in laga doorbido wadista bartamaha. Wado kale oo gabo gabo ku dhow; L'A86 (sidoo kale iyo A286) loops agagaarka Paris oo ku saabsan 10 km ka sii fog ka Périphérique. Mid seddexaad, marinka aan dhameystirneyn ayaa si aad ah looga sii baxaa loona yeeraa La Francilienne (N104).
Waxaa lagugula talinayaa inaadan ku kaxeyn aagga Paris Metro. Way ka fiican tahay inaad u kaxeyso saldhig tareenka magaalada hareeraheeda leh meel baabuurta la dhigto ka dibna u isticmaal tareenka inaad ku sii wadato safarkaaga dhammaan Paris. Inta badan waddooyinka Paris waxaa la abuuray muddo dheer ka hor soo saaridda gawaarida. Isku socodka magaalada gudaheeda wuxuu noqdaa mid culus, gaar ahaan saacadaha ciriiriga; wadista, si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa mid fudud oo hufan fiidkii. Gawaarida ayaa sidoo kale adag. Intaas waxaa sii dheer, dabeecadda qadiimiga ah ee qaybo ka mid ah nidaamka waddooyinka magaalada ayaa ka dhigaysa mid aad u jahwareer badan, taraafikada ayaan u oggolaan doonin midkood inuu istaago ama hoos u dhigo si uu qofku u helo jaaniskiisa. Haddii aadan aqoon u lahayn jidadka oo aad weli ku adkaysato inaad baabuur ku dhex wadatid magaalada, hubi inaad haysato hage ku yaal kursiga rakaabka.
Magaalada Paris, waxaa jira wakaalado badan oo kirada baabuurta oo bixiya tiro aad u tiro badan iyo gawaari ballaaran oo kiro ah. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira wakaalado badan oo kirada baabuurta oo ku yaal meel ka baxsan goobta kuwaas oo bixiya wareejinta garoonka diyaaradaha oo bilaash ah oo laga helo meesha ay ku yaalliin waxaana laga yaabaa inay si fiican u bixiyaan qiimo hoose
Habka ugu wanaagsan uguna raqiisan ee loo maro agagaarka Paris waa lug, marka labaadna, iyadoo la adeegsanayo Metro-ga oo ah 1.90 XNUMX safar hal dhinac ah oo dherer kasta ah.
Ku lugeynta magaalada Paris waa mid ka mid ah raaxooyinka waaweyn ee booqashada Magaalada Iftiinka. Waa suurtagal in laga gudbo magaalada oo dhan dhowr saacadood gudahood, laakiin waa haddii aad si uun iskaga ilaalin karto inaad joojiso makhaayadaha iyo dukaamada badan. Dhab ahaantii dhowr sano gudahood socodka socda oo ay weheliso baaskiil iyo Metro Waxaa laga yaabaa inay tahay habka kaliya ee lagu tagi karo Xarunta Paris mar haddii qorshayaashu soo baxayaan si loo yareeyo gelitaanka baabuurta ee Bartamaha Magaalada.
Socotada ugu caqliga badan waxay ka faa'iideystaan ​​socodka-kartida magaaladan, oo waxay ku nagaadaan dhulka korkiisa inta ugu macquulsan. Socdaal metro ah oo ka yar 2 joogsi ayaa macquul ah in laga fogaado maxaa yeelay socodka wuxuu qaadan doonaa isla waqti isku mid ah waxaadna arki doontaa inbadan oo magaalada ah. Taasi waxay tidhi, fiiro gaar ah u yeelo saldhigyada Métro ee aad uga sii gudbi karto safarkaaga; shabakada Métro aad ayey cuf u tahay gudaha magaalada khadadkiina had iyo jeer si toos ah ayey u yaalliin meelaha waaweyn ee waaweyn, sidaa darteed haddii aad lumiso way fududahay inaad dib u soo ceshato jaangooyooyinkiina adigoo lugeynaya wadada weyn ilaa aad ka hesho saldhig Métro.
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay halista ah inaad ku socoto haraaga eyga ee Paris. Dhibaatadu hadda ma ahan mid jirta sababtoo ah ganaaxyo gaaraya ilaa € 180 iyo howlo nadaafadeed oo ballaaran.
Had iyo jeer waa wax lagu farxo in lug lagu soo maro magaalada, waxaana jira safarro socod oo fara badan oo ku teedsan Paris, ha ahaato is-hagitaan (iyadoo laga caawinayo buug-tilmaame ama hage khadka tooska ah) ama hage dalxiis (oo laga dhex diiwaangeliyey hay'adda safarkaaga ama hudheelka). Magaalada ayaa sida ugufiican loogu sahamiyaa lugo, iyo qaar ka mid ah xusuusta cajiibka ah ee aad ku yeelan doonto Paris waxay ku dhex socdaan meelo qarsoodi ah oo laga helay.
Badhamada wicitaanka dadka lugaynaya jidadka laamiga waxaa lagu dhaqaajiyaa adigoo riixaya badhanka ka hooseeya sanduuqa badhanka wicitaanka.
Waxaa qoray Métro
Paris waxay leedahay nidaam tareen dhulka hoostiisa ku fiican, oo loo yaqaan dhulka hoostiisa (gaaban Chemin de fer métropolitain, Tareenka Magaalada Caasimada ah). In kasta oo ay u badan tahay inaad ka qaadi doonto tareenka dhulka hoostiisa mara ee RER garoonka diyaaradaha illaa Paris, ha ku wareerin: RER waa soo gaabinta luuqadda Faransiiska ah oo loo turjumay "Shabakad Deg-deg ah oo Degdeg ah," waxaana inta badan isticmaala rakaabka. Raadi saldhigyada Métro, oo ay ku calaamadeysan tahay calaamadda weyn ee “M” ama ay ku qoran tahay calaamadi hore loo qaabeeyey oo oraneysa “Métropolitain”.
Qorshaha qorsheysan ee Métro, Dec. 2019
Isticmaalka métro iyo tareenka hareeraha magaalada
Waxaa jira khadadka 16 Métro (lignes) (1-14, 3bis, Iyo 7bis) kaas oo tareenadu ku safraan maalinta oo dhan daqiiqado yar gudahood. Adeeggu wuxuu ka bilaabmayaa dhammaad kasta khad kasta 05:30, iyo metro-ka ugu dambeeya wuxuu yimaadaa dhammaad kasta 01:15 (adeeggu wuxuu dhammaanayaa saacad ka dib habeennada Jimcaha iyo Sabtida, iyo maalinta ka horreysa fasaxa), isagoo istaagaya dhammaan saldhigyada khadka. Khadadka qaar waxay leeyihiin tareeno naadir ah oo ku joogsada xarunta dhexe; haddii ay taasi dhacdo, ka deg tareenka adiga oo la joogaya dadka intiisa kale oo raac tareenka ku xiga isla wadadaas ama dhinaca kale ee madal (darawalku wuxuu sida caadiga ah ku dhawaaqi doonaa Faransiis). Khadadka 7 iyo 13 waxay leeyihiin fargeeto, markaa haddii aad qadka 13 ka raacdo woqooyiga La Fourche ama sadarka 7 ee koonfurta Aqalka Cad, hubi inaad tareenka u raacdo meesha saxda ah ee lagu tilmaamay fallaar shidan oo ku taal calaamadda ku taal bartamaha madal-ka iyo ku dhejiyaha midabka leh ee gaadhi kasta. Waqtiyada tareenada waxaa lagu arki karaa sabuurad duuban oo elektaroonik ah oo ka sarraysa madasha. Waqtiyada loo qorsheeyay tareenada hore iyo kan ugu dambeeya ayaa lagu dhejiyaa saldhig kasta calaamadda Xarunta. Guud ahaan, marka laga reebo saacadaha hore iyo kuwa dambe, dadka socotada ah waa inaysan ka walwalin waqtiyada tareenka Metro ee gaarka ah; kaliya tag xaruntaada oo raac tareenka xiga. Tareenadu sida caadiga ah waxay isu jiraan 2-3 daqiiqo inta lagu jiro saacadaha degdegga ah iyo 5-10 daqiiqadood oo kala fog waqtiyada kale, taas oo ku xidhan khadka.
Khadadka waxaa loo magacaabay iyadoo loo eegayo magacyada saldhigyadooda saldhigga (dhamaadka khadka). Haddii aad dadka deegaanka ka wareysato tilmaamaha, waxay kuugu jawaabayaan wax la mid ah: waxay qaadan karaan lambar lambar n dhanka "saldhigga ugu dambeeya 1", ku beddelo "saldhigga", qaad khadka nn dhanka "xarunta dhamaadka 2" iwm. Khadadka sidoo kale midabbaa lagu calaamadeeyay.
Bedelida khadadka metro way ku adkaan kartaa mararka qaarkood booqdayaasha u socdaalaya ama ka imanaya garoonka diyaaradaha ama saldhigyada tareenka oo wata shandado culus, gaar ahaan isgoysyada waaweyn ee metroga. U guuritaanka min hal marin oo loo wareego mid kale guud ahaan waxay ku lug leedahay socodka iyo hoos u socodka jaranjarooyin badan. Saldhigyo aad uyar ayaa leh wiishashka (kaliya khadka ugu cusub ee 14 ayaa gaari kara kursiga curyaamiinta ee dhammaan saldhigyada, marka laga reebo marka wiishka uu ka baxo nidaamka). Kaliya kuwa ugu mashquulka badan ayaa leh kuwa kor u qaada. Waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan inaad iska hubiso jidadka Basaska iyo waqtiyada oo aad fiiriso haddii qofku ka heli karo iskuxirka baska habboon.
Tareennada ku xiga ee RER B
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira shan layman oo tareen oo iskaga goosha Paris: RER A, B, C, D, iyo E. RER tareenadu waxay ku shaqeeyaan xilliyada kaladuwan oo u dhexeeya qiyaastii 3 daqiiqo (RER A) ilaa 6 daqiiqo (RER D), oo ku joogso saldhig kasta gudahood Paris. Inta kale ee shabakadda gobolka, oo loo yaqaan "Transilien", waxay ka amba baxeysaa xarumaha tareennada waaweyn (Lyon ee khadka R, Est ee khadka P, Nord ee khadadka H iyo K, St-Lazare ee khadadka J iyo L, Montparnasse ee khadka N) iyo La Défense (safka U). Tareenadu way socon karaan 5tii daqiiqo ee kasta inta lagu jiro saacadaha ciriiriga ah, waligoodna ma sugi doontid wax ka badan 1 saac inta u dhexeysa laba tareen, xitaa khadadka ugu yar ee la adeegsaday fiidkii ama dhamaadka usbuuca. Xusuusnow in Transilien ay si yar u camiran tahay RER iyo xitaa Metro.
Macluumaadka adeegga OKRE (Joogitaankii ugu dambeeyay Torcy)
RER iyo Transilien waxay ku istaagi doonaan saldhig kasta oo Paris gudaheeda ah (aagga 1), laakiin way ka boodi karaan saldhigyada ka baxsan Paris, markaa haddii aad aadeysid xaafadaha magaalada iska hubi in RER-gaagu istaago meeshii aad u baahan tahay! Macluumaadka ku saabsan joogsiyada ay sameyn doonaan tareenka soo socda ayaa lagu soo bandhigayaa loox kale oo sidoo kale ka laalaada saqafka. Afar lambar xarfo (KRIN, DIPA, TORE, iwm) ayaa loo adeegsadaa tareennada RER iyo Transilien; xarafka hore wuxuu tilmaamayaa saldhiga tareenku kujoogo, saddexda kalena waxay tilmaamayaan wadada iyo joogsiga. Khad kasta wuxuu leeyahay magac u gaar ah. Waad ka eegi kartaa waxa ay lambarradan macnahoodu ku yaalliin darbiyada macluumaadka ee saldhigga, laakiin sida ugu fudud uguna dhaqsaha badan ayaa ah in inta badan la hubiyo shaashadaha macluumaadka ee ku teedsan meerayaasha.
Métro iyo RER waxay u guuraan tirooyin fara badan oo dad ah, oo ka baxsan, iyo hareeraha Paris (6.75 milyan oo qof maalintii celcelis ahaan), iyo inta badan waqtiga raaxada macquulka ah. Khadadka qaarkood, si kastaba ha noqotee, waxay ku shaqeynayaan ama ku dhow yihiin awoodda, mararka qaarkood way buuxaan oo waa inaad u ogolaataa hal ama labo tareen inay dhaafaan ka hor intaadan awoodin inaad raacdo. Haddii aad caawin karto, iska ilaali khadadka Métro 1, 4, iyo 13 iyo RER line A iyo B inta lagu jiro saacadaha degdegga maadaama kuwani yihiin khadadka ugu saxmada badan nidaamka.
RATP (websaydh) ayaa mas'uul ka ah inta badan gaadiidka dadweynaha oo ay ku jiraan metrooga, basaska, iyo kala badh RER A iyo B. RER inteeda kale, iyo sidoo kale Transilien, waxaa maamula SNCF. Si kastaba ha noqotee, labada shirkadoodba waxay wada qaataan tikidhada isku midka ah, sidaas darteed farqiga ayaa ah mid aan danayn badan u lahayn dadka badankood marka laga reebo haddii ay dhacdo shaqo joojin (RATP way weerari kartaa iyada oo SNCF aysan sidaa yeelin ama dhinaca kale wareega ah)
A tigidh t wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho shabakada Paris métro, iyo sidoo kale khadadka basaska iyo tramway. Helitaanka RER waxaa laga oggol yahay gudaha magaalada Paris oo keliya.
Tigidh hal ah, tigidh t +, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad midkoodna:
Samee safar metro / RER, oo leh isku xirnaan badan intaad rabto inta udhaxeysa, inta lagu jiro 2 saacadood, illaa intaadan kabaxeynin shabakada (waxaa jira dhowr waxyaalood oo reeban: inaad kala wareejiso inta udhaxeysa RER C iyo métro ee Javel (leh métro line 10), Musée d'Orsay (oo leh metro sadarka 12 ee Assemblée Nationale ama Solférino), Avenue Henri-Martin (oo leh metro sadarka 9 ee Rue de la Pompe), iyo Pont de l'Alma (oo leh lasocodka mestro) 9 at Alma-Marceau), waxaad u baahan tahay inaad ka baxdo oo aad ka gudubto wadada laakiin waad isticmaali kartaa tikit isku mid ah). In kasta oo aad gaari karto saldhig kasta oo metro ah (iyadoon loo eegin aaggeeda), waxaa laguu oggol yahay oo keliya inaad gaarto saldhigyada RER ee ku yaal aagga 1 (Paris).
Samee safar bas / taraam ah, oo leh xiriiro badan oo aad rabto inta udhaxeysa, inta lagu jiro 90 daqiiqo (inta udhaxeysa ansaxinta koowaad iyo tan dambe), iyadoon loo eegin nidaamka "aagagga" Waxaad ubaahantahay inaad ansaxiso tigidhkaaga markasta oo aad fuusho bas ama taraam cusub Roissybus iyo Orlybus ayaa ka reeban, loomana isticmaali karo tikidh t +.
Waxay ku kacaysaa € 1.90, ama € 2 haddii lagu iibsado baska dushiisa (ma iibsan kartid tigidh taraamka gudihiisa). Si kastaba ha noqotee, guud ahaan laguma talin karo inaad tikidhada ka iibsato cutubka: taa bedelkeeda, a buugga oo ah toban tikidh ayaa laga iibsan karaa saldhig kasta. Tigidhada la magacaabay tarif tarif waxaa loo iibsan karaa carruurta da'doodu ka yar tahay 10 sano laakiin kaliya waxaa lagu iibin karaa kaarnet 10 ah for 7.45. Tigidhadu ma dhacaan, laakiin maaddaama ay magnetic yihiin, waa in laga fogee qaar ka mid ah walxaha macmalka ah sida shilimaadka.
Ka digtoonow in aad ku safarto meel ka baxsan Xarunta Magaalada adiga oo aan haysan tigidh RER oo sax ah ayaa lagugu ganaaxi doonaa, baakadaha kormeerayaasha ee ku dhex wareegaya nidaamkana wax naxariis ah uma muujiyaan dalxiisayaasha codsanaya jaahilnimada. Gaar ahaan, garoomada diyaaradaha iyo Qasriga Versailles waa ma magaalada gudaheeda, waxaadna u baahan doontaa inaad iibsato tikidh qaali ah oo RER ah si aad halkaas u tagto (eeg Gal)
Haddii aad aadeysid xaafadaha magaalada, an asal-tag tigidhku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku tagto safar hal dhinac ah oo ku saabsan wadada saxda ah ee lagu daabacay tigidhka (iyadoo aan loo eegin jihada). Qiimuhu wuxuu ku saleysan yahay masaafo (qiimaha halkan ayaa laga heli karaa. Waxaad kaloo iibsan kartaa xirmooyin 10 ah (oo qiimo dhimis ah 20%), ama hal ama xirmooyin 10 tigidhada "demi-tarif" ah (oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 4-9, 50 dhimis tikidhada kaliya, 60% xirmooyinka 10) Safarada dhaadheer ee isla maalintaas la celinayo, kaarka maalinlaha ah ayaa ka jaban kan tikitka soo noqoshada (tusaale safarka wareega ee u dhexeeya Paris iyo Provins wuxuu ku kacayaa .22.70 17.80, halka maalinta Mobilis la maro Qiimaha € XNUMX).
Haddii tigidhkaagu ka baxo ama aado Paris, ama ay ku jirto wareejin “iyada oo loo marayo qaybta urbaine“, Waxa kale oo aad la xidhiidhi kartaa Khadadka kale ee metro ama RER ka hor / ka dib safarkaaga ugu weyn ee / socdaalka xaafadaha.
Noocyada soo socda ee tikidhada, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in gobolka -le-de-France uu u qaybsan yahay 5 aag cagood. Paris waxay mataleysaa aaga 1, dhamaan deriska dhow ee Paris (oo ay kujiraan Vincennes iyo Saint-Denis) waxay kujiraan aaga 2, La Défense waxay kujirtaa aaga 3, Orly iyo Versailles waxay kusugan yihiin aaga 4, iyo Fontainebleau, Provins, Disneyland iyo Roissy-Charles de Madaarka Gaulle wuxuu ku yaal aagga 5. Saldhigyada yar ee ka baxsan Île-de-France ee ay ka shaqeeyaan nidaamka Transilien waa “tar tarifo Île-de-France“, Micnaha waa lagama maarmaan in la iibsado qiimo gaar ah oo uusan saamayn nidaamka aaggu.
Tigidh hal maalin ah, Mobilis, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso tiro safar aan xadidneyn inta udhaxeysa 00:00 iyo 23:59 taariikhda aad ku qortay tigidhka, aagaga gudahiisa ayay ku ansaxayaan, baska, taraamka, metro (aagaga 1-2 pass waa ansax dhammaan shabakadda metro), RER, Transilien. Waxaad u baahan tahay inaad ku qorto magacaaga iyo taariikhda ay ansax tahay oo aad dooratay ka hor intaadan isticmaalin. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa € 7.50 (aagagga 1-2) illaa .17.80 1 (aagagga 5-XNUMX). Waa ma waxay ku habboon tahay Orlyval, laakiin waxay ku habboon tahay khadadka kale ee garoonka diyaaradaha (RER B, Roissybus, RER C, Orlybus) haddii baaska ay ku jiraan aagagga ku habboon.
Rakaabka socdaalka ah ee da'doodu kayar tahay 26 sano, waxaa jira tikidh gaar ah (Jeunes Toddobaadkii-dhammaadka) in aad ka iibsan karto socdaal aan xadidneyn inta udhaxeysa 00:00 iyo 23:59 maalinta lagu qoray tikidhka maalmaha fasaxa ama ciidaha, baska, taraamka, metro (aagagga 1-2 marinka ayaa udhaxeeya shabakada metro oo dhan) , RER, Transilien .. Qiimuhu wuu kala duwan yahay waxayna kuxirantahay aaga aad rabto inaad daboosho (aagaga 1-3 waa € 4, aagagga 1-5 waa € 8.70, aagaguna 3-5 waa € 5.10). MA ansaxayo laga bilaabo / garoomada diyaaradaha ee RER B, Roissybus, Orlybus, Orlyval (laakiin waxay ku ansaxaysaa iskuxirayaasha maxaliga ah sida T7 iyo RER C ilaa Orly iyo baska 350 ama 351 ee Roissy). Taariikhda iyo magacaaga waa in lagu qoro tigidhka tikidhada Mobilis ee kor lagu sharaxay.
Haddii aad waxoogaa sii dheeraato, waad iibsan kartaa a Navigo Découverte (MAALIN-koo-VERT) u dhaaf for 5 (waxaad u baahan doontaa inaad qorto magacaaga oo aad sawir saarto, haddii kale waxaa loo qaadan doonaa inuu yahay mid aan ansax ahayn), kuna shub midkoodna 1 usbuuc oo baasaboor ah (€ 22.80 dhammaan aagagga, waa inay bilaabaan Isniinta) ama baaskiil si caadi ah (€ 75.20 loogu talagalay dhammaan aagagga, waa inay bilaabmaan maalinta 1-aad ee bisha). Waad kala dooran kartaa inta u dhexeysa aagagga 2-3, 3-4, 3-5, 4-5, ama "dhammaan aagagga", laakiin inta badan booqdayaasha Paris waxay si fudud u dooran doonaan kaarka "aagagga oo dhan". Wax kasta oo la xiriira kaarka “Navigo” wuxuu ku yaal midab buluug ah (sida bartilmaameedka loogu talagalay kaarka ee leexashada). Waxaad ubaahantahay inaad ansaxiso Navigoga markasta oo aad baska ama taraamka aad gasho sidoo kale. Haddii aadan haysan "dhammaan aagagga" kaarka, safarka dhammaadka usbuuca waa lacag la'aan dhammaan Île-de-France dhammaan rakaabka haysta baasaboor bille ah ama sannadle ah, inkasta oo aagagga la daboolayo inta lagu jiro usbuuca. Navigo waxay kuu ogolaaneysaa inaad gaarto Orly (aagga 4) ama Roissy-Charles de Gaulle (aaga 5aad) garoomada diyaaradeed oo leh qadka tareenka dadweynaha, marka laga reebo Orlyval light-train ee garoonka Orly Airport oo aan sax aheyn.
RATP iyo SNCF waxay iibiyaan kaararka loogu talagalay dalxiisayaasha loo yaqaan Booqashada Paris, ka qaalisan kan ay siiyaan dadka deegaanka, laakiin waxay ku daraan wax intaa ka badan (khariidad, iyo qiimo dhimis qaar ka mid ah soojiidashada la xushay). Waxay kuxirantahay soojiidashada aad tixgelineyso inaad booqato, waxay noqon kartaa ikhtiyaar soo jiidasho leh not ama maya. In kasta oo aanu heshiis fiican u ahayn dadka waaweyn kiisaska badankood sida Mobilis or Navigo, Kaararka Booqashada ee Paris ayaa wali laga yaabaa inay gorgortan u noqdaan carruurta da 'ahaan u dhaxeysa 4–11 ee safarada Isniinta-Jimcaha (marka jeeniska tikidhadu ansax ahayn), laga bilaabo € 5.55 maalintiiba safarka aagga 1-3.
Hayso tigidhkaaga ama kaarkaaga marwalba ha ahaato maxaa yeelay waa lagaa hubin karaa. Waa laguu sheegi doonaa oo lagugu qasbi doonaa inaad lacag ku bixiso goobta haddii aadan haysan tigidh. Meelaha ay u badan tahay in lagu baaro ayaa kaliya ka dambeeya leexashada saldhigyada waaweyn ee metro ama inta lagu jiro isbaddalada metro (waraaqaha). Wakiilada RATP waxaa laga yaabaa inay joogaan saldhigyada métro xitaa habeenka Axadda.
Saldhigyada Métro waxay leeyihiin daaqadaha tikidhada iyo mashiinada wax lagu iibiyo ee otomatiga ah. Inta badan makiinadaha wax lagu iibiyo ee otomaatiga ah wax qoraal ah ma qaataan, kaliya qadaadiic ama kaararka deynta ee Yurub oo leh jiinar ku calaamadeysan xagga hore. Sidaa darteed, inaad u isticmaasho midkood biilasha euro ama kaarka amaahda ee aan ahayn Yurub ee leh xarig birlab ah, waa lagama maarmaan in laga iibsado daaqadda tigidhada. Qaar ka mid ah mashiinnada lagu iibiyo tikidhada wax isbadal ah ma bixiyaan, marka isticmaal beddel sax ah ama aad daaqadda tigidhka. Haddii aad si dhow u eegto mashiinnada iibinta, waxaad ka dhex heli kartaa mid kooxda ka mid ah oo qaata biilasha euro-ga oo isbeddel ku keenaya; mashiinadan waxaa laga heli karaa xarumaha waaweyn ama xarumaha dalxiiska sida Tuileries, Gare de Lyon ama La Défense-Grande Arche.
Qaar ka mid ah saldhigyada waaweyn waxay leeyihiin irrido sare, halkaas oo aan lahayn tigidh tigidh. Kuwan ayaa ku suntan safarrada munis de billets (rakaabka tikidhada wata).
Markaad galineyso gawaarida tigidhka ama kaarka Navigo, kaliya hal jeer ayey u shaqeyn doontaa saldhiggaas oo dib ayaa loo cusbooneysiin karaa haddii aad ku isticmaasho saldhig kale. Mar alla markii aad dhaafto tigidhkaaga ama kaarkaaga, si dhakhso leh uga gudub xayndaabka maaddaama uusan kuu oggolaanaynin haddii aad isku daydo inaad mar kale isticmaasho.
Saldhig kasta wuxuu soo bandhigayaa khariidad faahfaahsan oo ku saabsan aagga ku xeeran oo leh liistada waddooyinka iyo meesha ay ku yaalliin dhismayaasha (taallooyin, iskuulo, goobo cibaado, iwm.), Iyo sidoo kale meelaha looga baxo metro-gaas. Khariidaduhu waxay ku yaalliin barxadda haddii saldhiggu leeyahay dhowr meel laga baxo ama u dhow meesha laga baxo haddii ay jirto hal marin oo keliya.
Marka laga reebo Métro 1, 2, 4, 5, 9 iyo 14, albaabadu si otomaatig ah uma furi doonaan. Xaaladda noocaas ah, waxaa jira gacan qabasho ama badhamno ku yaal gudaha iyo dibedda tareenka oo ay tahay inaad riixdo ama furto si aad albaabka u furto. Dad badan oo deegaanka ah ayaa isku dayi kara inay isku soo tuuraan tareenada ka dib markii alaarmiga dhawaaqa uu dhawaajiyay si ay u muujiyaan xirnaanshaha albaabada. In kasta oo qofku marmarka qaar ka dhex gudbi karo khadadka darawalka, albaabada otomaatigga ah ee 'Métro 1' iyo '14' way sii socon doonaan in la xiro inkasta oo ay jiraan xubno addin ah ama maado ah. Waxaa si xoog leh lagula talinayaa inaad sugto tareenka labaad halkii aad fursad ugu qaban lahayd albaabbada dhexdooda.
Shaqo joojinta, burburka iyo dhismuhu waa dhacdooyin joogto ah oo ku saabsan nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Paris. Guud ahaan inta lagu jiro shaqo joojinta, métro waxay ku shaqeysaa adeeg dhimis ah iyo khadadka hareeraha magaalada qaarkood ayaa gebi ahaanba joojin kara shaqada. Booqo shabakadaha RATP iyo [Transilien] si aad u hesho macluumaad ku saabsan jidadka ay saameeyeen (iska ilaali in macluumaadka taraafikada ee waqtiga dhabta ah iyo ogeysiisyada dhismaha inta badan laga heli karo oo keliya bogagga ku baxa luuqadda Faransiiska).
Maaddaama Métro ay ugu horreyn ku habeysan tahay qaab mood iyo meel lagu hadlo, waxaa jira safarro qaarkood ay u noqon karaan kuwo aan waxtar lahayn, xaaladahaasna, waxaa habboon in la arko haddii marin toos ah oo bas ah ay jirto, in kasta oo iskuxirka shabakadda basku ay adag tahay. . Raacitaanka baska sidoo kale waa mid xiiso leh haddii aad rabto inaad aragto inbadan oo magaalada ah. Dhammaan joogsiyada waxay leeyihiin magac waxaana si cad loogu calaamadeeyay wadada. Isgoysyada adag, joogsiyada badanaa waxay leeyihiin khariidad xaalad ah oo kuu ogolaaneysa inaad ogaato halka xariiqyada kale ay istaagaan iyo haddii ay khuseyso halka laga helayo metro irridda. Haddii wax ka badan hal saf ay joogsato, u gacan haad darawalka si aad ugu sheegtid inaad rabto inaad fuusho. Dhammaan basasku waxay leeyihiin khariidad qaabeed oo xarriiqda lagu soo bandhigay oo leh dhammaan magacyada joogsiga, iskuxirka basaska iyo magacyada waaweyn ee waddooyinka. Bandhigyada elektaroonigga ah ee bas kasta ayaa u sheegaya wadayaasha meesha ay hadda joogaan iyo waxa joogsanaya ayaa harsan, laakiin si xad dhaaf ah ha ugu tiirsan iyaga maadaama aysan had iyo jeer shaqeynin.
Nidaamka basku wuxuu adeegsadaa isla tikidhada hal-ku-raaca iyo Navigo sida Métro. Tigidhku wuxuu u shaqeynayaa 90min basaska (iyo tramways) ka dib marka la ansaxiyo marka hore, marka laga reebo inaadan dib u noqon doonin. Kaliya tikidhada ku dheji mashiinka mar kale markaad basaska beddeleyso. Xusuusnow intaad tikit ka iibsan karto darawalka baska, tigidhkan ayaa ka qaalisan oo aan kuu oggolaanayn inaad basaska beddelato. Uma isticmaali kartid hal tigidh isku darka métro + safarka baska: haddii tigidh bas lagu isticmaalay, kuma isticmaali kartid metro, iyo tan kale.
Isla aaladaha lacag bixinta ayaa sidoo kale ansax ah Noctilien, baska habeenkii. Basaska habeenkii waxay si joogto ah ugu dhex socdaan xarunta dhexe ee Chatelet illaa meelaha ka baxsan ee Paris weyn. Waxa kale oo jira xariiq goobeed isku xidha saldhigyada tareenka ee waaweyn. Qofku inuu lacag bixiyo ayaa waxtar leh Noctilien wadada mar hore haddii ay dhacdo in mid ka mid ah uu seego gurigii ugu dambeeyay ee Métro. Haweenka safarka ah waa inay iska ilaaliyaan inay u qaataan Noctilien kaligood meelaha ay ku aadaan Paris.
Ikhtiyaar kale oo loogu talagalay dadka safarka ah ee doonaya inay arkaan indhaha Paris oo aan joogsi lahayn gees walba waa Baska Paris L'Opentour, Bas laba-jibaar furan oo kor u furan oo siiya headets macluumaad aad u casriyeysan oo ku saabsan soojiidashada Paris. Tigidhadaadu way fiicantahay afar waddo oo u dhaxaysa 1-2 h. Ka deg markii aad rabto, sii joog inta aad u baahan tahay, baska ku noqo oo aadi meel kale. Tigidhada waxaad ka iibsan kartaa barta basku istaago. Kaadhka hal maalin waa € 25 ee dadka waaweyn iyo € 15 ee carruurta. Kaarka laba-maalin waa € 32 ee dadka waaweyn ama € 15 ee carruurta.
Meel gacmeed bateau u dhow Pont Neuf
Waxaa jira dhowr adeegyo doon oo aad u fiican oo ka faa'iideysta Seine. Sidoo kale bixinta fudud, gaadiid raqiis ah oo lagu tago inta badan bartamaha Paris, fursado sawir oo aad u fiican ayaa badan. Waxaad iibsan kartaa tigidh maalin ama 3 maalmood ah oo aad ku booddaa oo ka degtaa doonta markii loo baahdo. Doomaha ayaa marin wareeg ah ka soo qaada Eiffel Tower, hoosna u maraya Louvre, Notre Dame, jardiinooyinka dhirta ka dibna dib u dhigaya bangiga kale ee soo dhaafay Musée d'Orsay. Batobus waxay bixisaa adeegyo duulimaad oo joogto ah oo u dhexeeya indhaha dalxiisyada waaweyn (xiran Jan); shirkadaha kale sida caanka ah Bateaux Mouches waxay bixiyaan dalxiis dalxiis.
Kireysiga baaskiilku waa mid aad uga wanaagsan wadista ama isticmaalka gaadiidka dadweynaha iyo hab aad u fiican oo lagu arko indhaha. Baaskiil wadid meel kasta oo magaalada ka mid ah ayaa uga badbaado fiican baaskiillayda khibraddoodu ka yar tahay ku dhowaad magaalo kasta ama magaalo ku taal Mareykanka. Faransiisku aad buu u yaqaan dadka baaskiil wadayaasha, waxayna ugu dhowdahay heer xushmad leh. Paris had iyo jeer ma ahan meesha ugu fudud ee baaskiil lagu dhex maro, laakiin taasi hadda xaalku sidaas ma aha. Maamulka magaalada ayaa qaaday talaabooyin dhowr ah oo ku saabsan taageerida xoogan ee hagaajinta amniga iyo wax ku oolnimada baaskiilleyda magaalooyinka sidoo kale, sameynta wadooyin kala duwan oo baaskiil lagu kala tago, laakiin xitaa waxaa ka sii muhiimsan siyaasad ah in dadka baaskiilleyda loo ogolaado inay wadaagaan waddooyinka basaska badan. boulevards. Paris sidoo kale waxay leedahay webi badan oo kufiican baaskiil wadista. Shabakada Baaskiil ee Paris ayaa hada tirineysa in kabadan 150 km oo ah haad midkood gaar u ah ama la wadaago baaskiil wadaha. Intaa waxa u dheer, jidadka cidhiidhiga ah, ee wakhtiyada dhexe ee ardarenooyinka dhexe waxay ka dhigayaan muuqaal qurxoon oo baashaal, gaar ahaan inta lagu jiro saacadaha ka baxsan maalinta ee taraafikada ka fudud. Xusuusnow inaad keento khariidad wanaagsan, maaddaama uusan jirin qorshe shabakadeed oo looga hadlayo oo ku dhowaad dhammaan waddooyinka yaryar waa hal dhinac.
In kasta oo jidadka Paris guud ahaan ay si fudud uga fudud yihiin baaskiillayda, haddana waxaa jira waddooyin magaalada ka mid ah oo ay tahay in laga fogaado kuwa aan haysan khibrad ku filan ee baaskiil wadista. Rue de Rivoli, Place de la Bastille, iyo Place de la Nation ayaa si gaar ah timo leh, gaar ahaan inta lagu jiro maalmaha shaqada iyo qulqulka fiidnimada Sabtida, mana aha in la maro cid aan kalsooni ku qabin awooda ay u leeyihiin inay ku safraan taraafikada culus. Avenue des Champs-Elysées, Place de l'Étoile, and voie Georges Pompidou (waa wadiiqooyinka hoose ee xawliga leh ee ku teedsan bangiyada Seine) waa in laga fogaadaa markasta.
Waxaad ka heli kartaa khariidad aad u fiican oo shabakadda baaskiil la yiraahdo Paris à vélo - Qorshaha bon bon) Xarunta macluumaadka ee ku taal Hôtel de Ville.
Vélib ',. Bishii Janaayo 2018, tii hore ee Vélib waxaa lagu beddelay nidaam cusub oo loo yaqaan 'Vélib' Métropole, kaas oo ka kooban aag weligiis ka ballaaran kii hore. Markii hore waxaa jiray arrimo farsamo, laakiin dhamaadka 2018 waxay umuuqataa in inta badan la xaliyay. Baaskiiladaha waxaa ka mid ah shaashad muujinaysa tusaale. inta baaskiil la kiraystay. Baaskiilada korantada qaarkood ayaa sidoo kale la heli karaa (lacag dheeraad ah). € 5 maalintii, nus saac ugu horreysa bilaash. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
By mooto koronto
Sida magaalooyin badan, Paris waxay ku jirtay 2018 wax ka yar ama ka yar daadadka mootooyinka korantada oo bilaashka ah kuwaas oo aad ka kireysan karto barnaamij. Waxaad arkaysaa iyagoo hareeraysan oo hareeraha taagan oo meel walba taagan. Tusaalooyinka waxaa ka mid Bird iyo Lime, laakiin dhowr nooc oo kale ayaa sidoo kale la heli karaa. Haddii aad mid qaadatid, hubi inaad dhigatid meel uusan ka hor istaageynin cag kale ama taraafikada baabuurta.
Baaskiil ama mooto
Paris waa magaalo aad u furan oo furan, oo leh "Grands Boulevards" badan iyo astaamo waaweyn oo leh meelo bannaan oo ballaadhan hareeraheeda ka dhigaya magaalo ku habboon in la baaro oo lagu arko mootada. Dad badan ayaa u maleynaya inay tahay magaalo qatar ah in la fuulo mooto ama mooto, oo markaad fadhiisato maqaaxi gees ah oo aad daawaneyso taraafikada, waxay u muuqan kartaa sidaas, laakiin dhab ahaantii runti waa amaan aad u wanaagsan maxaa yeelay wadayaasha halkaan jooga aad u miyir qaba midba midka kale. Waxaa jira mootooyin aad u fara badan oo ku yaal magaalada Paris, waxayna ahaayeen goob joogto ah oo ka mid ah taraafikada halkan muddo aad u dheer, taas oo ah in marka dadku bartaan wadista ay bartaan inay ku dhex wataan mootooyinka. Faransiisku si dhakhso leh ayuu u kaxeeyaa baabuurta, laakiin way is ixtiraamaan waana dhif iyo naadir in darawalku si lama filaan ah wadooyin u beddelo ama u leexdo dhinaca kale ee wadada isagoon wax tilmaan ah bixin. Markaad fuushantahay mooto ama mootada magaalada Paris, xitaa haddii aad aragto kuwa kale oo sidaas sameynaya, looma oggola inay “layn-u kala baxaan” inta u dhexeysa safafka gawaarida sugaya taraafikada. Nalalka casaanka, in kasta oo mooto bajaajle iyo darawallo badan aysan ixtiraamin, ha ilaawin inaad fiiro gaar ah u yeelatid aagga loogu talagalay baaskiilka: looma oggola inaad isticmaasho, oo sidaas sameynta waxay la mid tahay ka gaabinta ixtiraamka iftiinka cas (€ 135 ganaax). Gawaarida la dhigto waxaa jira tiro badan roux roux (laba giraangirood) barxadaha baarkinka magaalada oo dhan. Mar labaad, in kastoo aad arki karto mootooyin fara badan ama mooto bajaaj la dhigay laamiga, waa mamnuuc in sidaas la sameeyo. Magaalada Paris waxay si baaxad leh u kordhisay tirada gawaarida la ganaaxo maalin kasta (€ 35), qaar ka mid ah xitaa waa la jiidayaa (qarashaadkaaga).
Paris By Mooto, (Mooto Baaskiil markasta loo geeyo hudheelkaaga),. 08: 00-21: 00. Dhamaan kireystayaasha mootooyinka Vespa iyo booqashooyinka magaalada ee magaalada Paris lagu hago waxaa ka mid ah aruurinta iyo ka soo qaadashada, hudheelkaaga ku yaal Paris. Laga soo bilaabo € 60.
Mootooyinka Baanka bidix (Mooto bajaaj la geeyay hudheelkaaga),. 08: 00-20: 00. Kirada mootada ee loo geeyo, lagana soo qaado, hoteelkaaga ku yaal Paris. Dhamaan mootada waa Vespas, 50cc ama 125cc waa la heli karaa. Waa inuu haystaa liisanka baabuurka si aad u kiraysato 50cc, iyo ruqsad mooto oo aad ku kireysato 125cc. Laga soo bilaabo € 60.
Ride'n'Smile (Mooto bajaaj la geeyay hudheelkaaga),. 10: 00-19: 00. Booqashooyinka magaalada ee 50cc Vespa mootooyinka la keenay oo laga soo qaaday hudheelkaaga. Liisanka wadista ee looga baahan yahay wadayaasha. Laga soo bilaabo € 39. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Paris waa Mecca ee barafka magaalada. Tan waxaa u sabab ah dusha sare ee siman ee ay bixiyaan laamiyada iyo wadooyinkuba. Kabaha Barafku waa sharci dhammaan agagaarka Bartamaha Paris (aagga 1) iyo hareeraheeda (aagagga 2 +).
Eray ahaan: ma samayn. Guud ahaan waa fikrad aad u xun inaad kiraysato gaari si aad u booqato Paris. Baabuurtu aad ayey cuf u tahay maalintii, baarkinka baabuurtuna waa, celcelis ahaan, aad iyo aad u adag oo qaali ah. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay meelaha ku hareeraysan qodobbada xiisaha dalxiiska, maaddaama qaar badan oo ka mid ahi ku jiraan aagag loogu talagalay muddo dheer ka hor intaan baabuurtu jirin. Inta badan qoysaska reer Paris ma lahan gawaari, dad badan oo magaalada u soo guuraana waxay helayaan iyaga oo bil ama labo bil gudahood ku iibinaya gawaaridooda.
Taasi waxay tidhi, wadista baabuurku waxay noqon kartaa ikhtiyaar loo maro meelaha indhaha ah ee xaafadaha sida Vaux-le-Vicomte castle ama qalcadda iyo magaalada Fontainebleau, ama bilawga meelaha kale ee Faransiiska. Waxaad doorbidi kartaa inaad ka kireysato meel ka baxsan Paris sax ah.
Shuruucda taraafikada ee Paris asal ahaan waxay la mid yihiin meelaha kale ee Faransiiska, marka laga reebo inay u hoggaansamaan taraafikada soo socota ee wareega. Si kastaba ha noqotee, ku wadista gawaarida cufan ee Paris iyo hareeraheeda inta lagu jiro xilliyada safarka, waxay noqon kartaa mid aad u culus. Diyaar u noqo ciriiriga taraafikada, gawaarida beddela dariiqyada ogeysiiska gaaban, iyo wixii la mid ah. Arrin kale ayaa ah dadka lugeynaya, ee u muuqda inay si cabsi la'aan ah ugu sii socdaan magaalada Paris marka loo eego magaalooyinka kale ee Faransiiska. U diyaargarow dadka lugeynaya ee wadada gudbaya iyagoo casaan ah, kana filo dhaqan la mid ah soo jiidashada baaskiilleyda. Xusuusnow in xitaa haddii lugeeye ama baaskiil ku gudbayo casaan, haddii aad ku dhufato, adiga (dhab ahaan, caymiskaaga) waxaa kugu waajib ah inaad qaaddo mas'uuliyadda madaniga ah ee waxyeelada, iyo laga yaabee inaad ku soo oogto dacwad ku saabsan ku guuldareysiga inaad xakameyso gaarigaaga.
Paris waxay leedahay nidaamyo dhowr ah. Waxaa jira taxane taxane ah oo loogu magac daray jeneraalladii xilligii Napoleonic (Boulevard Masséna, Boulevard Ney, iyo wixii la mid ah), oo si wada jir ah loogu sheego boulevard des maréchaux. Kuwani waa jidad ballaaran oo caadi ah, oo leh nalalka taraafikada. Waxoogaa ka baxsan waddadan ayaa ah boulevard périphérique, Xarig-jid-waddo-weyne ah. The periphérique intérieur waa wadiiqooyinka gudaha (u socda saacadda), the periphérique extérieur haadka dibedda (dhanka saacad ka hor ka soo horjeedka ah). In kasta oo muuqaalku muuqdo, ayaa durugsan ma aha jid: xadka xawaaraha waa 70 km / saacaddii iyo, si aan caadi ahayn, taraafikada soo galeysa waxay xaq u leedahay waddo, ugu yaraan aragti ahaan (waa loo maleynayaa maxaa yeelay, haddii kale, qofna ma awoodi karo inuu soo galo inta lagu jiro saacadda degdegga).
Tagaasida ayaa isbarbar dhigaya qaasatan habeenkii marka aysan jirin ciriiri taraafiko oo lafilayo. Ma jiraan wax badan sida qofku filan karo, mararka qaarkoodna helitaanka taksi ayaa dhib noqon kara. Maalintii, had iyo jeer maahan fikrad fiican inaad taksi raacdo, sida socodka ama metro-ga (Eeg: Métro) badanaa wuu dhakhso badnaan doonaa. Haddii aad ogtahay inaad u baahan tahay mid ka mid ah si aad u hesho garoonka diyaaradaha, ama kulan, waa caqli inaad horay u sii qabsato taleefan.
Qiimaha ugu horreeya waa 2.40 1.10 mitirkuna wuxuu kordhayaa qiyaastii € 50 kiiloomitir kasta iyo ku dhowaad XNUMX senti daqiiqad kasta oo lagu qaato nalalka casaanka ama saxmadda taraafikada. Qiimaha ayaa lagu hagaajiyaa sharciga magaalada darawal walbana wuu ku dhaqmaa. Qiimaha waa ku kala duwan yihiin maalinta usbuuca, saacadda maalinta iyo aagga aad ka gudbeyso.
Haddii aad u wacdid taksi, mitirku wuxuu bilaabmayaa markii aad wacday ee ma aha markii aad fuushay. Waa inaad ka filataa € 5 ilaa € 10 qiimaha mitirka marka taksi yimaado ka dib markaad wacdid.
Xusuusnow haddii taksi u dhow yahay 'saldhigga tagaasida', looma malaynayo inay ku soo qaadaan marka laga reebo boosteejada halkaas oo ay jiri karaan dad taksi sugaya. Saldhigyada tagaasida ayaa badanaa ku dhow saldhigyada tareenka, hoteelada waaweyn, isbitaalada, isgoysyada waaweyn.
Waxaa jira adeegyo dhowr ah oo aad ugu wici karto taksi ama horay u sii qabsato. Labada raxan ee ugu waaweyn waa Taksi G7 iyo Tagaasida Bleus:
Sida magaalooyin badan oo kale tagsi way adkaan kartaa in la joojiyo; waxaa laga yaabaa inaad isku daydo dhowr jeer. Markaad hesho taksi aad istaagto, darawalku inta badan daaqadiisa ayuu hoos uga soo dhacayaa si uu ku weydiiyo halka aad rabto inaad aaddo. Haddii darawalku uusan awoodin (ama uusan rabin) inuu aado meesha aad rabto, waxaa laga yaabaa inuu kuu sheego inuu ku dhow yahay dhamaadka shaqadiisa maalinna uusan ku gaari karin meesha aad rabto ka hor inta uusan ka bixin shaqada. .
Waxaa jira minimum 6.40 uguyaraan (2012) dhammaan socdaalada tagaasida, oo amraya sharciga magaalada, laakiin mitirku ma muujinayo qaddarkan, taas oo sababi karta in la waydiiyo inuu bixiyo wax ka badan inta mitir ee safarada gaagaaban. Tagaasida Paris sharci ahaan waxaa looga baahan yahay inay safarka ku soo dallacaan mitir, ku soo dallaca sicirka guriga waa sharci darro, marka laga reebo / illaa garoonka diyaaradaha Charles de Gaulle (€ 50 dhanka midig ee Seine, € 55 dhanka bidix) iyo Orly garoonka diyaaradaha (€ 35 bangiga midig, € 30 dhanka bidix). Had iyo jeer tagsiilaha ayaan rabin inuu ku wado ilaa albaabka, laakiin wuxuu doorbidayaa inuu kaa sii daayo guri ama wax ka fog haddii ay jiraan hal ama in ka badan oo jid keliya ah oo lagula tartamo. Isku day inaad tan u fiirsato sida lacag-badbaadin halkii aad ka heli lahayd dhibaato. Waa inaad bixisaa intaad wali ku dhexjirtid taksiga sida New York iyo ma daaqada hore qaabka London.
Darawalku kuuma oggolaan doono inaad ku fariisato kursiga hore (haddii aadan ahayn 3 ama 4 adiga, oo ah kiis dhif ah oo badanaa lacag badan lagu dedejiyo). Taksiilayaasha ayaa nooc walba leh, qaar fiican, qaar edeb daran, qaar raba inay sheekaystaan, qaarna maahan. Sigaar cabida tagaasida guud ahaan lama ogola, si kastaba ha noqotee waxay noqon kartaa in taksiilaha qudhiisu uu rabo sigaar taas oo markaa sharcigu noqon karo mid dabacsan.
Darawallo badan ayaa doorbida inaad ka fogaato isticmaalka taleefankaaga gacanta inta lagu jiro safarka; hadaad leedahay in, sameeyo tilmaam & dhawaaq raali gelin ah, oo samee a gaaban wacid.
Tilmaamo ayaa lagu darayaa qiimaha safarka; Haddii aad si gaar ah ugu qanacsan tahay adeegga, waad siin kartaa wax (asal ahaan 10%), laakiin maahan waxay leeyihiin in.
Waxa jira lacag dheeraad ah oo ku saabsan maaraynta shandadaha.
Haddii sabab kasta ha noqotee aad rabto inaad cabasho ka gudbiso tagsi Paris ah, fiiro gaar ah u yeelo lambarka taksiga ee warqadda ku dheggan daaqadda dambe ee kursiga dambe ee bidix.
Ka taxaddar tagsi-darrada sharci-darrada ah (fiiri qaybta 'Ammaan-qabka').
Waxaa qoray darawal (Limo)
Baabuurtan oo looyaqaano adeegyada baabuurta ama cabitaanada liibiya, looma oggola inay ku safraan waddada ama garoomada diyaaradaha qiimo ahaan. Waxaad u baahan tahay inaad ballansato kahor intaysan ku soo qaadin. Way ka siman yihiin halkii laga qiyaasi lahaa (weydiiso qiimaha intaadan soo galin), iyo Waxaa jira laba nooc oo shati ah: "Grande Remise" oo u oggolaanaysa gaariga & darawalku inay qaadaan ama ka degaan rakaab meel kasta oo Faransiis ah, iyo "carte verte" oo u oggolaanaysa soo-qaadis iyo soo-degitaan waaxda ama gobolka ay shirkaddu ku taal. Gawaarida Grande Remise waxay ku leeyihiin GR saxanka hore. Waxay bixiyaan adeeg ka badan tan caadiga ah.
Waxaad ka heli kartaa laba nooc oo cab ah: gaar loo leeyahay oo la wadaago.
Gawaarida la wadaago: Waa inaad la wadaagtaa baska macaamiisha kale. Dib u dhac ayaa ku imaan kara tan iyo markii basku u baahan yahay inuu soo qaado macmiil kale oo laga yaabo inuu adiga kaa hor dhigo, kana raqiisan yahay midka gaarka loo leeyahay
Gawaarida Gaarka ah: Waxay kaa qaadi doontaa waqtigii loogu talagalay waxayna si toos ah kuugu dejineysaa cinwaanka ku xusan intaad ballansan tahay.
Easy Go Shuttle, 50, Rue de la Croix Nivert ,. Adeeggan xamuul ee gaarka loo leeyahay wuxuu siiyaa gawaarida leh darawal loogu talagalay wareejinta garoonka diyaaradaha iyo safarada meelaha soo jiidashada leh ee Paris. Waxaa laga dalban karaa khadka tooska ah waana in lagu bixiyaa lacag caddaan ah marka la soo dejinayo. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Metro iyo bas. Metro-ga iyo basaska waa u bilaash carruurta da'doodu ka yar tahay 4 sano. Carruurta waaweyn (4-9) ayaa iibsan kara a buugga (aruurinta 10 tikidho) qiimo badh ah safarka dhimista. Baasaska kale, oo ay ku jiraan kaarka Paris-Vistes ee loogu talagay safarka aan xadidneyn 1 ilaa 5 maalmood sidoo kale waxaa lagu heli karaa qiimo nus ah oo loogu talagalay carruurta ka yar 9 sano.
Taksiyada. Tagaasida Parisien waxay u muuqdaan inay yihiin gawaari caadi ah (sedans ama minivans) sidaa darteed ku dhowaad dhammaan gawaarida gawaarida wax lagu iibiyo ayaa u baahan doona in la laabo oo la geliyo jir. La soco in darawallada tagaasida ay ku faanaan baabuurtooda oo ay aad u nadiifiyaan oo aysan ahayn taageerayaasha waaweyn ee carruurta qasan.
VTC. Dhammaan gawaarida wax lagu riixo waxay u baahan doonaan in la laalaabo oo la geliyo jirridda. VTC waxay ku siineysaa dhammaan qalabka badbaadada ee carruurtaada (kuraasta ilmaha iyo waxyaabaha kor u qaada)
Ugu horreyntii, buugga weedhaha faransiiska (français) dabcan waa luuqadda rasmiga ah ee waddanka. Qof kasta oo Faransiis ah oo u dhashay ayaa ku hadli doona Faransiis wayna ku caawinaysaa haddii aad xoogaa ka hadasho. Qaybaha magaalada ee dalxiisayaashu ugu badan yihiin (Tour Eiffel, Le Louvre, Champs-Elysées), dukaanleyda, kalkaaliyeyaasha macluumaadka, iyo shaqaalaha kale waxay u badan tahay inay kuugu jawaabaan Ingiriisi, xitaa haddii Faransiisku hore u socdo. Shaqaalahani waxay u muuqdaan inay la macaamilaan kumanaan dalxiisayaal ku hadla af qalaad, oo ka jawaab celinta Ingiriisiga ayaa inta badan ka dhaqso badan inay ku celceliyaan af Faransiiska. Tani ma ahan tan magaalada inteeda kale.
Inta badan dadka reer Parisi, Ingiriisigu waa wax ay ku baranayeen dugsiga, oo markaa waxay u muuqdaan xoogaa hawl ah. Dadka kaa caawinaya inaad ku baxdo Ingiriisiga waxay sameynayaan dadaal dheeri ah, mararka qaarkoodna mid aad u tiro badan. Dadka reer Parisi ee ka yar 40 sano waxay aad ugu dhowdahay inay sifiican ugu hadlayaan Ingiriisiga. Muhaajiriinta, oo inta badan ka shaqeeya shaqooyinka adeegga, way yar yihiin (inta badan, wali way ku dhibtoonayaan barashada Faransiiska.) Haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad Faransiiska joogtid waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyin xoogaa ah fahamka waxa ay dadku dhahayaan (xitaa waxbarashada hore ee Faransiiska). Si ka duwan inta badan cajaladaha wax lagu barto ee luuqadda, dadka dhabta ah ee Faransiiska inta badan waxay ku hadlaan xawaare kala duwan (dadka reer Paris waxay u muuqdaan inay hadlaan si dhakhso leh), waxay isticmaalaan hadallo, waxayna liqaan xarfaha qaarkood.
Markii aad isku dayeyso inaad ku hadasho Faransiis, ha ka xumaan haddii dadku kaa codsadaan inaad ku celiso, ama umuuqato inaadan ku fahmayn, maadaama aysan ku dhaqmaynin wax cuno. Hayso dareenkaaga kaftanka, iyo haddii loo baahdo, qor jumlado ama magacyo meel ah. Xusuusnow inaad si tartiib ah oo cad u hadasho. Ilaa iyo intaad heer sare leedahay oo aad ugu yaraan fahmi karto filimada Faransiiska, waa inaad sidoo kale u qaadataa inay ku adkaan doonto dadku inay fahmaan waxaad sheegayso (qiyaasi qof kugula hadlaya Ingiriisiga lahjad aan la garan karin, waa isku mid) .
Markaad u baahan tahay tilmaamo waxa ay tahay inaad sameyso waa tan: hel qof yar, ama qof aqrinaya buug ama majallad Ingiriis ah, oo sida muuqata aan ku degdegin; dheh “hello” ama “bonjour”(Bon-zhor); ku bilaw inaad weydiiso haddii qofku ku hadlo Ingiriisiga, "Parlez-vous anglais?" (Par-LAY voo on-glay?) Xitaa haddii qofku wax ku akhrin karo Ingiriis, si tartiib ah oo cad ugu hadal; qor magacyada booska haddii loo baahdo. Aad u dhoola cadee. Sidoo kale, qaado khariidad (doorbid Paris par Arrondissement); iyadoo la ogyahay kakanaanta jidadka Paris way adag tahay in la sharaxo sida loo helo cinwaan gaar ah oo luqad kasta leh, si kastoo aad ugu hadasho. Haddii ay wax jiraan, qofku waxa laga yaabaa inuu fikrad ka haysto meesha aad raadineyso, laakiin waxaa laga yaabaa inuusan si sax ah u garanayn meesha laga yaabo inay tahay, sidaas darteed khariidaddu had iyo jeer way caawinaysaa.
Dhinaca kale waxaad u badan tahay inaad heli doonto garabka qabow haddii aad ku joojiso qof aan kala sooc lahayn metro (sida, dheh, qof da 'dhexaad ah oo deg deg ah oo heysta tareen uu raaco), ku guuldareysto inuu salaamo oo ku yiraahdo "meeye meesha X ama wadada Y ”.
Hadda, haddii aad ku hadasho Faransiis, xusuusnow laba Oraahda sixirka : "Excusez-moi de vous déranger" [ex-kuh-zay mwuh duh voo day-rawn-ZHAY] ("Waan ka xumahay inaan ku dhibaateeyo") iyo "Pourriez-vous m'aider?" [por-EE-AY voo may-DAY] (“Ma i caawin kartaa?”) gaar ahaan dukaamada; edeb leh ayaa ka shaqeyn doonta waxyaabo yaab leh.
Waxaa loo arkaa inay edeb tahay in marwalba la yiraahdo "bonjour" ama "bonsoir" shaqaalaha markii aad geleyso nooc kasta oo dukaan ah xitaa hadaadan ujeedo lahayn inaad wax iibsato. Markaad tagto waa inaad tiraahdaa "merci" si aad ugu mahad celisid dukaanlaha kuu ogolaaday inaad daalacatid oo aad dhahdid "bonne journée" (bun zhur-nay) ama "bonne soirée" (bun swa-ray) si aad ugu rajeyso maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan. “Bonne nuit” waxaa la isticmaalaa oo keliya marka qof loo sheego “habeen wanaagsan” markaad seexanayso.
Pont des Arts (Bridge of the Arts) iyo gadaal gadaashiisa, pont Neuf ("New Bridge", laakiin dhab ahaantii kan ugu da'da weyn Paris) iyo île de la Cité.
Mid ka mid ah qiimaha ugu fiican uguna habboon ee lagu arko indhaha Paris waa la Matxafka Paris Pass, Kaarka gelitaanka horay loo sii siiyay ee u oggolaanaya gelitaanka in ka badan 70 matxafyo iyo taallooyin ku wareegsan Paris (iyo Qasriga Versailles) wuxuuna yimaadaa 2-maalin (€ 48), 4-maalin (€ 62) iyo 6-maalin (€ 74) ) madaahibta (Agoosto 2016). Kuwani waa oo isku xiga maalmood. Kaadhku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka booddo safaf dhaadheer, oo lagu daro weyn xilliyada dalxiisyada oo khadku ballaadhi karo, waxaana laga heli karaa matxafyada ka qaybgalaya, xafiisyada dalxiiska, laamaha FNAC iyo dhammaan xarumaha waaweyn ee Métro iyo RER. Waxaad wali u baahan doontaa inaad lacag bixiso si aad u gasho bandhigyada gaarka ah badankood. Si looga fogaado sugitaanka safka ugu horreeya ee ugu horreeya ee lagu iibsanayo kaarka madxafka, joogso si aad u iibsato kaarkaaga maalin ama ka badan ka hor maalinta badhtankeeda. Kaarku ma noqdo mid firfircoon ilaa matxafkaaga ugu horreeya ama booqashada goobta aad qorto taariikhda bilowgaaga. Intaas ka dib, maalmaha la daboolay waa isku xigxiga. Ha qorin taariikhda bilowgaaga illaa aad hubto inaad isticmaali doonto kaarka maalintaas oo taxaddar inaad u isticmaasho qaabka taariikhda yurubiyanka sida ku cad kaarka: maalin-bil-sannadeedka.
Sidoo kale tixgeli ParisPass, Kaarka gelitaanka horay loo sii siiyay + safka oo u boodaya 60 soojiidasho oo ay ka mid yihiin Louvre, The Arc de Triomphe, iyo sidoo kale dalxiis webi oo u oggolaanaya metro iyo safarka gaadiidka dadweynaha oo bilaash ah. Beddelka ka raqiisan ee leh kaarkan cusub ee la isku daray ayaa la heli karaa laga soo bilaabo Sebtember 2008 waa Paris ComboPass, kaas oo ku yimaada noocyada Lite / Premium.
Qorshaynta booqashooyinkaaga: dhowr goobood ayaa leh “baro ceejin” oo xaddidaya tirada booqdayaasha soo dhex mari kara. Kuwaas waxaa ka mid ah: Eiffel Tower, Sainte-Chapelle, catacombs iyo tillaabooyinka lagu fuulo xagga sare ee Catreral-ka Notre Dame. Si looga fogaado khadadka, waa inaad ku bilowdaa maalintaada inaad timaado mid ka mid ah goobahan ugu yaraan 30 daqiiqo ka hor waqtiga furitaanka. Haddii kale, filo sugitaan ugu yaraan saacad ah. Matxafyada iyo qolalka badankood waxay xiran yihiin Isniinta ama Talaadada. Tusaalooyinka: Matxafka Louvre wuxuu xiran yahay Talaadada halka Matxafka Orsay uu xiran yahay Isniinta. Hubso inaad hubiso taariikhaha xiritaanka matxafka si aad uga fogaato niyad jab! Sidoo kale, inta badan tigidhada tikidhada waxay xiraan 30-45 daqiiqo kahor xiritaanka kama dambaysta ah.
Madxafyada qaranka oo dhan waxay u furan yihiin bilaash Axadda koowaad ee bisha. Si kastaba ha noqotee, tani waxay macnaheedu noqon kartaa safaf dhaadheer iyo bandhigyo badan. Ka fogow Paris inta lagu jiro usbuuca Easter-ka dadka oo badan aawadood. Dadku waa inay saf ugu galaan Eiffel Tower dhowr saacadood xitaa subaxa hore. Si kastaba ha noqotee, sugitaankan si weyn ayaa loo yareyn karaa, haddii uu ku habboon yahay, adoo lugeynaya labada heer ee ugu horreeya, ka dibna iibso tigidh wiishka dusha sare. Gelitaanka carwooyinka joogtada ah ee matxafyada ay maamusho magaalada waa bilaash marwalba (gelitaanka waxaa laga qaadaa bandhigyo kumeelgaar ah).
Liisaskaani waa qaar uun warbixinta kooban ee waxyaalaha ay tahay inaad runti aragto haddii aad kari karto muddada booqashadaada Paris. Ku liisaska oo dhameystiran waxaa laga helaa bog kasta oo degmo (guji magaca muuqaalka).
Liisaska wanaagsan ee dhacdooyinka dhaqanka ee hadda ka socda magaalada Paris ayaa laga heli karaa Pariscope or Daawooyinka Officiel des, joornaalada todobaadlaha ah ee taxan dhamaan riwaayadaha, bandhigyada farshaxanka, filimada, riwaayadaha masraxa iyo matxafyada. Waxaa laga heli karaa dhammaan kiishka. Waqtiga ka bixintu waa ikhtiyaar wanaagsan dalxiisayaasha, kuwaas oo aan ku hadlin faransiiska.
Eiffel Tower. Ma jiro taallo kale oo si fiican u astaan ​​u ah Paris.
Arc de Triomphe de l'Étoile. Arc de Triomphe wuxuu muujiyaa weynaanta wuxuuna ku siiyaa aragti dhexe oo magaalada ah.
Champs Elysees. Si ballaadhan ayaa loogu tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah jidadka ugu caansan adduunka (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Notre Dame Cathedral. Katidral Gothic cajiib ah oo dhiirrigelin u ahaa sheekada Victor Hugo The Hunchback of Notre Dame. Fuula kore!
Sacre Coeur. Kaniisad ku taal dusha sare ee barta ugu sarraysa Paris. Kaniisadda gadaasheeda waxaa ku yaal aagga fannaaniinta, xagga horena waxaa ku yaal aragtiyo qurux badan oo magaalada oo dhan ah.
Opera Garnier. Masterpiece ee qaab dhismeedka masraxa qarnigii 19aad oo uu dhisay Charles Garnier oo la furay 1875 guriyeynta Paris Opera tan iyo markii la aasaasay Louis XIV.
Catacombes de Paris. Waxaa loo adeegsaday in lagu keydiyo lafaha laga soo saaray xabaalaha Paris oo buux dhaafiyay. Lafaha in kabadan 6 milyan oo meyd ah ayaa halkaan jiifa.
Grande Arche de la Défense. Nooc casri ah oo dhisme xafiis ah Arc de Triomphe.
Panthéon. Hoosta, meesha ugu dambeysa ee lagu nasto ee geesiyaashii waaweynaa ee Jamhuuriyadda Faransiiska oo ay ka mid ahaayeen Voltaire, Victor Hugo, iyo Marie Skłodowska-Curie; kore, muuqaal cajaa'ib leh oo magaalada ah.
Qabuuraha Père-Lachaise. Si ka duwan qabuuraha adduunka oo dhan. Dhagaxyada quruxda leh ee qurxinta leh, taallo xusuus leh oo laga dhex sameeyay laamiyada geedaha safan. Eeg qabuuraha Jim Morrison, Oscar Wilde, iyo Frédéric Chopin, iyo kuwo kale oo badan.
Sainte-Chapelle. Kaniisad quraarado qurxoon leh. Gudaha oo aad uga qurux badan kaniisada weyn ee Notre Dame Cathedral.
Matxafyada iyo qolalka waaweyn ee Paris
Dhammaan matxafyada qaranka iyo taallooyinka waa u bilaash dhammaantood Axadda koowaad ee bisha.
Matxafka Louvre, iyo Ahraamta ee naqshadeeye IM Pei
Reer Louvre. Mid ka mid ah matxafyada ugu fiican adduunka farshaxanka iyo dhaqanka. Hoyga Mona Lisa iyo kuwa kale oo aan la tirin karin. Dhismo aad u tiro badan iyo uruurin, qorshee ugu yaraan laba booqasho.
Musée d'Orsay. Uruurinta cajiibka ah waxay kuxirantahay xarun tareen hore. Waxay u shaqeeyaan fanaaniinta waawayn ee qarnigii 19aad (1848-1914) oo ay ku jiraan Monet's "Blue Water Lily, Renoir's" Bal du moulin de la Galette ”, van Gogh's“ Bedroom in Arles ”, Whistler’s“ The Artists Mother ”, iwm.
Matxafka Rodin. Uruurinta iyo aruujiyada loogu tala galay farshaxanlaha Auguste Rodin, oo ku yaal guri quruxsan oo leh beero.
Matxafo Museum. Waxay kakoobantahay aruurinta sayidka.
Musée Marmottan-Monet. In kabadan 300 oo sawir gacmeedyo ah Claude Monet. Sidoo kale, shaqooyinka Berthe Morisot, Edgar Degas, Édouard Manet iyo Pierre-Auguste Renoir. "Impression Soleil Levant" by Monet ayaa la soo bandhigayaa.
Musée de l'Orangerie. [Jardin des Tuileries] Guryo “Ubaxyada Biyaha” (ama “Nymphéas”) - oo ah 360 darajo oo muujinaya Beerta ubaxa Monet ee Giverny. Sidoo kale, sawir-qaade iyo sawir-gacmeed ka dib Cézanne, Matisse, Modigliani, Picasso, Renoir, Rousseau, Soutine, Sisley iyo kuwo kale.
Musée Delacroix. Waxay ku yaalliin guriga rinjiile Eugène Delacroix.
Xarunta Georges Pompidou. Matxafka farshaxanka casriga ah. Dhismaha iyo isha Stvinsky Isha ku haysa waa soo jiidasho naftooda.
l'Eglise du Dome, kaniisadda Les Invalides, oo ku taal qabrigii Napoleon
Les Invalides. Matxaf aad u qurux badan oo hubka iyo hubka laga soo bilaabo qarniyadii dhexe ilaa maanta. Waxa kale oo ku jira qabrigii Napoleon Bonaparte.
Musée National Du Moyen Âge. Matxaf casri ah oo soo bandhigaya shanta "The Lady and the Unicorn", oo ku dhex yaal qayb Roomaan ah, qayb qarniyadii dhexe.
Musée des Arts Dhaqaatiirta. Soo bandhigida sideed qarni oo faransiis ah.
Carnavalet. Matxafka taariikhda Paris; bandhigyadu waa kuwo joogto ah oo bilaash ah (waxaa loo xiray dayactirka illaa dhammaadka 2019).
Cité des Sciences et de l'Industrie - La Villette. Matxafka sayniska ugu horreyn carruurta.
Mémorial de la Shoah. Matxafka Xusuusta ee Paris, oo ku yaal wadnaha Marais oo ku taal rue Geoffroy l'Asnier. Gelitaan Bilaash ah, tours toddobaadle ah oo hagitaan ah. Axada labaad ee bisha waxaa jira booqasho bilaash ah oo Ingiriis ah.
Matxafka Jacquemart-Andre. Ururinta gaarka loo leeyahay ee faransiiska, talyaaniga, holandooyinka hodanka ku ah daarta caadiga ah ee qarnigii 19-aad.
The Tennis-ka Faransiiska oo Furan soconayaa muddo laba toddobaad ah laga bilaabo Axadda ugu dambaysa ee bisha May. Dhacdada, oo ka socota maxkamadda dhoobada, ayaa had iyo jeer ka muuqda ciyaartoyda adduunka ugu sarreysa.
Eeg kubbadda cagta & rugby-ga caalamiga ah garoonka Stade de France. Garoonkan, oo leh 81,338, ayaa sidoo kale martigeliya riwaayadaha iyo ciyaaraha fudud. Ma laha koox deggan, in kasta oo kooxaha naadigu ay inta badan halkan ku ciyaaraan markii garoonkooda aan la heli karin. Waxay ku taal Saint-Denis, waqooyiga bartamaha magaalada, oo leh xarun tareen oo u gaar ah oo ku taal RER Route D.
Daawo kubbada cagta (kubada cagta) ee kooxda Paris Saint-Germain FC. Waxay ka ciyaaraan Ligue 1, heerka ugu sarreeya kubadda cagta Faransiiska, waxayna inta badan u qalmaan tartamada Yurub. Garoonkooda Parc des Princes, oo qaadkiisu yahay 48,583, wuxuu ku yaal degmada Prince-Marmottan ee galbeedka bartamaha magaalada. Adeegso Metro Porte de Saint-Cloud ama Exelmans.
Waxay umuuqataa inay had iyo jeer wax kadhacayaan Paris, marka laga reebo kuwa suurta galka ah ee fasaxyada iskuulada ee Ogosto iyo Febraayo, marka kala bar dadka Parisians laga helayo Paris, laakiin Koonfurta France ama Alps siday u kala horreeyaan. Xilliga ugu mashquulka badan ayaa laga yaabaa inay tahay dayrta, laga bilaabo toddobaad ama wixii ka dambeeya la rentrée scolaire ama "dib ugu noqoshada dugsiga" agagaarka Christmas (Kirismas) tiyaatarada, shineemooyinka iyo hoolalka xafladaha ayaa jadwalaya jadwalkooda sanadka.
Xitaa sidaas oo ay tahay, waxaa jira dhowr dhacdooyin oo sanadle ah xilliga qaboobaha, laga bilaabo alaabta guriga iyo carwadda qurxinta gudaha ee la yiraahdo Maison & Object bisha Janaayo.
Bishii Febraayo nouvel an chinois (Chinese sanadka cusub) waxaa looga dabaaldegaa magaalada Paris sida ay u tahay magaalo kasta oo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo Shiine iyo Fiyatnaamiis ah. Waxaa jira bandhigyo 3aad iyo 4aad degmooyin gaar ahaan Quartier Asiatique (Qeybta Aasiya) ee koonfurta 13aad ee Place d'Italie. Sidoo kale bisha Febraayo waa Lix Ciyaaraha Rugby Nations kaas oo kulminaya Faransiiska, England, Ireland, Scotland, Wales iyo Talyaaniga.
Labada toddobaad ee ugu horreeya ayaa dhaca bisha Maarso: Toddobaadka Fashionka Guga, siinta naqshadeeyayaasha goob ay ku soo bandhigaan haweenka diyaar-to-Duugga aruurinta (diyaar u ah inay xidhaan) jiilaalka soo socda
Bishii Juun, Rendez-vous au Jardin waa guri u furan beero badan oo reer Paris ah, adiga oo ku siinaya fursad aad kula kulanto jardiinada dhabta ah ee reer Paris isla markaana aad u aragto waxa ay abuureen. The Fête de la Musique waxay u dabaaldegtaa xagaaga (21 Juun) iyada oo jilbaha-magaalada muusigga ah oo bilaash ah. Ugu dambeyntii 26-ka Juun waa Pride Gay dhoolatus, oo laga yaabo inay ka muuqato ka qaybgalka ugu daacadsan ee xafiiska duqa magaalada ee carwooyinka noocan oo kale ah ee adduunka ka dhaca.
Fasaxa qaran ee Faransiiska Maalinta Bastille markay ahayd 14-kii Luulyo waxay u dabaaldegaysaa duufaantii caanka ahayd ee Bastille intii lagu jiray Kacaankii Faransiiska. Paris waxay martigelisaa dhacdooyin dhowr ah oo cajiib ah maalintaas kuwa ugu caansan ay yihiin Bastille Parade kaas oo lagu qabto Champs-Élysées 10:00 subaxnimo laguna baahiyo inta badan Yurub inteeda kale telefishanka. Wadada oo dhan waxaa la buux dhaafin doona daawadayaal ee goor hore imaada. The Rashka Maalinta Bastille waa daaweyn aan caadi aheyn oo loogu talagalay dadka safarka ah ee nasiibka u yeeshay inay magaalada yimaadaan maalinta Bastille. Xafiiska du Tourisme et des Congress de Paris wuxuu kugula talinayaa in lagu ururiyo agagaarka horyaalka Mars, jardiinooyinka Eiffel Tower.
Sidoo kale bisha Luulyo, Shineemo iyo Plein Air waa xafladaha shaneemada bannaanka sanadlaha ah ee ka dhacda Parc de la Villette, ee 19th ee shaashadda ugu weyn ee la buufin karo ee Yurub. Inta badan bilaha Luulyo iyo Ogosto, qaybo ka mid ah labada bangi ee Seine waxaa laga beddelayaa toobiyaha loo maro xeebta macmalka ah Goobaha Paris. Sidoo kale bisha Luulyo tartanka baaskiil wadista ee Tour de France waxay leedahay waddo is bedbedesha sannad kasta, si kastaba ha noqotee waxay had iyo jeer dhammaataa Axadda ugu dambeysa ee Luulyo iyadoo loo marayo Arc de Triomphe.
Dhammaadkii usbuucii dhammaaday ee ugu dambeeyay Ogosto, xaflad muusig heer caalami ah Dhagax iyo Seine jiido dhagaxa caalamiga ah iyo xiddigaha pop Domaine national de Saint-Cloud, dhanka galbeed ee Paris.
Intii lagu gudajiray bartamihii bishii Sebtember DJ-yada iyo (badanaa dhalinyarada) taageerayaasha ka kala yimid Yurub oo dhan waxay isugu imaanayaan Paris shan ama lix maalmood oo dhaanto iwm. Parade farsamo - dhoolatus wadadiisu ay qiyaastii ka socoto Dhig de la Bastille si ay u Sorbonne, iyo qiyaastii isla waqtigaas iidda Jazz à la Villette wuxuu keenayaa qaar ka mid ah magacyada ugu waaweyn jazz-ka casriga ah adduunka oo dhan.
The Nuit Blanche badiyaa badhtamaha Paris oo loo beddelaa 'moonlit theme-park' oo loogu talagalay farshaxan-yaqaan dhammaan Sabtiga koowaad ee Oktoobar, iyo Week Week Fashion soo laabto waxyar kadib intaas oo muujineysa Haweenka Diyaar u-labis aruurinta xagaaga soo socda; sidaan soo xusnay aruurinta xilliga qaboobaha waxaa la soo bandhigayaa bisha Maarso.
Khamiista saddexaad ee Nofeembar waxay ku beegantahay sii deynta Le Beaujolais Nouveau iyo bilowga xilliga Kirismaska. Caawa, nalalka Kirismaska ​​waxaa lagu shiday xaflad ka dhacday Champs Elysees, inta badan waxaa goobjoog ka ah boqolaal (hadaanay kumanaan ahayn) dad iyo marti sharaf badan, oo uu kujiro madaxweynaha Faransiiska.
Nasiib darrose, ma jiraan hagitaanno munaasab ah oo dhammaystiran oo ka hadlaya riwaayadaha, naadiyada, filimada ama dhacdooyinka gaarka ah. Waayo, tiyaatarka, filimada iyo bandhigyo soo qaado ka Pariscope iyo L'officiel du Spectacle, Waxaa laga heli karaa goobaha lagu iibiyo news 0.40. Loogu talagalay (gaar ahaan kuwa yaryar, beddelka ah) riwaayado ayaa laga soo qaadaa LYLO, buug yar oo bilaash ah oo laga heli karo baararka qaarkood iyo FNAC. Ma jiro nooc khadka tooska ah ee adeegsadayaasha ku habboon ee hagahan.
Cafe Philo oo af Ingiriisi ah, Cafe de Flore, 172, Blvd St-Germain. Cafe Philo oo Ingiriis ah ayaa ku kulma Arbacada koowaad ee bil kasta dabaqa sare ee Cafe de Flore. Qof walba waa la casuumay. Maaha inaad aqoon u leedahay falsafadda. Kulamadu waxay kubilaabmayaan habka codbixinta laba wareeg ah si loo go'aamiyo mowduuc. Mawduuca ayaa laga wada hadlayaa laba saacadood. Bilaash
Paris dad badani waxay u haystaan ​​inay tahay goobta uu ka dhashay sawirku, in kasta oo qofku ka doodi karo sax ahaanshaha sheegashadan, ma jiraan wax dood ah oo ku saabsan in Paris maanta tahay riyadii sawir qaade. Caasimadda Faransiiska waxay siisaa bilowga iyo kuwa isku mid ah fursado sawirro qurux badan. Waxay leedahay taallo sawir leh (tusaale ahaan, Arc de Triomphe, Eiffel Tower, obelisk-ka Concorde, iyo kuwa kale oo aan tiro lahayn); dhismaha (tusaale ahaan, Louvre, Notre Dame, Matxafka Dunida Carabta) iyo muuqaalka waddooyinka magaalooyinka (tusaale, Marais, Montmartre iyo Belleville). Markii aad ka daasho qaadashada sawirradaada, booqo mid ka mid ah hay'adaha badan ee u heellan sawirka (tusaale, Matxafka Yurub ee Sawirka, Matxafka Jeu de Paume ama Henri Cartier Bresson Foundation). Xarumahan iyo kuwa kaleba, waxaad ku baran kartaa waxyaabaha ku saabsan taariikhda hodanka ah ee Paris sida meesha horumarka muhiimka u ah sawir qaadista (tusaale, Daguerrotype) iyo inay hoy u tahay farshaxanno badan oo ganacsi (sida, Robert Doisneau, André Kertész, Eugene Atget iyo Henri Cartier Bresson).
Sawirro Kafiican Paris, 32 Avenue de Suffren,. Ballan ahaan, booqashooyinku waxay soconayaan 4 saacadood. Sawirada Better Paris waxay bixisaa dalxiisyo waxbarasho iyo aqoon isweydaarsiyo isku dhafan gacan-ku-barashada farsamooyinka muhiimka ah ee sawir-qaadista iyadoo lagu hagayo, laguna faalloonayo, meelaha ugu sawirrada badan ee Paris. Waxaa hogaaminaya sawir qaadayaasha ku hadla Ingiriisiga iyo macallimiinta, booqashooyinkan waxay u furan yihiin dhammaan heerarka xirfadeed iyo xiisaha. Laga soo bilaabo € 195 / maalin badhkeed; € 290 / maalin dhan.
Sab's Photo Paris Sawir iyo Safarrada Xiisaha leh,. Booqashooyinku waa kuwo gaar loo leeyahay waxayna socdaan ugu yaraan 4 saacadood. Xamaasada Paris Sab Will waxay isku daraysaa tilmaamaha sawir qaadista ee tayada sare leh faallooyin xiiso leh oo ku saabsan waxyaabo badan oo magaalada ku saabsan. Safarada ugu caansan Sab waxaa ka mid ah Montmartre, Latin Quarter, Marais iyo Louvre / Palais Royal area laakiin dad badan ayaa doorta inay abuuraan safarro u gaar ah iyaga oo leh caawimaadda Sab. Isu dheelitirka u dhexeeya sawir qaadista iyo taariikhda / xiisaha go'aanka waxaa go'aaminaya macmiilka. Nooca kaamirada aad haysato iyo heerka khibradaada micno malahan maadaama Sab uu xooga saarayo kobcinta 'isha' sawir qaadaha iyo qaddarinta halabuurka iyo qabashada daqiiqado lama filaan ah oo hal abuur leh. € 150 / maalin badh, qiimo dhimis lamaanayaasha, asxaabta iyo qoysaska .. (cusbooneysiiyay Jun 2016)
The Cinemooyinka ee Paris waa (ama uguyaraan waa inay ahaadaan) xaasidnimada dunida filimka sii socota. Dabcan, sida meel kasta oo kale waxaad ku arki kartaa filimo badan oo miisaaniyadeed oo markii ugu horreysay laga qabtay Faransiiska iyo meelo kale. Taasi inkasta, waa bilow. Toddobaad kasta oo la bixiyo waxaa jira ugu yaraan nus-dersin xaflado filim ah, oo aad ku arki karto dhammaan shaqooyinka jilaa ama agaasime la siiyay. Dhanka kale waxaa jira qaar ka mid ah filimadii hore ee filimada sida ' Maxaa cusub Pussycat or Royal Casino taas oo aad ugu raaxeysan karto maalin kasta oo aad rabto.
Filimaan badan oo aan Faransiis ahayn ayaa cinwaan looga dhigaa (oo loo yaqaan "nooca asalka ah”“ VO ”ama“ VOstfr ”oo ka soo horjeedda“ VF ”oo loogu talo galay française nooca).
Waxaa jira tiro siyaabo ah oo lagu ogaan karo waxa ciyaaraya, laakiin hagaha ugu badan ee la isticmaalo ayaa ah Pariscope, oo aad ka heli karto goobaha lagu iibiyo ee for 0.70. Dhanka kale waxaa jira hagayaal khadka tooska ah aan la soo koobi karin oo leh macluumaad ku saabsan shineemo kasta oo ku taal Paris.
The Opera-ga Paris, iyo sidoo kale shirkaddeeda ballet-ka ee la xidhiidha, Paris Opera Ballet, ayaa loo tixgeliyaa inay ka mid yihiin shirkadaha waxqabadka heerka sare ee adduunka.
Haddii aad ka yar tahay 26, waxaa jira sicir dhan of 10 oo loogu talagalay tiyaatar kasta oo gaar loo leeyahay oo magaalada ku yaal maalin kasta oo Talaado ah, Arbaco ah, iyo Khamiista habeen kasta. Qiimahan laguma raacayo tiyaatarada dadweynaha iyo opera.
Luxembourg Gardens iyo Palais du Luxembourg (Sénat) bishii Abriil
Cité des enfants 19-keedii, matxaf loogu talagalay carruurta ku dhex taal Cité des Sciences et de l'Industrie, waa is-dhexgal, madadaalo, iyo waxbarasho. Waxaa jira laba qaybood oo kala duwan oo loogu talagalay 3-5 set iyo 5-12 set. Qaybta tigidhada waxay leedahay bandhigyo fudud oo loogu talagalay in lagu riixo, lagu riixo, laguna jiido. Qaybta loogu talagalay carruurta waaweyn ayaa ka sii casrisan tijaabooyinka sayniska iyo istuudiyaha TV-ga. Métro Porte de la Villete (7)
Jardin du Luxembourg ee 6aad. Waxaa loo tirin lahaa inay tahay wax lagu khiyaaneeyo inaadan ilmahaaga 10 sano ka yar u qaadin Jardin du Luxembourg, oo ay aad u jecel yihiin carruurta reer Paris. Iyada oo leh caan caan ah adduunka, balli loogu talagalay doomaha shiraaca, tiyaatarka caruusadaha, fardo fuushan, ciyaartooyda chess, goobta carruurta lagu ciyaaro, waxay leedahay wax kasta oo carruur ah (oo leh kuraas wanaagsan oo loogu talagalay waalidiinta daallan!). Marionettes du Luxembourg, tiyaatarka caruusadaha, marxaladaha caadiga ah ee puppet-ka Faransiiska waxay ku muujinayaan Faransiis laakiin waa inay ahaadaan kuwo si fudud loo fahmi karo. Waxaa jira meelo badan oo cunto fudud ah. RER Luxembourg (B) ama Métro Odeon (4, 10)
Parc des Buttes-Chaumont 19aad. Buttes-Chaumont wuxuu u fiican yahay kuwa carruurta leh ee jecel inay ordaan, fuulaan, oo sahamiyaan. Waxaa lagu dhisay goobta dhagaxa laga tago, jardiinadu waxay qiyaas ahaan u eg tahay weel oo dhererkeedu yahay 30-mitir oo dhererkeedu ku yaalo bartamaha balli ku yaal bartamaha beerta. Waxaa jira wadiiqooyin kor u socda dhagaxa, boholo, biyo-dhacyo, buundo ganaax, iyo dhagaxa weyn ee dhagaxa dushiisa oo leh aragti 360-degree ah. Waxa kale oo jira tiyaatarka caruusadaha iyo garoon lagu ciyaaro. Métro Buttes-Chaumont (7bis), Botzaris (7bis), ama Laumière (5)
Parc Zoologique ee 12aad. Beertan xayawaanku way ka duwan tahay sababo laxiriira buur macmal ah oo 236 cag ah oo ku taal bartankeeda. Fuula wiishka dusha sare oo ku raaxee aragtida ama daawada riyaha buuraha oo alaabtooda ku sameynaya dhinacyada. Libaaxyada, shabeelka, iyo wax kasta oo loogu talagalay inay ka farxiyaan carruurta ayaa laga heli karaa xadiiqada xayawaanka haddii buurtu u samayn weydo carruurtaada. RER / Métro Gare d'Austerlitz (5, 10, C)
Jardin d'Alimlimatation 16aad wuxuu leeyahay dhowr safar, oo ay ku jiraan xeebbo xajmi ah oo xajmi ah oo ku habboon carruurta da'doodu tahay saddex sano jir, iyo sidoo kale xadiiqadda yar iyo qiyaasta Musée en Herbe. Métro Les Sablons (1)
Isbahaysiga Française. Mid ka mid ah iskuulada ugu waaweyn aduunka ee luuqada faransiiska, Isbahaysiga Paris Française waxay leedahay koorsooyin kaladuwan oo kaladuwan oo loogu talagalay booqde inuu ka xusho.
Ecole France Langue. Faransiiska Langue waxay leeyihiin koorsooyin kala duwan oo kala duwan, oo ka bilaabanaya sida ugu gaaban hal usbuuc illaa waxbarashada muddada-dheer. Fasallada waxaa lagu dhigaa gebi ahaanba Faransiis, iyadoo ardayda (oo ka kala imanaya dhammaan qaybaha adduunka) laga niyad-jebiyey inay ku hadlaan afkooda hooyo dhammaantood inta lagu jiro casharrada. Muhiimadu waxay ku badan tahay hadalka iyo dhageysiga halkii laga ahaan lahaa qorista iyo naxwaha. Iskuulku wuxuu ku fidsan yahay dhowr goobood oo ku wareegsan Place Victor Hugo ee 16e.
Jaamacadda Paris IV. Waxay bixisaa koorsooyin 'waxbarasho' iyo sidoo kale 'jaamacad' oo loogu talagalay dadka ajaanibta ah ee ku hadla luqadda iyo dhaqanka Faransiiska, oo bilaabma xilliyada kala duwan ee sanadka.
Dugsiga Qalinjabinta Mareykanka ee Paris, 101, boul Raspail,. Dugsiga qalin-jabinta ee Paris oo ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo barnaamijyada ganacsiga. Fasallada waxaa lagu dhigaa Ingiriisiga oo leh fasallo ikhtiyaari ah oo Faransiis ah.
Carabi,. Dhacdada Isdhaafsiga Luuqada Faransiiska / Ingriiska ee Paris, 3 jeer usbuucii qaar kamid ah meelaha ugufiican Paris. Layliskaaga Faransiiska intaad wakhti fiican la qaadanayso dadka deegaanka.
Jaamacadda Schiller International, 9 rue Yvart, 75015 ,. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Paris waa fadhiga meelaha kale si looga barto mowduucyo kala duwan.
Maktabadda Mareykanka ee Paris (5 daqiiqo oo ka socota Eiffel Tower). Meel aad u wanaagsan oo lagu booqdo Paris waa Maktabadda Mareykanka, tani waa hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo gebi ahaanba ku tiirsan deeqaha si albaabadeeda loo furo. Soo booqdeyaashu waxay iibsan karaan kaar maalin ama xubin kale oo gaagaaban. Maktabaddu waxay leedahay Wi-Fi oo haddii aad haysato laptop-kaaga markaa waxaad ka heli kartaa internetka lacag la'aan marka laga reebo maalinta loo maro maktabadda. Waxay leedahay buugaag aad u fiican, arrimaha hadda ka soo baxa majaladaha Mareykanka, iyo marmar caan ka ah dadka caanka ah.
Sida ugufiican ee loo barto dhaqanka marka loo barto barashada waxyaabaha ka baxa cunnooyinkooda hooyo. Ka dib markaad tijaabiso saamigaaga cadaalad ah ee Macarons iyo Magret de Canard agagaarka Paris, waxaa laga yaabaa inaad ku raaxeysato inaad qaadato galab si aad u barato sida loo sameeyo cuntooyinkan macmacaanka ah isla markaana aad ula qaadato cuntooyinka guriga. In kasta oo ay jiraan dugsiyo badan oo wax lagu karsado oo ku wareegsan Paris, haddana in yar ayaa bixisa fasalo Ingiriis ah.
Le Cunto yaqaan, 59 Rue du Cardinal Lemoine, Paris 75004,. Isdiiwaangeli khadka tooska ah, fasallada waxay socdaan 2-6 saacadood. Qeybta Latinka, Le Foodist waa iskuul wax lagu karsado oo bixiya Fasalada Cunnooyinka Faransiiska, Cuntada iyo Cashada, bilaabida Dhadhaminta Khamriga, Safarada Cuntada iyo Cashada Casriga ah. Waxaa hogaaminaya Chefs-ka Faransiiska, koorsooyinka waxaa lagu sameeyaa ingiriisiga, fasallo yar yar, oo leh hamiga barashada farsamada iyo taariikhda cuntooyinka faransiiska ee soo jireenka ah. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa € 35 ee Hindisaha Dhadhaminta Khamriga illaa ine 180 ee fasalka Suuqa.
Le Cordon Bleu Paris, 8 Rue Léon Delhomme, Paris 75015,, fax: + 33 1 48 56 03 96. Bixinta labadaba barnaamijyada xirfadeed ee muddada-dheer iyo sidoo kale kal-fadhiyada saacadaha gaaban, Le Cordon Bleu waa mid ka mid ah iskuulada cunnada ee ugu caansan ee ku yaal bartamaha Paris. Le Cordon Bleu waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay ilaaliyaha farsamada cunnooyinka Faransiiska iyada oo loo marayo barnaamijyadeeda cunnada ee sii wadaya ilaalinta iyo gudbinta hanashada iyo qadarinta farshaxanka cunnada ee aasaaska u ahaa gastronomy Faransiis in ka badan 500 sano.
La cuisine paris, 80 Quai de L'Hôtel de Ville, Paris 75004,. Isdiiwaangeli khadka tooska ah, fasallada waxay socdaan 2-4 saacadood La Cuisine Paris waa iskuul kuul Ingiriis-saaxiibtinimo leh oo ku yaal bartamaha Paris, oo ku yaal Seine oo bixiya barista khabiirka ee farsamooyinka lagama maarmaanka u ah cunnada Faransiiska. Waxaa hogaaminaya koox caalami ah oo kuugga afka Ingiriiska ku hadasha oo dhammaantood ku tababbaran cunto karinta Faransiiska caadiga ah, fasalladani waxay u furan yihiin dhammaan heerarka xirfadeed iyo dhadhankooda. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa 69 euro laba saac oo Macaron ah illaa 160 euro oo ah fasalka Suuqa ee 4 saac ah.
Ka shaqee Paris, gaar ahaan kuwa aan ka tirsaneyn EU / EEA / muwaadiniinta Switzerland, waxay u baahan tahay geedi socod aad u dheer oo dhib badan. Ilaa aad haysato mid ka mid ah xirfadaha tirada badan ee baahida loo qabo, waxaa hubaal ah inay lagama maarmaan noqon doonto inaad shaqo ka hesho shaqo-bixiye intaadan imaan ka hor. Cida aad u shaqayso, dhankooda, waa inay lahaadaan dalabka oo ay ansixiyaan hay'adaha dawlada ee ay khusayso, sidoo kale. Haddii aad doorato shaqo aan la soo sheegin, sida daryeelka ilmaha, uma baahnid inaad ka xumaato inaad ku socoto nidaamka si aad u hesho Carte de séjour, tusaale ahaan, kaarka aqoonsiga ee soo-booqdaha rasmiga ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad doorato isbeddelka goobta, waxaa lagugula talinayaa inaad hesho a Carte de séjour intaadan helin wax shaqo ah haba yaraatee, maadaama hawshu ka dheeraan karto intii la filayay. A Carte de séjour had iyo jeer waa lagama maarmaan in la furo xisaab bangi iyo wixii la mid ah, iyo kordhinta si loo gaaro tiro kasta oo hawlo kale ah oo ku lug leh nolosha casriga ah, sidaa darteed haddii aadan ku qanacsanayn inaad wax walba ku beddelato lacag caddaan ah waa inaad qaniinto xabadda oo aad waxyaalaha kor ku sii hayso -and-up.
Haddii aad u tagto Paris shir, waxaa jira fursad aad u wanaagsan oo aad ku dhammeysid kulan ama aad uga baxdaan jirkaaga CNIT (Xarunta Warshadaha iyo Teknolojiyada Cusub). Shirkan iyo goobta shirku waa mid ka mid ah dhismooyinka ugu da'da weyn ee ku yaal aagga La Difaaca ee Paris waxayna wali u muuqataa mid casri ah inkasta oo ay dhererkeedu dheer yahay dhismayaasha ku xeeran iyo hudheelada ku dhow CNIT ayaa inta badan la siiyaa kuwa ku nool aagga ganacsiga.
Xusuusnow, magaalada Paris waxay leedahay shabakad aad u tiro badan oo soogalooti ah oo imaanaysa soona socota, mar walbana waa wax weyn in la dhex galo shabakadaas. Magaaladu waxay haysaa shaqooyin faro badan oo diyaar u ah in la helo, xitaa haddii baaritaanka la dareemayo neerfa-qabad marka hore.
Paris waa mid ka mid ah kuwa waa weyn fashion Xarumaha dunida reer Galbeedka, oo ay ku yaalliin New York, London, iyo Milan, taasoo ka dhigaysa farxad dukaanlaha. In kasta oo muuqaalka moodada ee Paris uu si joogto ah u kobcayo, Xarumaha wax iibsiga ee waaweyn waxay u muuqdaan inay isku mid yihiin. Couture dhamaadka sare waxaa laga heli karaa degmadda 8aad. Xilliga xagaaga, ma jirto wax ka wanaagsan inaad dhex-mariso dukaammada ku teedsan Canal St-Martin, ama aad ku dhex lugeysid arcades-ka cajiibka ah ee Palais-Royal taariikhi ah, oo si quruxsan loo soo duubay wax-iibsi oo lulaya gacan kasta.
Le Marais waa xaafad u badan Yuhuud, inta badan dukaamada ku yaal Le Marais waxay furan yihiin Axadaha. Dukaamada ku yaal aaggan waa kuwo dhow, dukaamo, dukaamada dharka "Paris" Shaki kuma lihi inaad wax ka heli doontid waddo walba, mar walbana waa u qalantaa muuqaalka.
Meelaha kale ee waaweyn ee laga dukaamaysto waa hareeraha aagga Sèvres Babylone (Métro Line 10 iyo Khad 12). Waxay ku taal aaggan waxaad ka heli doontaa Le Bon Marché 7th, gaar ahaan rue de Cherche Midi 6aad. Aaggu wuxuu ku faanaa qaar ka mid ah guryaha waaweyn ee moodada (Chanel, Jean Paul Gaultier, Versace, iwm) sidoo kale wuxuu leeyahay dukaamo yar yar oo gaar loo leeyahay oo leh dhar gacmo lagu sameeyay.
In ka Quartier Saint-Germain-des-Prés, waxaad ka heli kartaa sacab muggiis oo dukaanno dhar-gur ah ah, oo wax walba ka qaadaya dharka hore ee dharka qarnigii 20-aad, illaa 70-ka muraayadaha indhaha ee Chanel. Socodka Boulevard Saint-Germain, waxaad ka heli doontaa noocyo waaweyn. Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadineyso helitaanno koronto, dooro inaad ku socotid dhinaca woqooyi ee Boulevard, gaar ahaan dhinaca rue Saint André des Arts, Halka aad had iyo jeer kaheli karto kafateeriyaad fiican oo aad istaagto. Aagga koonfurta Saint-Germain waa sida ugufiican yahay, wuxuuna ku yimaadaa qiimo lagu jaan qaadayo.
Qeybaha farshaxanka ee 1 iyo 4, waxaa jira gorgortan badan oo lagu sameeyo, markale, haddii aad diyaar u tahay inaad eegto. Xusuusiyeyaasha si fudud ayaa loo helaa waxayna noqon karaan kuwo aan qaali ahayn illaa inta aadan ka iibsan goobaha dalxiiska. Buugaagta jaban ee isku xirka Faransiiska, iskuday rubuc jaamacadeed / Latin ah maadaama ay ku iibiyaan buugaag dhammaan luqadaha laga bilaabo kala bar euro midkiiba.
Paris waxay leedahay 3 suuqyada dhoofinta waaweyn, dhammaantoodna waxay ku yaalliin bannaanka bartamaha magaalada. Kuwaas waxaa ugu caansan Marché aux Puces de St-Ouen (Porte de Clignancourt) (Suuqa Kalluunka Clignancourt), Métro: Porte de Clignancourt, 18-keedii, hoyga loogu talagalay dadka jecel waxyaalaha qadiimiga ah, alaabada gacanta labaad, iyo moodada retro. Maalmaha ugu wanaagsan ee la tagi karaa waa Sabtida iyo Axadda. Waxaa jira waqtiyo gaar ah oo usbuuca ah oo kaliya uruuriyeyaasha qadiimiga ah loo oggol yahay dukaamada, sidoo kale waxaa jira waqtiyo maalinta milkiilayaasha dukaamada ay qaataan Paris siesta, oo ku raaxee cappuccino waqti firaaqo ah saacad ama wax la mid ah. Waqtiyada ugu wanaagsan ee la booqdo suuqyada dhoofku waa xilliga gu'ga iyo xagaaga, markaasoo aaggu aad u firfircoon yahay. Gudaha iyo hareeraha xarunta mitrooga, waxaad kaheli kartaa aagga waxoogaa duurjoog ah, laakiin wali amaan ah.
Rue de Rome, oo ku taal agagaarka Gare St. Lazare, waxaa ku badan dad luthiers, naxaas iyo alwaax sameeya, iibiya biyaano, iyo dukaamada muusikada. Saldhigga dhulka hoostiisa mara ee Yurub. Aagga koonfureed ee xarunta mitrooga ee Pigalle sidoo kale waxaa ku yaal dukaamo muusig oo toos ah (oo aad loogu janjeedho gitaarka iyo durbaannada).
Kuwa jecel fanka, hubi inaad iska hubiso Quartier Saint-Germain-des-Prés, taas oo caan ku ah qolalka ay ka kooban tahay, suurtagalna maaha in waddo la rogo iyada oo aan la helin galbeel aad ku jaleecdo. Jimcaha, inta badan way furan yihiin illaa goor dambe. Intooda badani xitaa waxay leeyihiin faa iidada dhalooyinka khamriga si aad ugu dhex mushaaxi karto galaaskaada khamriga ah aadna dareento wax badan farshaxanka. Wadooyin waaweyn oo la maro waa rue de Seine, rue Yacquub, rue des Beaux Arts, Rue Bonaparte, Iyo Rue Mazarine. Sidoo kale, hubi inaad booqato degmada taariikhiga ah ee Montparnasse iyo sagxad Vavin halkaas oo ay ka shaqeyn jireen farshaxanno sida Modigliani, Gauguin iyo Zadkine.
Halkee lagu joogayaa Paris
Markii badanaa lagu dhawaaqay safarka ugu caansan adduunka, Paris waxay leedahay in ka badan kun hudheelo oo laga kala xusho, iyo xitaa in ka badan gobolka ku xeeran -le-de-France. Xulashada ayaa noqon karta mid xad dhaaf ah, laakiin waa in si taxaddar leh loo sameeyaa. Waxaa jira kala duwanaansho ballaaran oo heerarka ah iyo goobta ayaa fure u ah in joogitaankaaga Paris uu noqdo mid lagu farxo iyo waqtiga si fiican loo isticmaalo. Diyaar u noqo inaad bixiso qiimaha caanka Paris - xitaa hudheelada jaban waa kuwo aad qaali u ah.
In kasta oo caan ku yihiin dalxiisayaasha, silsiladaha hudheellada adduunka waxay leeyihiin wax yar oo ka mid ah suuqyada Paris. Waxyaabaha laga reebi karo ayaa ah Accor oo fadhigeedu yahay Faransiiska, oo ku faantaa in ka badan 300 hudheello ku yaal aagga Paris, in kasta oo meelo badan oo badhtamaha Paris ah inta badan aan daboolnayn. Waxaa jira qadar cadaalad ah oo reer Galbeedka ugu Fiican sidoo kale, laakiin inta badan silsiladaha caalamiga ah waxay xadidayaan joogitaankooda hudheelo aad uyar oo qaali ah (oo qaali ah) oo kuyaala goobaha muhiimka ah. Safrayaasha daacadda u ah nooc gaar ah ayaa laga yaabaa inay ku adkaato daacadnimadooda, lagu qasbo inay bixiyaan (halkii laga abaalmarin lahaa) ama ay awoodi waayaan inay ka helaan magaca huteellada ay doorteen ee Paris.
Huteelada ku yaal ardarenta dhexe waxay u muuqdaan kuwo qaali ah, in kasta oo kuwa aad u jaban iyana la heli karo. Marka laga reebo in yar, waxay u muuqdaan inay bixiyaan qolal yar - la soco xaqiiqda ah in kala duwanaanta qiimaha u dhexeeya hudheelada ay u tarjumi karto kala duwanaansho xagga adeegga, xarumaha iyo ballanta, laakiin qasab maahan cabbirka qolka. Qolalka 12-16 mitir murabac ah (oo qiyaastii ah kalabar qolalka hudheelada caadiga ah tusaale ahaan Maraykanka) ayaa caadi ka ah bartamaha Paris, iyadoon loo eegin heerarka hoteellada.
Huteelada ka raqiisan meelaha caanka ah waxay u muuqdaan kuwo da 'weyn, dhismayaal soo jiidasho yar, oo xarumahooda iyo balamaha ay noqon karaan kuwo duugoobay oo duugoobay, heerarka ka dambeeya ee qofku ka filan karo caasimada wax walbo oo quruxsan. Xitaa hudheelada la cusbooneysiiyay ee la soo celiyay ayaa laga yaabaa inay muujiyaan kala duwanaansho ballaaran oo heerarka u dhexeeya qaybaha qolka, iyo in qaar ka mid ah qolalka aan dib loo cusbooneysiinin ama kaliya loo yareynin si ay u awoodaan inay bixiyaan qiimeyn soo jiidasho leh, indho qabad leh iyaga ka dibna u sii gudubta qaybaha qolka ee raaxada leh. Had iyo jeer hubi dib-u-eegista ugu dambeysay, doorbidayo sawirrada, si hufan loo go'aamiyo waxa laga filayo hudheel la siiyay iyo qaybta qolka la siiyay.
Huteelada ka baxsan Xarunta Magaalada, ama xitaa banaanka Peripherique iyo Paris lafteedu, way ka qiimo jaban karaan oo waxay ka qiimo roon yihiin lacagta marka loo eego kuwa ku yaal bartamaha Paris, iyadoo weli ay leeyihiin iskuxirayaal tareen oo wanaagsan metro ama RER. Taasi waxay tiri, waa inaad si fiican u hubisaa inta ay ka fog tahay xarunta metro / RER ee hudheelka la siiyay, iyo in isku xidhka POI-yada aad rabto inaad booqato uu yahay mid toos ah, dhakhso leh oo fudud. Sidoo kale qayb ka noqo kharashka dheeriga ah ee gaadiidka ee aagagga dibedda, iyo sidoo kale waqtiga ku qaatay safarka iyo ka soo noqoshada magaalada iyo xaddidaadda ka dhalanaysa.
Sababtoo ah dookhyada maxalliga ah, barkadda qubeyska ee musqusha waa wax caadi ka ah hudheelada badankood, xitaa haddii ay macnaheedu tahay inay ku tuujinayso musqul aad u yar, oo sii xaddidaysa booska. Haddii aad doorbideyso qubeys-ku-maydhasho, waxaad u baahan tahay inaad raadsato hudheel si gaar ah u bixiya kuwa (oo loo yaqaan "douche italienne”By Faransiis), iyo waa inaad guud ahaan eegtaa guryaha cusub, ujeedooyinka loo dhisay.
Hoteelada Paris, ku dhowaad iyadoon loo eegin qaybta ama qiimaha, waxay ilaaliyaan xilliyada sare iyo kuwa hoose. Kuwani waxyar ayey kaga duwan yihiin hudheel kale, laakiin badanaa xilliyada sare waxay qiyaas ahaan u dhigmaan dabayaaqada guga iyo xagaaga, iyo suurta galnimada toddobaadyo ku dhow xilliga kirismaska.
Liisaska hudheellada shaqsiyeed eeg boggaga Arrondissement ee kala duwan.
Kuwa jooga usbuuc ama in kabadan, kireynta aqal qalabaysan waxay u noqon kartaa ikhtiyaar raaxo badan oo lacag badbaadin ah, qaasatan 3 ama kabadan dad waaweyn. Guryaha alaabtu ku kala duwanaan karaan ayaa si weyn ugu kala duwanaan kara goobta iyo tayada, waxay siinayaan waafajinno kala duwan iyo xulashooyinka qalabka iyo astaamaha jikada, ama waxay ahaan karaan kuwo aad uga sarreeya heerka waddooyinka oo aan lahayn wiish. Ka filo cabirrada guryaha inay noqdaan kuwa suubban. Helitaanka gaadiidka dadweynaha ee deegaanka ayaa sidoo kale aad u kala duwanaan kara. Marka si taxaddar leh u dooro kaliya markaad hesho sharaxaad buuxda oo ku saabsan hanti xiiso leh.
Degello badan ayaa kaa caawin doona inaad kiro hesho. Qaarkood waxay qabtaan shaqo edab leh oo ah helitaanka iyo sharraxaadda guryaha iyo aaggooda. Intooda badani waxay qaadaan komishanka 10% ama ka badan; qaar waxay bixiyaan caymis daboolaya khataraha qaarkood. Qaarkood waxay ku siin karaan dhowr guri dabaqyo gaagaaban, badanaa qiimahoodu qaali yahay maalintii.
Dabayaaqada guga iyo bilaha xagaaga, guryaha suurad wacan ayaa laga yaabaa inay yaraadaan. Haddii qorshayaashaadu ay si caddaalad ah u socdaan xilliyadaas, waxaad caqli ku lahaan lahayd inaad "u sii haysato" cutub si aad u horumarsan. Milkiilayaashu waxay badanaa weydiistaan ​​deebaaji aan la soo celin karin oo gaaraya 50% wadarta kharashka joogitaankaaga. Lacagta la bixiyaa waxay u dhaxeysaa min lacag bixinta illaa PayPal ama (mararka qaarkood) kaarka lacag bixinta. (Aad uga taxaddar sida iyo cidda aad la wadaagayso lambarka koontada lacag-bixin kasta.) Waa inaadan wax lacag ah ugu dirin sanduuq kasta oo boosto ah ama meel la mid ah ama koonto… xitaa ka dib markaad ku beddelanayso emayllo milkiile la sheegayo; badankood kama badna khiyaanooyinka "indhoolayaasha" si lacagtaada loo qaato.
Maamulka magaalada ayaa soo saaray sharciyo u baahan mulkiilayaasha inay kireystaan ​​guryaha muddo gaaban si ay u soo ururiyaan canshuur hore looga qaadi jiray kaliya hoteelada. Canshuurahaan la taaban karo ma qaadi karaan milkiilayaasha qaar, ama wey dalban karaan ayaga laakiin laguma sheegin sicirradooda illaa aad ka timaaddo. Dhaqan gelinta canshuuraha iyo aruurinta ayaa wali kujira xaalad isbedel ah.
Wakaaladaha qaar, kuwa kireystayaasha kireysta ama bogagga internetka, oo umuuqda kuwo laqanacsan, soo jiidasho leh ama sheeganaya sumcad, uma hoggaansamaan sharciga Faransiiska si taxaddar leh loo kala sooco loona xusho milkiilayaasha guryaha iyo guryaha ay kirada ku bixiyaan. Waxaa jira tiro cayiman oo dammaanad qaad ah, kuwaas oo looga baahan yahay Faransiiska intaan la kiraysan guri, iyo caymis caymis, oo ujeedkiisu yahay ilaalinta kiraystayaasha inta ay joogaan.
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada Paris
In kasta oo waxa badan oo naysayers dhihi karaan ama aamini karaan, Paris wali waa magaalo amnigeedu xasiloon yahay. Tani kama hor istaageyso inay ku habsato jariimo yar yar, gaar ahaan jeebka jeebka lagu garaaco, iyo boobka. Khiyaanooyinka, oo ay jiraan kuwo badan, sidoo kale way badan yihiin, in kasta oo booliisku si tartiib tartiib ah uga hortagayaan. In kasta oo aan caadi ahayn, dhaca boorsada ayaa dhaca. Dembiyada rabshadaha waa dhif iyo naadir, laakiin waa ay sii kordhayeen sanadihii la soo dhaafay. Iska ilaali ATM-yada iyo meelaha kale ee laga yaabo in lacagtaadu ka muuqato. Lacagtaada iyo boorsadaada ku hayso jeebkaaga hore, iskana ilaali ATM-yada u furan banaanka, gaar ahaan habeenkii.
Dhowr ka mid ah hareeraha magaalada ee hareeraha magaalada (oo badanaa loo yaqaan Banaadir) sida La Courneuve, Saint-Denis, iyo Pantin ayaa caan ku ah khatarta iyo 'qallafsan' marka loo eego heerarka reer galbeedka, waana inaad taxaddar muujisaa markaad booqanayso meelahaas.
Booliska waxaa lagu heli karaa taleefan adiga oo garaacaya 17. Dhamaan saraakiisha booliisku kuma hadlaan Ingiriis, laakiin kuwa laga helo agagaaraha meelaha loo dalxiis tago ayaa had iyo jeer hadlaan. Badanaa waa kuwo saaxiibtinimo leh oo si qumman loo tegi karo waa inaad u baahatid.
Xatooyo gaadiidka dadweynaha
Métro iyo RER sidoo kale waa meel caan ku ah boorsooyinka. Si adag u xaji oo ka war hayso hareerahaaga. In kasta oo tareenadu badanaa camiran yihiin, haddii qof ku adkeynayo oo uu ku dul dul wareegayo, haddana waxay u badan tahay inay jeebabkaaga marayaan. Waa muhiim in la ogaado in badankood kuwani ay ka tirsan yihiin burcad. Burcaddani inta badan waxay adeegsadaan carruurta yaryar ee da'doodu ka yar tahay toddobada sano, iyadoo kooxo iyaga ka mid ahi ay ku wareegaan saldhigyada metro iyaga oo ka qaadaya dalxiisayaasha iyo dadka deegaankaba. Haddii ay jiraan koox ka kooban seddex ama in ka badan oo dad shaki ah raadinaya, ka taxaddar alaabtaada. Tani waa dhacdo caan ku ah khadka Métro 13 iyo RER B.
Xeeladaha guud waa laba ka mid ah oo kaa horjoogsanaya markaad iskudayeyso inaad fuusho tareenka dhulka hoostiisa mara, iyadoo laba gadaal kaa socdaan si deg deg ah boorsadaada. Ilbiriqsiyo ka hor intaan albaabadu xirmin, labada ayaa iska boodaya, adiga oo kaa tagaya metro adiga oo aan xitaa ogeyn waxa dhacay. U fiirso waxa dadka maxalliga ahi sameeyaan. Haddii qof kuugu digo inaad taxaddar yeelato, waxaa laga yaabaa inay jiraan noocyo shaki leh oo rajeynaya inay wax kaa xadaan. Sidoo kale la soco in taleefan-ka-qaadashada ay tahay dambiga ugu badan ee la soo sheego, iskana ilaali inaad ku isticmaasho taleefankaaga gacanka meeraha metro iyo metro lafteeda.
Jeebka ayaa ku shaqeeya khadadka tareenka (RER B) laga bilaabo garoonka diyaaradaha Charles de Gaulle illaa magaalada hoose ee Paris, oo dhex marta xaafadaha saboolka ah ee Seine-Saint Denis. Isku day inaad raacdid tareenada aan joogsiga lahayn ee u dhexeeya garoonka diyaaradaha iyo Paris saxda ah (Gare du Nord) - EKLI / EKIL oo ka yimaada Paris una socda CDG iyo KRIN / KROL oo ka yimaada CDG ilaa Paris. Kuwani way ka dhakhso badan yihiin waana ka yar yihiin kuwa kale.
Waxaa sidoo kale jiray dhibaatooyin la xiriira tuugada oo jir ahaan ula dagaallama dadka si ay u dhacaan hantidooda. Bartilmaameedka ugu caansan waa kuwa shandado iyo boorsooyin wata, yacni dalxiisayaasha. Tuuggu sida caadiga ah wuxuu falalkiisa ku qiimeeyaa xiridda albaabada. Tareenada cusubi waxay leeyihiin kaamirooyin meel walba, tuugada ayaa aad ugu yar inay adeegsadaan. Haddii kale, boorsooyin ku dheji santuuqa korka kursiga (taas oo aan macquul ka ahayn tareennada cusub) oo boorsooyinkaaga xaji si aan cidi u qaban oo markaas u baxsan. Aad ayey ugu yartahay inaad ahaato dhibbane haddii tareenku ay ku badan yihiin dadka deegaanka oo shaqada aadaya, badanaa saacadaha degdegga ah.
Wadayaasha tareenka ayaa si weyn uga warqaba dambiyadan waxayna badiyaa sugi doonaan dhowr ilbiriqsi inay ka baxaan saldhigga ka dib marka ay albaabadu xirmaan, waaba haddii tuugada ay si dhaqso leh uga soo boodaan alaabtoodii. Waxa kale oo jira xadhkaha xaaladaha degdegga ah ee qofku jiidi karo haddii uu doonayo inuu cayrsado kuwa weerarka soo qaaday. Dadku badanaa way ku caawin doonaan oo si farxad leh ayey u wici doonaan booliska haddii aadan haysan taleefanka gacanta.
Xatooyo goobaha dalxiiska
Jeebka jeebka waxay u badan tahay in laga helo iyagoo ka shaqeynaya goobaha dalxiisayaasha ciriiriga ah, markaa boorsadaada iyo taleefankaaga ha ku rito jeebkaaga hore isla markaana si adag u hayso boorsadaada marka ay ku jiraan dadka.
Meel caadi ah oo lagala soo baxo taleefanka / kaamerada / boorsada jeebka ayaa ku taal meelaha cuntada dalxiiska ku habboon ee ku baahsan Paris oo dhan halkaasoo miisaska bannaanka la soo dhigaa ay caadi ahaan ku habboon yihiin waddooyinka mashquulka badan. Dhaqanka guud ee ay sameeyaan dalxiisayaal badan oo reer galbeed ah ayaa ah inay shay qiime ahaan miiska saaran uga hadhaan (inta badan taleefannada casriga ah) hortooda. Qaar ka mid ah dambiilayaasha, oo u shaqeeya koox ka kooban saddex ilaa shan qof, ayaa u soo dhowaanaya miiskaaga oo ku riixaya wax u muuqda sahan si toos ah sankaaga hoostiisa taas oo ka hor istaageysa aragtidaada qiimahaaga. Inta xubnaha gaangiistu ay ku hadaaqayaan luuqad qalaad mid kale ayaa gacanta ka hoos mari doonta aragtidaada oo miiskaaga ka soo qaadaysaa sheygaagii qiimaha lahaa. Tani waxay dhacdaa si dhakhso leh (wax ka yar shan ilbidhiqsi) dembiilayaashuna way ku baaba'aan hareeraha geeska isla marka ay yimaadaanba.
Astaamaha muhiimka ah sida Louvre ama munaaraddii Eiffel waxaa la degay kooxo burcad ah oo jeeb-wadayaal ah, kuwaas oo sida caadiga ah ku shaqeeya kooxo ilaa shan ah. Ilaa nus dersin ka mid ah burcadan ayaa laga yaabaa inay ka hawlgalaan meel gaar ah oo caan ah, goob dadku ku badan yahay waqti kasta; mararka qaarkood waxaa jira dagaallo u dhexeeya kooxaha tuugta ah ee iska soo horjeeda. Soo-booqdayaasha Aasiya waxaa badanaa la bartilmaameedsadaa iyadoo loo maleynayo inay ka soo booqanayaan waddamada hodanka ah. Shaqaalaha goobta ayaa ka cawday in candhuuf lagu tufay, loo hanjabay, lagu xadgudbay ama ay weerareen kooxo jeebka jeebka ku dhaca; Louvre ayaa si kooban u xirmay sanadkii 2013 (sidoo kale munaaraddii Eiffel ee sanadka 2015) taasoo ay ugu wacan tahay mudaaharaadka shaqaalaha ee xaaladaha aan badbaadada lahayn oo ay ugu wacan tahay falal dambiyeed. Isku dayga Token ee ah in la geeyo bilays badan ma xallin dhibaatooyinka.
Ragga isku dayi doona inay xarigyo ku xirtaan farahaaga
Sacré-Cœur, waxaa jira rag badan oo isku dayi doona inay farta ama xargaha ku xiraan fartaada (oo badanaa loo yaqaan "string muggers"). Kaliya maahan inay dalbadaan lacag anshax xumo ah oo loogu talagalay dharka jaban (badanaa 15 over), waxay sidoo kale isku dayi doonaan inay jeebka ku ritaan ama ay kuugu hanjabaan xoog haddii aadan iyaga siin lacag. Badanaa waxay ku yaalliin salka taalada waxaana looga hortagi karaa qaadashada Funicular of Montmartre. Haddii kale, si dhakhso leh waad u mari kartaa iyaga oo aanad iska indha tiri karin, in kasta oo ay si dhib yar gacanta ugu soo dhigi doonaan dadka oo xitaa lagu yaqaan inay bartilmaameedsadaan carruurta dalxiisayaasha ah. Ku yeelista iyaga ayaa sababi kara fiiro aan loo baahnayn waxayna u horseedi kartaa inay dib uga noqdaan, laakiin taxaddar. Sacré-Cœur wuxuu u muuqdaa inuu yahay meesha kaliya ee ay ku shiraan, laakiin waxaa sidoo kale lagu arkay agagaarka Taallada Eiffel.
Iyaga ka sokow, waxaad arki doontaa dad badan oo ku wareegaya iyagoo leh alaab raqiis ah meelaha dalxiiska, gaar ahaan Trocadéro, Eiffel Tower, iyo Madxafka Louvre. Guud ahaan ma ahan kuwo edeb daran, laakiin wax ka iibsashada iyaga waa sharci daro waxayna dhaawaceysaa ganacsiyada yar yar. Dabcan, waxay kudhacaan boolis hortiisa, waxaana laga yaabaa inaad kudhamaato bartamaha is-riix!
Ka taxaddar agagaarka Barbès-Rochechouart iyo baararka ku dhow Moulin Rouge. Khiyaano wada jir ah oo caan ah ayaa halkan lagu ciyaaraa taas oo kugu kici doonta ilaa € 500. Wakiilada banaanka taagan ayaa kugu qasbi doona inaad gasho baarka kaliyana fiiri 5 daqiiqo. Isla marka aad dalbato cabitaan (qiyaastii 5 €), gabar ayaa kuu soo dhowaan doonta oo bilaabi doonta inay hadasho guud ahaan, waxayna ka baxdaa 10-15 daqiiqo. Ka dib wadahadal aan dhib lahayn oo aad la yeelato gabdhaha markaad dalbato biil, waxaad la kulmi doontaa lacag ah say 200-500 oo ah 'khidmadaha adeegga' ee adeegyada ay gabadhu bixiso! Haddii ay dhacdo inaad iska caabbido bixinta, bouncersku waxay bilaabi doonaan inay ku cabsi geliyaan si ay isugu dayaan inay lacag ugala soo baxaan boorsadaada. Xaaladahaas oo kale, ugu hanjabo inaad u waceyso booliska oo aad ku wargelineyso safaaradda deegaanka. Isku day inaad waqti iibsato oo aad bilowdo abuur ruckus. Si kastaba ha noqotee, ha isku dayin inaad dagaal la bilowdo kuwa soo kiciya. Xeeladani waxay caan ku tahay magaalooyin badan oo waaweyn oo Yurub ah.
Hal khayaano ayaa ku lug leh "waxtar" maxalli ah oo tikit kuu iibsanaya. Caadi ahaan, dalxiisayaashu waxay iibsadaan 1-maalin, 3-maalin ama ka dheer kaararka Paris Visite. Waxay kuu sheegi lahaayeen in tigidhkaagii safarka ahaa uu dhacay oo ay kuu keenayaan mashiinka tikidhada si aad u iibsato kaararka maalinta. Kadib waxay dooran doonaan kaarka 3 maalin ee dadka waaweyn (in kastoo aad tahay arday) waxayna si ula kac ah kuu tusayaan qiimaha shaashadda. Wax kasta oo kale waxay ku qoran yihiin Faransiis sidaa darteed waxba ma fahmi doontid. Waxay ku sii wadi lahaayeen inay ku iibsadaan kaarka deynta oo inta ay galayaan lambarka sirta ah, waxay kaa dhigayaan inaad dhabarka u jeediso. Kadib si dhuumaaleysi ah ayey tikitka ugu beddelaan tikidh hal safar ah oo ay ku weydiistaan ​​lacag bixinta tigidh 3-maalmood ah adiga. Dalxiisayaasha aan hubin ayaa bixin doona wadarta lacagta iyagoo u maleynaya inay tahay 1-maalin ama 3-maalin dhaaf marka kaliya tigidh aan waxtar lahayn. Iibso tikidhada naftaada si aad uga fogaato xaaladaha sidan oo kale ah, maadaama mashiinno lagu heli karo Ingiriisi iyo luqado kale. Haddii aad dareentid hanjabaad, wac booliska hanala dhaqmin tigidhka haddii ay xoog ku iibsadaan adigoon ku heshiin.
Khiyaano kale oo caan ah ayaa laga helaa hareeraha wabiga Seine waxayna ku lug leedahay giraan. Tani waxay ku lug leedahay tuugada “helitaanka” faraanti ay adiga ku siiyaan. Kadib waxay ku weydiinayaan inaad adigu leedahay. Markaad maya tiraahdo, waxay kugu adkaysanayaan inaad haysatid, iyagoo leh waxay kasoo horjeedaa diintooda ama ma xiran karaan faraantiyo. Daqiiqado yar ka dib, waxay ku weydiinayaan lacag aad ku iibsato wax aad cuni karto, aakhirkiina way ku raacayaan oo waxay noqdeen kuwo dhibsanaya. Waad ku qeylin kartaa ama u jiheyn kartaa aag ay suurta gal tahay inay booliis joogaan, markaas oo ay si dhakhso leh u cararaan.
Khiyaanada ugu badan (ka sokow jeeb-jeebka) ee qabsatay Paris duufaan tan iyo Juun 2011 waxay ku lug leedahay haweenka u imanaya dalxiisayaasha go'yaal ballanqaad ah. Waxay iska dhigaan inay yihiin dad dhagoole ah oo ururinaya lacag sadaqo ama mid kale. Mar alla markii lagugu mashquuliyo codsiga, qof gacansaar la leh ayaa boorsooyin kaa qaadaya oo alaabtaada la wareegaya. Intaas waxaa sii dheer, markii aad saxiixdo, waxay tilmaamayaan shay akhriyaya "ugu yaraan toban ku deeqid euro." In kasta oo ay marka hore ku adkaysan karaan tan, madaxaaga oo ruxaya kana fogaanaya waxay badanaa ka dhigeysaa inay ku caayaan qof kale. Haddii kale, si fudud u ruxrux iyaga oo cod weyn leh waa inay ka quustaan. Haddii ay ku jiraan koox ballaaran, sida caadiga ah, ka taxaddar alaabtaada! Tani waa xeelad si jeeb lagugu siinayo maadaama aad ku hareeraysan tahay. Waqtigan xaadirka ah, u qeylinta booliska waxay ka dhigeysaa inay si dhaqso leh u kala dareeraan. Tani badanaa waxaa laga helaa agagaaraha goobaha waaweyn ee dalxiiska, laakiin sidoo kale waxay dhibaato ku ahayd Gare du Nord, in kasta oo tan ay ka sii fiicnaatay.
Weligaa lacag ha ku khamaarin ciyaar 3-kaar ah maadaama aad waligaa khasaari doonto. Khiyaanadan waxaa ku ciyaaraya farshaxanno farshaxanno ah qaar ka mid ah buundooyinka ku yaal Wabiga Seine ee u dhow Eiffel Tower.
Waa fikrad fiican in laga fogaado xaafada Seine Saint-Denis, maadaama xaafadan loo yaqaan kooxo gaangis ah iyo faqri, in kastoo dano yar ay ka leeyihiin dalxiisayaasha si kasta (marka laga reebo Basilique de Saint-Denis, laakiin taasi waa oo ku dhow saldhigga métro). Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iska ilaaliso inaad kaligaa socoto habeenkii 18-ka iyo 19-ka sidoo kale, maadaama kuwani ay noqon karaan wax yar oo hoos u dhaca habeenkii. Dhibaato weyn ayaa ka jirta dhalinyarada ka socota xaafadaha buufiska ku nool oo dhibaato u geysta booliska. Haddii dadka deegaanku ka guurayaan, waxay u badan tahay iska horimaad. In kasta oo ay kooxahani si dhif ah u bar-tilmaameedsadaan dadka ka sokow booliiska, iska jir. Ka fogow xaalad u horseedi karta dagaal ama ka xun.
Guud ahaan, xusuusnow inaad ka feejignaato jeeb-jeebka, maadaama ay u dhaqmayaan iyagoo isku dayaya inay kaa mashquuliyaan. Iska ilaali inaad ku soo bandhigto taleefannada qaaliga ah ama lacag badan gaadiidka dadweynaha ama meelaha bannaan. Alaabtaada geli suunka lacagta ama jeebkaaga hore, laakiin waligaa ha ku ridan jeebabka dambe.
Dadka reer Parisi waxay caan ku yihiin inay noqdaan kuwo madax banaan, edeb daran oo isla weyn. In kasta oo tani inta badan ay tahay uun fikrad khaldan, habka ugu wanaagsan ee Paris lagula heshiin karaa weli waa inaad ku dhaqanto dhaqankaaga ugu wanaagsan, adigoo u dhaqmaya sidii qof "bien élevé”(Sifiican baa loo barbaariyay). Waxay sahli doontaa inaad si fudud wax uga ogaato.
Bannaanka kadiska ah ee Parisians si dhakhso leh ayey uumi doonaan haddii aad muujiso xushmad aasaasi ah. Fudud “Bonjour, Madame”Marka aad gelayso dukaan, tusaale ahaan, ama“Cafis-moi”Markaad isku deyeyso inaad qof soo jeediso, aad ayey muhiim u yihiin; dheh “Cafis”Ama ka fiican”je suis désolé”Haddii aad si kadis ah qof ugu dhacdo ama aad khaladaad kale u gasho. Haddii aad ku hadasho Faransiis ama aad isticmaaleysid buuga weedhaha xusuusnow inaad marwalba isticmaasho foomka sharka leh markaad lahadleyso qof aadan aqoon; tani waxay u beddeli kartaa kaaliyaha dukaanka ugu dhakhsaha badan inuu noqdaa caawiye dhoola cadeynaya ama deggenayaasha ugu murugsan muwaadin waxtar leh. Ixtiraamku waa mid aad muhiim ugu ah Faransiiska (meesha cayda ugu xun ay tahay in qof loogu yeero “mal élevé", Ama" si xun ayaa loo soo qaaday ").
Haddii aad kaliya ku baranayso hal weedh dheer oo Faransiis ah mid wanaagsan ayaa noqon doonta “Excusez-moi de vous déranger, monsieur / madame, auriez-vous la gentillesse de m'aider?”(Iga cafi dhibteyda, mudane / marwo, maheli laheyd naxariis si aad i caawiso?) - heerkan edeb darada ah wuxuu ku saabsan yahay midka ugu dhow ee imaan kara koox sixir ah oo lagu furayo martigalinta Paris. Haddii aad taqaanid xoogaa Faransiis ah, iskuday! Laakiin xusuusnow, sidoo kale, in dadka reer Parisianka ah ay leeyihiin meelo ay aadaan iyo waxyaabo ay qabtaan, marka haddii aysan waqti haysan oo ay jawaabi waayaan, shaqsi ahaan ha u qaadan. Dad badan oo reer Parisiyiin ah, waqti la siiyay, ayaa ka bixi doona dariiqadooda si ay u caawiyaan, gaar ahaan haddii aad dadaal u gasho inaad ku hadasho afkooda oo aad ula dhaqanto si asluub ​​leh.
Ajaanibta badankood waxay u muuqdaan inay iska indha tirayaan laba qawaaniin aasaasi ah oo xushmad ku saabsan tuubada iyo gaadiidka tareenka ee Paris. Haddii gaariga uu buuxo oo aad ku fariisato kursi isku laaban, waa inaad ka fiirsataa inaad istaagto. Haddii aad albaabka agtiisa istaagto, waxaa lagaa filayaa inaad u dhaadhacdo fagaaraha istaag si dadka gudaha ku jiraa ay u helaan jid ay uga baxaan. Markay baxaan, dib ayaad u noqon kartaa. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer ha filanin in kuwa kale ay sidaas oo kale kuu sameyn doonaan, haddii tareenku buuxo, u diyaar garow inaad hoos u sii degto waqti ku filan oo hore ah Marinka dhexdiisa, markaad albaabka riixayso, waxaa lagaa filayaa inaad u qabato qofka xiga, si uusan si kadis ah ugu xirmin Sharcigan waxaa si adag loogu arkay tuubada, iyo guud ahaanba meel kasta oo kale.
Intaas waxaa sii dheer, haddii aad u safreyso ama ka soo degayso garoonka diyaaradaha ama xarunta tareenka oo aad boorsooyin ku wadato, hubi inaadan xirneyn marinnada tareenka adigoo boorsooyinkaaga dhulka uga tagaya. RER B (oo ku xidha labada garoomada diyaaradaha ee Orly iyo Charles de Gaulle magaalada) wuxuu leeyahay sagxado boorsooyin ah oo ka sarreeya kuraasta (tareenada cusub, ma jiraan rackyaal noocaas oo kale ah oo ka sarreeya kuraasta, laakiin raajooyin loogu talagalay boorsooyinka inta u dhexeysa kuraasta qaar); waxaa fiican inaad adeegsato si aadan u xannibin wadada qof maxalli ah oo ka degaya tareenka ka hor inta uusan garoonka istaagin. Metro-ga iyo gaar ahaan RER-ka, ha ku fadhiyin kuraas dheeri ah boorsadaada. Waxaa jira kuraasta boorsooyinka iyo meelo u dhexeeya kuraasta.
Waxaa jira ganaaxyo culus oo loogu talagalay qashinka magaalada Paris, gaar ahaan saxarada eyga (inta badan waxaad kaheli doontaa baco balaastig ah oo fidiya hareeraha jardiinooyinka ama garoomada ciyaarta).
Isgaarsiinta ee Paris
Hal wax oo waxtar leh oo ku saabsan lahaanshaha degmooyin rasmi ah iyo lambarro leh oo ku yaal Paris ayaa ah inaad si fudud u sheegi karto meesha cinwaanku cinwaankiisu ku yaal boostada / lambarka boostada, oo aad si fudud ula imaan karto lambarka boostada / zip lambarka cinwaanka Paris haddii aad ogtahay degmadiisa . Xeerku waa uun ka-hor-dhigasho 750 ama 7500 xagga hore ee lambarka degmada, iyadoo 75001 uu yahay lambarka boostada / zip-ka ee 1aad iyo 75011 oo noqonaya boostada / zip lambarka 11aad, iyo wixii la mid ah. Kan 16-aad wuxuu leeyahay laba nambarka boostada / boostada, 75016 qaybta koonfurta Rue de Passy iyo 75116 waqooyiga; dhammaan guryaha kale waxay leeyihiin hal boosto / zip code.
Kaararka taleefanka waxaa laga heli karaa "tabacs" badankood laakiin hubi inaad ogtahay halka aad ka isticmaali karto markii aad iibsaneysid, maadaama meelaha qaar wali iibinayaan gawaarida gawaarida kuwaas oo ay adagtahay in loo isticmaalo sidii fiilooyinka waa naadir.
Magaalada Paris ayaa bixisa internetka oo bilaash ah iyada oo loo marayo 400 meelaha Wi-Fi ee magaalada laga helo, oo ay ku jiraan jardiinooyin badan oo dadweyne. Ka raadi shabakadda loo yaqaan "PARIS_WI-FI_" (oo ay ku xigto lambarro qaar) laptop-kaaga ama PDA-gaaga.
Fursadaha kale waxaa ka mid ah Starbucks, oo lacag la’aan ah. Waxa kale oo jira McDonald's, Columbus Café, iyo goobo Indiana Café ah oo gaar ah. Waxa kale oo jira shabakadda Wistro oo silsiladaha kafee ee madaxbannaan ay bixiyaan. Waxaad ku raadin kartaa degmo ahaan. Guud ahaan, makhaayado badan iyo makhaayado ayaa bixiya Wi-Fi bilaash ah.
Waxay caan ku tahay xaaladdeeda inay tahay "caasimada moodada", Paris ma ahan mid muxaafid ku ah labiska sida qof u maleyn karo Parisiansku way u dulqaadan doonaan dhamaan noocyada dharka ilaa iyo inta ay xidhayaan "avec style" (oo leh qaab). Taasi waa sababta aysan ragga inta badan u xiran dhar gaagaaban oo ka gaaban jilibka ka baxsan dhacdooyinka isboortiga: looma arko inay tahay wax aan fiicnayn laakiin waxaa laga yaabaa inay ka soo dhex muuqato dadka deegaanka; gaagaab waxaa loogu talagalay "ciyaal iskuul iyo ciyaartooy kubada cagta ah" oo keliya.
Duulimaadyada Adria, 94 r Saint Lazare 75009. Isniinta ilaa Jimcaha 09: 00-13: 00 iyo 14: 00-17: 00, Sa 09: 00-12: 00.
Wakaaladda Air France Opéra, 49 av Opéra 75002,.
Wakiilka Air France Jardin du Luxembourg, 4 pl Edmond Rostand 75006,.
Diyaaradda Croatia, Roissypôle Le Dôme Bât1 r de la Haye Tremblay en France BP 18913 95731 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX,.
BADAN Polish Airlines, 27 r Quatre Septembre 75002,. furan laga bilaabo Isniinta ilaa Cadceedda.
Shirkadaha diyaaradaha ee Royal Jordan, 38 avenue des Champs Elysees Paris - 75008, fax: + 33 1 42 65 99 02.
Diyaaradda Sacuudi Carabiya (Lignes Aériennes de l'Arabie Saoudite), 34 av George V 75008,.
Shirkadda Diyaaradaha ee Srilankan, 113 r Réaumur 75002,.
Diyaaradaha Suuriya, 1 r Auber 75009,.
Turkish Airlines, 8 Meel de l'Opera 75009,, fax: + 33 1 45 63 10 80. 09: 30-17: 30.
Safaaradaha & Qunsuliyadaha Paris
Australia, 4, rue Jean Rey, 75015 Paris,, fax: + 33 1 40 59 33 10.
Austria, 6, rue Fabert 75007 Paris / xafiiska qunsuliyada 17, avenue de Villars, 75007 Paris,, fax: + 33 1 45 55 63 65.
Burundi, 10-12, rue de l'Orme, Quartier d'Amérique, 75019 Paris,, fax: + 33 1 45 20 02 54. M–Th 09:00–13:00 14:00–17:00, F 09:00–13:00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Canada, 35, wadada Montaigne, 75008 Paris,, fax: + 33 1 44 43 29 86.
Shiinaha, 111, avenue George V, 75008 Paris / xafiiska qunsuliyada ee 20, rue Washington 75008 Paris,, fax: + 33 1 47 20 24 22, + 33 1 47 36 34 46 (xafiiska qunsuliyada).
Masar, 56, avenue d'Iéna, 75116 Paris,, fax: + 33 1 47230643. 09: 30-17: 30.
Itoobiya, 35, avenue Charles Floquet, Quartier du Gros-Caillou, 75007 Paris (agagaarka Eiffel Tower, La Motte-Picquet-Grenelle metro station),. M – Tu Th – F 9: 00–13: 00 14: 00-17: 00, W 9: 00–13: 00 14: 00–16: 00 (Dalbashada fiisaha subaxa hore, ka bixida galabnimada).
Finland, place de Finlande, 75007 Paris,, fax: + 33 1 45 51 63 23. Isniinta ilaa Jimcaha 09: 00-13: 00, 14: 00-17: 15.
Greece, 17, rue Auguste Vacquerie, 75016 Paris,, fax: + 33 1 47 23 73 85.
Indonesia, 47, rue Cortambert, 75116 Paris (Metro ugu dhow waa La Muette khadka 9),, fax: + 33 1 45 04 50 32.
Japan, 7, avenue Hoche, 75008 Paris,, fax: + 33 1 42 27 50 81.
Madagascar, 4, wadada Raphaël, 75016 Paris ,. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Holland, Rue Eblé 7-9, 75007 Paris,, fax: + 33 1 40 62 34 56, ✉ par@minbuza.nl. Mo-Fr 9 AM-5PM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Filibiin, 45, rue du Ranelagh / 4, Hameau de Boulainvilliers ,. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Saudi Arabia, 5, avenue Hoche 75008 Paris / qunsuliyada 29, rue des Graviers, 92200 Neuilly-sur-Seine,, fax: + 33 1 56 79 40 01.
Spain, 22, Avenue Marceau.- 75008 Paris,, fax: + 33 1 47 23 59 55. Isniinta ilaa Jimcaha 09: 00-13: 30, 15: 00-18: 00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Taiwan (Xafiiska Wakiilka Taipei), 78, rue de l'Université, 75008 Paris,, fax: + 33 1 44 39 88 12.
South Korea, 125, rue de Grenelle, 75007 Paris,, fax: + 33 01 47 53 00 41.
Turkey, 16, avenue de Lamballe, 75016 Paris / qunsuliyada 44, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt,, fax: + 33 1 47 12 30 50. 08:30 -13: 00.
Boqortooyada Ingiriiska, 35, rue du Faubourg St Honoré, 75008 Paris,, fax: + 33 1 44 51 32 34.
United States, 2, waddo Gabriel, 75008 Paris,, fax: + 33 1 42 66 97 83. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Vietnam, 62, rue Boileau, 75016 Paris ,.
Chantilly - Cajiib qasri 17-qarnigii iyo jardiinooyin (iyo goobta uu ku dhashay kareemka la kariyay). 25 min tareen raacid Gare du Nord
Chartres - Kaniisadda qarnigii 12-aad ee Notre Dame ee Chartres waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan dhismaha Gothic. 60-daqiiqo tareen raacid ah Gare Montparnasse
Disneyland Paris - Xaafada Marne-la-Vallée, bariga magaalada Paris, halkaasoo looga imaan karo gaari, tareen, RER, ama bas (tareenka / RER ayaa laga yaabaa inuu yahay kan kuugu fiican).
Fontainebleau - Waa magaalo taariikhi ah oo qurux badan oo ku taal koonfurta Paris (55.5 km ama 35 mi). Meel fasax ah oo isbuuc dhammaad ah ay u baxaan dadka reer Parisians, waxay caan ku tahay kaynteeda waawayn ee qurxoon, iyo château. 35 daqiiqo tareenka laga raaco Gare de Lyon
Giverny - Guriga dhiirrigelinta leh iyo jardiinooyinka rinji-yaqaanka ee Claude Monet waa maalin-safar keliya. Jardiinooyinka iyo ubaxyadoodu waa qaybta ugu xiisaha badan booqashada, markaa iska ilaali maalmaha roobka.
Lille - Baska 3½ saac (€ 5)
Dooxada Loire - waa meel qurux badan oo khamri laga sameeyo webiga Loire oo ay kujiraan chock dib u cusbooneysiin ah, oo ay kujiraan Chambord, iyo waliba magaalooyin qadiimi ah sida Blois, Orléans iyo Tours. Tareenadu waxay qaataan 1-2 saacadood laga bilaabo Gare Montparnasse iyo Gare d'Austerlitz.
The Orient Express, oo taariikh ahaan maamuli jirtay Paris-Istanbul, ayaa qayb ahaan dib loogu soo celiyay sidii tareen dalxiis xilliyeed raaxo leh, laakiin tikidhadu ma ahan kuwo jaban
Saint-Denis - Cidhifka woqooyi ee magaalada weyn, goobta ay ku taal Stade de France iyo St Denis Abbey, oo ah goob lagu aaso boqorada Faransiiska.
Versailles - On cidhifka koonfur-galbeed ee Paris, goobta of Sun King Louis XIV ee qasriga weyn. 20-40 daqiiqo tareenka wuxuu raacayaa RER (safka C) bartamaha Paris.
7 Hotel Eiffel Paris
Adagio Access La Difaaca Goob Charras Courbevoie Hotel
Hoteelka Adagio Access Paris La Villette
Hoteelka Adagio Access Paris Quai D'Ivry
Hoteelka Adagio Access Paris Eiffel Saint Charles Hotel
Adagio Access Philippe Auguste Hotel Paris
Adagio City Aparthotel La Difaaca Kleber
Hoteelka Adagio La Defense Esplanade Paris
Hoteelka Adagio Paris Bercy
Hoteelka Adagio Paris Buttes Chaumont
Hoteelka Adagio Paris Opera
Hoteelka Adagio Paris Tour Eiffel
Hoteel Ambassade Paris
Xanrunta Hotel Paris
Hoteelka Apostrophe Rive Gauche Paris
Hoteelka Arc De Triomphe Paris
Hotelka Art Art Batignolles Paris
Hoteelka Farshaxanka Congres Paris
Hoteelka Farshaxanka Eiffel Paris
Hoteelka Farshaxanka ee Paris
Hotelka Artus Paris
Hoteelka Ascott Arc De Triomphe Paris
Hoteelka Astor Saint-Honore Paris
Hoteelka Athenee Paris
Farshaxanka Austin's Arts et Metiers Hotel Paris
Dalxiiska Auteuil Eiffel Hotel Paris
Hoteelka Avalon Paris
Hoteelka Avia Montparnasse Paris
Hoteelka Aviatic Paris
Guryaha Belambra Les Criques Paris
Hoteelka Belfast Paris
Hoteelka ugu Fiican Western Albert Premier Paris
Hoteelka Galbeedka Alise Paris Montmartre
Hoteelka Galbeedka Allegro Nation ee ugu Fiican Paris
Huteelka Galbeedka Aramis Saint-Germain ee ugu Fiican Paris
Huteelka Galbeedka Au Trocadero ee ugu Fiican Paris
Hoteelka Galbeedka Aulivia Opera ee ugu Fiican Paris
Best Aux Ducs De Bourgogne
Best Galbeedka Bercy Rive Gauche Hotel Paris
Ugu Wanaagsan Galbeedka Bretagne Montparnasse Hotel Paris
Hoteelka Galbeed ee ugu Fiican Paris
Hoteelka Galbeedka Eiffel Cambronne ee ugu Fiican Paris
Hoteelka Galbeedka Elysees ee ugu Fiican Paris Monceau
Boqortooyada Galbeedka ugu Fiican Elysees Hotel Paris
Galbeedka Folkestone Opera Hotel ee ugu Fiican Paris
Ugu Fiican Galbeedka Faransiiska Yurub Paris Hotel
Best Galbeedka Gaillon Opera Hotel Paris
Hoteelka ugu Weyn Galbeedka 'Grand L'Univers Paris
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican Anjou Lafayette Opera Paris
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican De Neuville Paris
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican De Weha
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican Eiffel Auteuil
Huteelka Galbeed ee ugu Fiican Faubourg Saint Martin Paris
Hoteelka Galbeed ee ugu Fiican Le Montparnasse
Hoteelka Galbeed ee ugu Fiican Mercedes Paris
Hoteelka Galbeed ee ugu Fiican Montmartre
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican Plaza Elysees Paris
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican Ronceray Opera Paris
Hoteelka Galbeed ee ugu Fiican Rabitaanka Versailles Guyancourt
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican Victor Hugo Paris
Galbeedka Jardin de Cluny Hotel ee ugu Fiican Paris
Ugu Wanaagsan Western La Tour Notre Dame Hotel Paris
Hoteelka Galbeedka Le Nouvel Orleans ee ugu Fiican Paris
Ugu Wanaagsan Galbeedka Le Patio Saint Antoine Hotel Paris
Bangiga bidix ee ugu wanaagsan Saint Saint Germain Hotel Paris
Tiyaatarada Galbeedka Galbeed ee ugu Fiican Paris
Huteelka Galbeedka Louvre ee ugu Fiican Piemont Paris
Hoteelka Galbeedka Marais Bastille
Huteelka Galbeedka Montcalm ee ugu Fiican Paris
Hoteelka Galbeedka Opera Batignolles ee ugu Fiican
Ugu Wanaagsan Galbeedka Opera D'Antin Hotel Paris
Kuwa ugu fiican Western Opera Grand Boulevards
Hoteelka Galbeedka Opera ee ugu Fiican Paris
Hoteelka Galbeedka Paris Meudon Ermitage ee ugu Fiican
Hotelka Galbeedka Paris Porte De Versailles
Hoteelka Galbeedka iyo Galbeedka Paris ee ugu Fiican
Ugu Fiican Western Premier Elysee Secret Paris Hotel
Hoteelka ugu wanaagsan Western Premier L'Horset Opera paris
Hoteelka ugu wanaagsan Western Premier Royal Saint Michel Paris
Ugu Fiican Reer Galbeedka Le Carre Folies Opera Paris Hotel
Premier Galbeedka ugu Fiican Louvre Saint Honore Hotel Paris
Hoteelka ugu Fiican Western Opera Diamond Paris Hotel
Premier Galbeedka Ugu Fiican Pergolese Hotel Paris
Huteelka Beerta ugu Fiican Premier Premier ee Paris
Premier Galbeedka ugu Fiican Trocadero La Tour Hotel Paris
Hoteelka ugu wanaagsan Western Prince Montmartre
Huteelka Galbeedka Ugu Fiican Latin Pantheon Paris
Ugu Wanaagsan Galbeedka Sevres Montparnasse Hotel Paris
Ugu Fiican Western Sydney Opera Hotel Paris
Ugu Wanaagsan Western Trianon Rive Gauche Hotel Paris
Fanaaniinta Ugu Wanaagsan Galbeedka Villa Des Paris
Ugu Wanaagsan Western Villa Henri IV Hotel Saint Cloud
Hoteelka Bridgestreet Marais Paris
Bridgetsreet Champs Elysees Apartment Magaalada Paris
Hoteelka Brighton Paris
Hotel Bristol Paris 8eme
Kalifoorniya Champs Elysees Hotel Paris
Huteelka Carlton ee Paris
Huteelka Castiglione Paris
Hoteelka Central La Defense Hotel Courbevoie
Xarunta Ville Etoile Hotel Paris
Hoteelka Chambiges Elysees
Huteelka Citadines Austerlitz Paris
Citadines Bastille Gare De Lyon Hotel Paris
Hotel Citadines La Difaaca Paris
Citadines Opera-Grands Boulevards Hotel Paris
Citadines Place D'Italie Paris Hoteel
Huteelka Citadines Republique Paris
Dalxiisyada Citadines Eiffel Paris Hotel
Degenaanshaha Magaalada Ivry Sur Seine
Uruurinta Clarion Etoile Saint Honore Hotel Paris
Huteelka Clarion Hotel Opera Pavillon Paris
Hoteelka Cluny Square Paris
Midabka Naqshadeynta Hoteelka Bastille Paris
Raaxo Hotel Andre Latin Paris
Raaxo Hotel Bezons la Difaaca
Raaxo Huteel Bobigny Paris Est
Raaxo Huteel Champigny Sur Marne
Raaxada Hotel Davout Nation Paris
Raaxada Hotel Lamarck Paris
Raaxada Hotel Montmartre Place du Tertre Paris
Raaxo Hotel Opera Drouot Paris
Raaxo Hotel Paris La Fayette
Raaxo Hotel Paris Sud Viry Evry
Raaxada Inn Saint Pierre Hotel Paris
Raaxada Nation Hotel Paris
Hotelka Concorde Montparnasse
Degenaanshaha Cadet Residence Paris
Hotel Cozy Paris
Barxadda By Marriott Paris Defense West Colombes Hotel
Hoteelka Des Mines Paris
Huteelka Disney ee Cheyenne Paris
Du Tiyaatarka Hotel Paris
Euro Hotel Mulkiilaha Saint Denis Basilique
Hoteelka Gaarka ah ee Bailli de Suffren Tour Eiffel Paris
Hoteel Gaar ah Bassano Paris
Hoteelka Gaarka ah ee Baudelaire Opera
Hoteel Gaar ah Brescia Paris
Hoteel Gaar ah Caravelle Paris
Hoteelka Gaarka ah Dacia Luxembourg Paris
Hoteelka Gaarka ah ee de l'Avenir Paris
Hoteelka Gaarka ah Elysees Regencia Paris
Hoteelka Gaarka ah ee Faransiiska Opera D'Antin Paris
Hoteelka Gaarka ah Jardin Le Brea Paris
Hoteel gaar ah la Demeure Paris
Hoteelka Gaarka ah Le A Champs Elysees Paris
Hoteel Gaar ah Magellan Arc De Triomphe Paris
Hoteel Gaar ah Monceau Wagram Paris
Hoteelka Gaarka ah Montfleuri Arc De Triomphe Paris
Hoteelka Gaarka ah Plaza La Fayette Paris
Hoteelka Koowaad ee Paris
Afarta xilli ee Hotel George V Paris
Faransiiska Eiffel Hotel Paris
Faransiiska Louvre Hotel Paris
Beerta Elysees Hotel Paris
Hotel Tulip Le Pera ee Paris
Dahabka Tulip Little Palace Hotel Paris
Dahabka Tulip Opera de Noailles Hotel Paris
Hambalyo Matic Hotel Paris
Hoteelka Hilton Paris La Defense
Holiday Inn Paris - Hoteelka Bastille
Holiday Inn Paris Airport Charles De Gaulle
Holiday Inn PARIS OPERA - WAXYAABAHA LAGA HELO
Hoteelka & Deganaanshaha Mercure Paris La Defense Parc
Hoteelka 121 Paris
Hoteelka Abbatial Saint Germain Paris
Hoteelka Amarante Beau Manoir Paris
Hoteelka Apollinaire Paris
Hoteelka Astoria Opera Paris
Hoteelka Astra Opera
Hoteelka Atelier Montparnasse
Hoteelka Atmospheres Paris
Hoteelka Balladins De Savigny Le Temple
Hoteelka Balladins Paris La Villette
Hoteelka Balladins Trappes
Hoteelka Baltimore Paris - Mgallery Collection
Hoteelka Beaugrenelle Tour Eiffel Paris
Hoteelka Ugu Fiican Galbeedka Xiddigaha Elysees
Hoteelka ugu Fiican Dalxiiska Galbeedka Eiffel Invalides
Hoteelka Britannia Paris
Hotel Campanile Paris 15 Dalxiis Eiffel
Hoteelka Carladez Cambronne Paris
Hoteelka Central Saint Germain
Hoteelka Champlain Paris
Hoteelka Champs Elysees Friedland Paris
Hoteelka Charma Paris
Hoteelka Claridge Paris
Hoteelka Corona Opera
Hotel Cozy Monceau Paris
Hoteelka Crayon Paris
Hoteelka Crystal Saint Germain Paris
Hoteelka de Banville Paris
Huteelka De Crillon Paris
Hoteelka De l'Europe Paris
Hoteelka De La Paix Paris
Hoteelka de la Tour d'Auvergne
Hoteelka De Nantes Paris
Hoteelka De Prony Paris
Hoteelka De Rouen Paris
Hoteelka De Sevigne Paris
Hoteelka De Turenne Paris
Hoteelka Des Grands Hommes Pantheon Paris
Hoteelka Des Trois Gares Paris
Naqshadeynta Hoteelka Sorbonne Paris
Huteelka Du Collectionneur Arc De Triomphe Paris
Hoteelka Eden Montmartre Paris
Hoteelka Edmond Paris
Hoteelka Edouard 7 Paris
Huteelka Eiffel Capitol
Hoteelka Eiffel Saint Charles Paris
Hoteelka Elysa-Luxembourg Paris
Hoteelka Elysees Bassano Paris
Hoteelka Elysees Mermoz Paris
Hoteelka Elysees Parc Monceau Paris
Hoteelka Elysees Paris
Hoteelka Excelsior Paris
Hoteelka Grenelle Paris Tour Eiffel
Hoteelka Hipotel Belgrand Paris
Hoteelka Jardin de Villiers Paris
Hoteelka Kyriad Canal Saint Martin Republique
Hoteelka La Belle Juliette Paris
Hoteelka La Bourdonnais Paris
Hoteelka La Villa Des Ternes Paris
Hoteelka Le 123 Elysees Paris
Hoteelka Le Derby Alma Paris
Hoteelka Le Faubourg Paris
Hoteelka Le Mareuil Paris
Hoteelka Le Petit Paris
Hoteelka Le Saint Gregoire Paris
Hoteelka Le Squara Paris
Hoteelka Lenox Saint Germain Paris
Hoteelka Les Jardins D'Eiffel Paris
Hoteelka Les Trois Poussins Paris
Hoteelka Libertel Gare De l'Est Francais Paris
Hoteelka Mac Mahon Paris
Hoteelka Massena Hotel
Hoteelka Median Paris Congres
Hoteelka Mercure Paris Levallois Perret
Hoteelka Mercure Paris Tour Eiffel Grenelle
Hoteelka Montmartre Jean Gabriel Paris
Hoteelka Moris Grands Boulevards Paris
Hotel Novotel Paris La Difaaca
Hoteelka Novotel Paris Porte D'italie
Hoteelka Novotel Paris Vaugirard Montparnasse
Hotel Asal ahaan Paris
Huteelka Paradis Paris
Hoteelka Pavillon Opera Paris
Hoteelka Pavillon Saint Augustin Paris
Gobollada Hoteelka Opera
Degenaanshaha Hoteelka La Concorde Paris
Hoteelka Richmond Paris
Karraaniga Huteelka Paris ee ay maamusho Sofitel
Hotel qarsoodi De Paris
Hoteelka Sevres Saint Germain
Huteelka Safiya Paris
Hoteelka Terminus Lyon Paris
Huteelka Thoumieux Paris
Hotel ku xigeenka Versa Paris
Hoteelka Volney Opera Paris
Hoteelka Waldorf Arc De Triomphe
Hoteel Washington Paris
Naqshadeynta Naqshadeynta Hotel Paris
Hoteel Fiican Paris
Kleber Hotel Champs Elysees Dalxiis Eiffel Paris
Kyriad Paris 13 Hotel Talyaani Gobelins
Hoteelka Kyriad Paris Cachan
Kyriad Paris Ouest - Puteaux - Hotelka La Difaaca
La Ferme Des Barmonts Guryaha Paris
Hotelka Lancaster Paris
Le 300 Degenaanshaha Paris
Hoteelka Le Bellechasse Paris
Hoteelka Le Burgundy Paris
Hoteelka Le Dauphin Puteaux
Hoteelka Le Lavoisier Paris
Le Prince Regent Deganaanshaha & Spa Paris
Hoteelka Le Relais Montmartre
Hoteelka Le Relais Saint Charles Paris
Huteelka Le Robinet D'Or Paris
Hoteelka Halyeeyga Paris - Saint Germain
Hotelka Les Hauts De Passy Paris
Hotelka Les Jardins De Montmartre Paris
Deegaanka Les Jardins du Roy Paris
Hotelka Mayflower Paris
Hoteelka Median Porte De Versailles Paris
Huteelka 'Mercure Paris Center Tour Eiffel Hotel'
Hotel Mercure Paris La Difaaca 5
Huteelka Mercure Paris La Villette
Huteelka Mercure Paris Voltaire Quartier Bastille
Hotel Mercure Sorbonne Paris
Deganaanshaha Metropole Opera Paris
Hoteelkeyga France Le Marais
Hoteelkeyga Faransiiska Montmartre
Hoteelkayga Faransiiska Opera St-Georges Paris
Huteelka Cusub ee Candide Paris
Hotel Cusub Lafayette Paris
Huteel Cusub Roblin Paris
Huteel Cusub Saint Lazare
Hoteelka Nogentel Paris
Huteelka Novanox Paris
Hoteelka Novotel Gare De Lyon Paris
Hoteelka Novotel Paris Bercy
Hoteelka Novotel Paris Gare Montparnasse
Hoteelka Novotel Paris Tour Eiffel
Hoteelka Novotel Suresnes Longchamp Paris
Hoteelka Novotel Paris Les Halles
Kaliya Suites Paris CDG Hotel
Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Xarunta Shirarka
Hoteelka Degenaanshaha Paris
Park & ​​Suites Sharafta Paris Grande Bibliotheque Hotel
Hoteelka Park Hyatt Paris Vendome
Hoteelka Pavillon Bercy Gare De Lyon Paris
Hoteelka Pavillon Nation Paris
Hoteelka Pershing Hall Paris
Huteelka Poussin Paris
Awoodaha Hotel Paris
Amiir Albert Lyon Bercy Hotel Paris
Hotelka Prince De Galles Paris
Huteelka Pullman Paris Bercy
Hoteelka Pullman Paris La Defense
Pullman Paris Tour Hotel Eiffel
Tayada Axel Opera Hotel Paris
Tayada Hotel Le Cardinal Rueil Paris
Tayada Hotel Malesherbes Paris
Tayada Hotel Opera Saint-Lazare Paris
Hotel Taariikhi ah Paris Orleans
Tayada Inn Nanterre La Difaaca Paris
Suites Tayada Bercy Bibliotheque Hotel Paris
Ramada Paris Tour Hotel Eiffel
Hotelka Regence Paris
Hotel Renaissance Paris La Difaaca
Goobta Renaissance Place Vendome Hotel Paris
Degaanka Des Arts Hotel Paris
Degaanka du Roy Hotel Paris
Hoyga Europe Hotel Clichy
Degenaanshaha Foch Hotel Paris
Degaanka Lagrange City Boulogne Paris
Degenaanshaha Nell Paris
Degenaanshaha Villa Daubenton Paris
Jacaylka Malesherbes Deganaanshaha Paris
Hotel Royal Elysees ee Paris
Hotel Royal Saint Germain ee Paris
Hotelka Saint Petersbourg Paris
Hotelka Saint Thomas D Aquin Paris
Hoteelka Saint Vincent Paris
Toddoba Hotel Paris
Hotelka Sofitel Paris Arc De Triomphe
Hoteelka Sofitel Paris La Defense
Hoteelka Sofitel Paris Le Faubourg
Hotel jilicsan ee Paris
Etoile Hotel qurux badan Paris
Shanta Hotel Paris
Hoteelka Timhotel Paris Gare De L'Est
Hoteelka Tronchet Paris
TRYP Hotel Paris Francois
Guryaha Villa Luxembourg Paris
eHalal Safarka Mart > Socdaalka Faransiiska Xalaal > Hagaha Socdaalka Xalaal ee Paris
Afar Qodob oo uu qoray Sheraton Bur Dubai	   
Boqortooyada Ingiriiska Socdaal Xalaal ah